August 2013 | ကမ်းလက်
in ဇင်ဝေသော်, ဘောလုံး - on 8/31/2013 - No comments
မန်စီးတီး ၂၊ ဟူးလ်စီးတီး ၀ တဲ့။ အရင်အပတ်က မန်စီးတီး ကာဒစ်ကို ၃ ဂိုး ၂ ဂိုး အရှုံးဟာ ခြေချော် လက်ချော် ဟုတ်ဟန်မတူဘူး။
Negredo ရဲ့ ခေါင်းနဲ့ Toure ရဲ့ ဖရီးကစ်က လွဲရင် တိုက်ဂါးတွေရဲ့ တိုက် စစ်ကို ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက် ခံနေရတာတွေ မနည်းလှဘူး။
ဟူးလ်စီးတီးကလည်း ပွဲဦးထွက် သုံးပွဲမှာ နှစ်ပွဲက ချဲလ်ဆီးနဲ့ မန်စီးတီး ဆိုတော့ ကံကောင်းလှသူတွေတော့ မဟုတ်လှဘူးလေ။
Pellegrini ရဲ့ ဘီလျံနာတွေက တစ်ဦးချင်းကြည့်တော့ ကြောက်စရာကြီး၊ အင်း.. ဒီပုံနဲ့ဆိုရင်တော့ အဝေးကွင်းမှာ ကာဒစ်တွေ မနည်းလောက်ဘူး။
လက်ရှိ တိုက်အားခိုက်အားနဲ့ဆိုရင် တိုက်ဂါးတွေ (ဟူးလ်စီးတီး) ဟာ ပရိသတ် အချစ်တော် ဖြစ်နေမှာသေချာတယ်။
အရင်တစ်ခါ အတန်းဆင်းရတုန်းကလည်း ပရိသတ် အချစ်တော် အနေနဲ့ ဆင်းသွားရတာ သူတို့ပဲ။
ဒီ တစ်ခါတော့ "ရဲသူတို့ မင်းဖြစ်ပါစေ" ဆုတောင်းနေမိတယ်။
အလုပ်သမား၊ အလုပ်ရှင်၊ အစိုးရ
in Politics, ဇင်ဝေသော် - on 8/31/2013 - No comments
1) အမျိုးသမီးတစ်ယောက် အလုပ်ခွင်ထဲမှာ ကိုယ်ဝန်ရတယ်။
2) အလုပ်ရှင်က ဒီကိစ္စကို သိတာနဲ့ တပြိုင်နက် အဲ့ဒီ အမျိုးသမီးကို ချက်ချင်း အလုပ်ဖြုတ်ပစ်တယ်။
3) ဒါကို မကျေနပ်တဲ့ အလုပ်ရှင်အဖွဲ့ထဲက တာဝန်ရှိသူတစ်ယောက်က အလုပ်သမား ဝန်ကြီးဌာနကို တိုင်ကြားတယ်။
ဒီ ပြဿနာကို အလုပ်သမား ဝန်ကြီးဌာနက ကြားဝင် ဖြေရှင်းပေးတယ်။
1) ဒီမှာ.. အလုပ်သမားရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စကို အလုပ်ရှင်က ဘယ် အတိုင်း အတာအထိ ဝင်ရောက် ဖက်စွက်ခွင့် ရှိသလဲ။
2) ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ယုံကြည်မှုတွေနဲ့ အစိုးရဥပဒေ ဘယ်လောက်အထိ ညီအောင် ညှိနိုင်မလဲ။
3) ဒီလိုတွေ ကြုံတွေ့လာရင် အစိုးရရဲ့ ရပ်တည်ချက်က ဘယ်လိုရှိမလဲ။
ဖြစ်ခဲ့တာတွေက စင်္ကာပူရဲ့ အကြီးဆုံး ချပ်ကျောင်းတွေထဲက တစ်ကျောင်း မှာ ဖြစ်ခဲ့တာပါ။
ချပ်ကျောင်းထဲမှာလည်း အုပ်လုပ်သေးတယ်၊ ဘာသာရေးက ခွင့်မပြုတဲ့ ကိစ္စ ကိုလည်း လွန်ကျူးတယ်ဆိုပြီး ချပ်ကျောင်းကော်မတီက ၆ လ နို့တစ်စ် မပေး ဘဲ ဖြုတ်တယ်။
ဒီမှာ အစိုးရဥပဒေနဲ့ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ယုံကြည်မှု ထိပ်တိုက်တွေ့ကြတယ်။
အစိုးရက ဘယ်အဖွဲ့အစည်းမှာပဲ လုပ်လုပ် အစိုးရရဲ့ အလုပ်သမား ဥပဒေ ဟာ အမြဲ အကြုံးဝင်နေရမယ်ဆိုပြီး မိန်းကလေးကို နစ်နာကြေးပေးဖို့ လမ်းညွှန်တယ်။ ပေးလည်း ပေးရတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်လောက်က အလှူငွေ အလွဲသုံးစားလုပ်မှုနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုင်ခဲ့တယ်။
အခု စီးတီးဟားဗတ်စ်ကို ကျကျနန ကိုင်နေတယ်။ ပြစ်မှုထင်ရှားရင်တော့ မ လွယ်ဘူး။ တကယ်ဆို စင်္ကာပူအစိုးရထဲမှာ ခရစ်ယန်တွေ များပါတယ်။
သမာသမတ်ကျတော့ လစာတွေ အများကြီးယူထားတဲ့ အစိုးရလို့ ပြောတာ က လွဲရင် အစိုးရရဲ့ စာရိတ္တက အပြစ်ပြောဖို့ ခက်တယ်။
ဘယ်ဘာသာမှ နိုင်ငံဥပဒေအထက် ရောက်မနေရဘူး ဆိုတဲ့ ပေါ်လစီပါပဲ။ ဒါမှလည်း ဘာသာစုံ စုပေါင်းနေထိုင်လို့ရမယ်။
in ကဗျာ, ပြန်လည်မျှဝေခြင်း - on 8/30/2013 - No comments
အချိန်ရရင် ဖတ်ကြည့်ကြပါအုံး၊ ဒါ ကဗျာဖြစ်သလား တဲ့။ ကြာပါပြီ၊ မဂ္ဂဇင်း ငယ် တစ်ဆောင်က အယ်ဒီတာ့ အကြိုက်ကဗျာပေါ့။ မဂ္ဂဇင်းကြီးတစ်ဆောင်ကတော့ ပယ်ပယ်နှယ်နှယ် တွယ်ထားတယ်။ ငရဲကြီး ရှစ်ထပ်နဲ့ ရှင့်ကို မုန်းတယ် ပဲ ပါပေမဲ့ ဒီ အတွေးရဖို့ အားစိုက်ရမယ်လို့တော့ ထင်ပါတယ်။
၉။ ရှင့်ကို မုန်းတယ်။
လူဝင်မှုနှင့် ဦးစော (၂ ) - မောင်သန့် 
in ဇင်ဝေသော်, အီးမေးထဲက စာ - on 8/30/2013 - No comments
(အီးမေးထဲက စာ။ နည်းနည်းတော့ ရှည်တယ်)
၁၉၃၅ ခုနှစ်မှာ သြဂုတ်လမှာ ဗြိတိသျှအစိုးရက မြန်မာနိုင်ငံ စီရင်အုပ်ချုပ်မှု အက်ဥပဒေ (၉၁ ဌာန အုပ်ချုပ်ရေး) ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်။ စက်တင်ဘာလမှာ အိန္ဒိယအစိုးရ အက်ဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းခဲ့တယ်။ စတင်အာ ဏာ တည်တာကတော့ ၁၉၃၇ ခုနှစ် ဧပြီ ၁ ရက်နေ့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအချိန်ကစပြီး မြန်မာနိုင်ငံဟာ အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ ပြည်နယ်တစ်ခု မဟုတ်တော့ ဘဲ ဗြိတိသျှ အင်ပါယာအတွင်းက သီးခြားနိုင်ငံတစ်ခု ဖြစ်လာတယ်ပေါ့။ ၉၁ ဌာန အုပ်ချုပ်ရေးလို့ ခေါ်ရခြင်း ကတော့ ဌာနပေါင်း ၉၈ ခုရှိရာမှာ ဘုရင်ခံက ၇ ခုကိုကိုင်ပြီး ကျန်တဲ့ ၉၁ ခုကို ပြည်သူ့ ကိုယ်စားလှယ် အမတ်တွေလက်ထဲ ထည့်တယ်ဆိုတဲ့ သဘောပါ။
ဒါကလည်း အမည်ခံ ဟန်ပြ သက်သက်လို့ပဲ ဆိုရမှာပါပဲ။ ဘုရင်ခံလက်ထဲမှာ ဗီတိုအာဏာကို ကိုင်ထားပြီး လွှတ်တော်ကိုလည်း ရုတ်သိမ်းနိုင်တယ်၊ ကက် ဘိနက်ကိုလည်း ဖြုတ်ပစ်နိုင် ပါတယ်။ ဒီ ၉၁ ဌာန အုပ်ချုပ်ရေးကိုတော့ တို့ဗ မာ အစည်းအရုံးကြီးနဲ့ ကျောင်းသားသမဂ္ဂတွေက အပြင်းအထန် ကန့်ကွက်ခဲ့ တာပေါ့။ နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေ အတွင်းမှာလည်း ပူးသတ်မယ်တို့၊ ခွာသတ် မယ်တို့ အယူအဆ အမျိုးမျိုးဖြစ်ပြီး ကွဲကြတာပါပဲ။
ဒါကြောင့် ၁၉၃၈ ဒုတိယ ကုလား-ဗမာ အဓိကရုဏ်း ဖြစ်ချိန်ဟာ ၉၁ ဌာန အုပ်ချုပ်ရေးကာလမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုရမှာပေါ့။ ဒါတင်မက ရေနံမြေသပိတ်နဲ့ တတိယ ကျောင်းသားသပိတ်ကြီးဟာလည်း ဒီကာလမှာ ဖြစ်တာပါပဲ။ ရေ နံမြေသပိတ်ကို အာရုံလွှဲလို၍ ကုလား-ဗမာ အဓိကရုဏ်း ဖန်တီးတယ်လို့ လည်း အဆိုရှိပါတယ်။
၁၉၃၇ ဧပြီ ၁ ရက်နေ့မှာ ဒီစနစ်ကို စတင်ကျင့်သုံးဖို့အတွက် အောက်လွှတ်ေ တာ် ရွေးကောက်ပွဲ ကိုတော့ ၁၉၃၆ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာမှာလုပ်ခဲ့တယ်။ ၁၉၃၇ မတ်လ ၁၁ ရက်နေ့မှာတော့ အစိုးရအဖွဲ့ စာရင်းကို အတည်ပြုတယ်။
ဒီ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်မှာ ပထမဆုံး အမတ်ချုပ် (နန်းရင်းဝန်) ကတော့ ဒေါက် တာ ဘမော်ပေါ့။ ပြောရဦးမယ် ကျုပ်တို့ လူမျိုးတွေအကြောင်း။ အစိုးရအဖွဲ့ အတည်ပြုပြီး နောက်တစ်နေ့မှာပဲ ဦးဘဘေတို့ ငါးပွင့်ဆိုင်အဖွဲ့က ညွန်ေ ပါင်း အစိုးရတစ်ဖွဲ့လုံးကို အယုံအကြည်မရှိ အဆိုတင်သွင်းပါလေရောဗျာ။ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးချစ်လှိုင်က ဧပြီ ၁ ရက်နေ့မှ စတင် တာဝန် ထမ်းဆောင် ရမှာဖြစ်လို့ ဘောင်မဝင်ဘူးဆိုပြီး ပယ်ချခဲ့တယ်။ ဖြစ်ပုံ ပြောပါတယ် အစိုးရ တာဝန်ဖြင့် မယူရသေးဘူး အယုံအကြည်မရှိအဆိုက စတင်တော့တာပဲ။
ဒါတင်လားဗျာ ဒီကြားထဲမှာ သူတစ်ပြန် ငါတစ်ပြန် အယုံအကြည်မရှိ အဆို တင် ပြီး ဖြုတ်ချ နေလိုက်ကြတာ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉၃၉ မှာတော့ နန်းရင်း ဝန် ဒေါက်တာဘမော် အစိုးရပြုတ်ကျပြီး နန်းရင်းဝန်ဦးပု ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရ တက်၊ နောက်တစ်ခါ ၁၉၄၀ စက်တင်ဘာမှာ နန်းရင်းဝန် ဦးပုအစိုးရ ပြုတ် ကျပြီး နန်းရင်းဝန်ဂဠုန်ဦးစော ဦးဆောင်တဲ့ အစိုးရတက်ပေါ့။ (ဘုရင်ခံကြီး ခမျာတော့ လွှတ်တော်ကိုကြည့်ပြီး သဘောတွေကျနေမှာပဲဗျာ။)
အစိုးရတစ်ရပ်ကို ဖြုတ်ချဖို့ဆိုတာလည်း လုံလောက်တဲ့ ပြဿနာတွေ ဖန် တီးနိုင်ဦးမှကိုး။ ဒါပေမယ့် ဒီနေရာမှာ ပြဿနာကို ဖန်တီးသူလို့ မစွပ်စွဲလိုပါ။ ဆက်စပ်၍သာ စဉ်းစားကြ ပါလေ။ မြန်မာပြည်မှာ ပြဿနာဖြစ်စေမယ့်လောင်စာတွေက အဆင်သင့်ပါ သောက်လက်စ ဆေးလိပ်တိုလေးကို တစ် ချက်တောက်လိုက်ရုံနဲ့ မီးဟုန်းဟုန်းထတောက်မယ့် ကောက်ရိုးပုံ တွေက အများသားလားဗျာ။
ကုလား-ဗမာ အဓိကရုဏ်း အပြီးမှာ ဒေါက်တာဘမော် အစိုးရကို ဖြုတ်ချ ဖို့ လုပ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ထောက်ခံမဲ ၆၁ မဲ၊ ကန့်ကွက်မဲ ၆၆ မဲနဲ့ မအောင်မြင် ခဲ့ဘူး။
အလုပ်သမားသပိတ်တွေ ကျောင်းသားသပိတ်တွေ ဖြစ်တယ်။ ဗိုလ်အောင်ကျော်ကျတယ်။
ဒါနဲ့ ဒေါက်တာဘမော်အစိုးရကို ထပ်ဖြုတ်ချတယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ ထောက်ခံမဲ ၇၀ မဲ၊ ကန့်ကွက်မဲ ၃၇ မဲနဲ့ ဒေါက်တာ ဘမော် အစိုးရ ပြုတ်ကျတယ်။ ဦးပု အစိုးရတက်တယ်။ ဦးပု အစိုးရကိုလည်း အကြိမ် ကြိမ်ဖြုတ်ချကြတာပဲ။
ဒီကြားထဲ မြန်မာပြည်နိုင်ငံရေး အခင်းအကျင်း တွေတော့ မပြောတော့ ပါ ဘူး။ နောက်ဆုံး ဦးပုအစိုးရလည်း ထောက်ခံမဲ ၈၁ မဲ၊ ကန့်ကွက်မဲ ၃၂ မဲ နဲ့ ပြုတ်ကြတာပဲ။ ဦးစောအစိုးရ တက်တယ်။ ဦးစောအစိုးရကိုလည်း ဖြုတ် ချဖို့လုပ်တာပဲ။
၉၁ ဌာနခေတ် လွှတ်တော်တွင်းက အိန္ဒိယအမျိုးသားတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့ ဥပဒေ ကြမ်းတွေအကြောင်း မပြောခင် ဒိုင်အာခီခေတ်က ဥပဒေကြမ်းလေးနှစ်ခု အကြောင်း ပြောဦးမယ်။ ဘာလို့လဲဆို အဲဒီဥပဒေကြမ်းနှစ်ခုကလည်း အိန္ဒိ ယ အမျိုးသားတွေကြားမှာ အတော်လေး လှုပ်လှုပ်ရှားရှား ဖြစ်သွားလို့ပါ။ အဲဒါက ပင်လယ်ရေကြောင်း ခရီးသည်များအပေါ် အခွန်ကောက်ခံရေး ဥပေ ဒကြမ်းနဲ့ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများ ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးရေး ဥပဒေကြမ်းတို့ပဲ ဖြစ် ပါ တယ်။ ဒီဥပဒေကြမ်းနှစ်ခု ဥပဒေပြုကောင်စီမှာ တင်တယ်ကြားရင်ပဲ အိန္ဒိယ အမျိုးသားတွေဟာ ကုလားသိုက် ကျားဝင်ကိုက် ဆိုသလို ပွက်လောရိုက် ကုန်တာပေါ့။
ပထမ ဥပဒေကြမ်းဟာ ၁၉၂၂ မတ်လမှာ တင်တာပါ။ ပင်လယ်ရေကြောင်း မှ မြန်မာပြည်ကို ဝင်လာသူတိုင်း တစ်ဦးလျှင် အခွန်တော်ငွေ ငါးကျပ် ပေးေ ဆာင်စေဖို့ပါ။ (ငါးကျပ်ကတော့ များတာပေါ့နော် အခုတောင် မှတ်ပုံတင် က ခြောက်ကျပ်ပဲ ရှိတာ။)
ဥပဒေနှစ်ခုလုံးကို အိန္ဒိယ အမျိုးသားတွေက အကြီးအကျယ် ကန့်ကွက် ကြ တာပေါ့။ နောက်ဆုံး ဥပဒေပြုကောင်စီက အတည်ပြုပေမယ့် အခွန်ကောက် ယူမယ့် ဥပဒေကို ဘုရင်ခံက ဗီတိုအာဏာသုံးပြီး ပယ်ချ လိုက်ပါတော့တယ် ။ ပြည်နှင်ဒဏ်ဥပဒေဟာလည်း သြဇာရှိတဲ့ အိန္ဒိယ ကုန်သည်ကြီးများနဲ့ အိန္ဒိ ယ အမတ်တွေက သူတို့လိုချင်သလို ပြင်ဆင်ပြီးမှ ၁၉၂၆ ခုနှစ်မှာမှ ဥပဒေ အဖြစ် ထွက်လာ ပါတော့တယ်။
၉၁ ဌာန အုပ်ချုပ်ရေးခေတ်ဟာ ငါးနှစ်တောင်မခံပါဘူး။ တိတိကျကျပြော မယ်ဆိုရင် လေးနှစ် ရှစ်လနဲ့ ခုနစ်ရက်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။
ဒီနောက်ပိုင်း ဂျပန်ဝင်တာပေါ့လေ။ ဒီကြားထဲ လွှတ်တော်ထဲ တင်သွင်းတဲ့ ဥပဒေကြမ်းတွေမှာ ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကိုပဲအဓိက ပြော ပါမယ်။
ပထမ ပြောချင်တဲ့ ဥပဒေကြမ်းက နေထိုင်မှု ဥပဒေကြမ်းပေါ့။ ၁၉၃၇ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ဥပဒေပြု လွှတ်တော်မှာ ဦးဘဖေက မြန်မာပြည်တွင် နေထိုင်မှု ဥပဒေကြမ်းကို တင်သွင်းတယ်။
ဒီဥပဒေအရ မြန်မာပြည်တွင်နေထိုင်သော နိုင်ငံခြားသားများ၏ အခြေအနေ အရပ်ရပ် ခွဲခြမ်း စီစစ်ရန်နှင့် မြန်မာပြည်တွင် နေထိုင်ခွင့်အတွက် အခကြေးေ ငွပေးရန် ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဥပဒေဟာ အိန္ဒိယ အမျိုးသားများ အစိုးရအမှုထမ်းခွင့်နဲ့ အခြား အခွင့် အရေးတွေကိုတော့ ကန့်သတ်တာ မရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့်လည်း အိန္ဒိယ အမတ် တော်တော်များများက လက်ခံကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒါကို အပြင်းအထန်ကန့်ကွက်သူကတော့ အိန္ဒိယအမျိုးသား မူဆ လင်အမတ် အက်စ်အင် ဟာဂျီပေါ့။ သူက “၁၉၃၅ ခုနှစ် ဥပဒေအရ အမျိုး မျိုးသော လူနည်းစု အမျိုးသားများ၏ (အဲဒီ လူနည်းစု လူနည်းစုနဲ့ပဲ အခု အချိန်အထိ လုပ်စားနေတုန်းပဲ) လုံခြုံမှုကို အကာအကွယ် ပေးထားချက်များ လုံးဝပျက်စီးသွားစေမည့် ဥပဒေဖြစ်သည်။
မကောင်းဆိုးဝါးများ ဆက်ကာ ဆက်ကာ လာစေရန် သန္ဓေတည်ခြင်း သြာ ဖစ်သည်။ ၁၉၃၅ ခုနှစ် ဥပဒေကို ချိုးဖျက်သည့် ဥပဒေဖြစ်၍ ဤ လွှတ်တော် က အတည်မပြုနိုင်။
ဘိလပ် ပါလီမန်ကသာ အတည်ပြုနိုင် သည်” ဆိုပြီး ပြောပါတော့တယ်။
ဒါ့ပြင် အမတ်ဖြစ်တဲ့ လွယ်အိပ်ကြီး ဦးဘလှိုင်ကိုလည်း ပုတ်ခတ်ပြောဆိုတဲ့ အတွက် ဦးဘလှိုင်က “အိန္ဒိယသားတို့သည် မြန်မာပြည်သို့လည်း လာေ ရာက်ငွေရှာသေးသည်။မြန်မာ့အရေးအခင်း များတွင် ဝင်ရောက်စွက်ဖက် ရန်လည်း ဘယ်တော့မှ လက်မနှေး။ ဒီလိုသာ ဆက်လုပ်နေဦးမည် ဆိုလျှင် အဓိကရုဏ်းများဖြစ်၍ ဆုံးမည်မဟုတ်ကြောင်း သတိပေးပါသည်။
အကယ်၍ အဓိကရုဏ်းသာ စတင်ဖြစ်ပွားမည် ဆိုလျှင် တစ်တိုင်းပြည်လုံး အုပ်ထိန်းမရ ငရဲပြည်ကဲ့သို့ တစ်ပြည်လုံး ပျံ့နှံ့သွားပေလိမ့်မည်” ဆိုပြီး ပြန် လည် ချေပပြောဆိုပါတယ်တဲ့။ ဦးဘလှိုင် သတိပေးပြီး တစ်နှစ်မပြည်မီမှာပဲ ဒုတိယ ကုလား-ဗမာ အဓိကရုဏ်းကြီး ဖြစ်ခဲ့တာပါပဲ။
ထူးခြားတာက ဟာဂျီရဲ့ ပြောဆိုချက်ကို အဲဒီအချိန်က လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးချစ်လှိုင်က လက်ခံခဲ့တယ်တဲ့။ ဘာကြောင့်လက်ခံလည်း ဆိုတာတော့ မသိပါ။ ဒီဥပဒေကြမ်းကတော့ ချောင်ထိုး ခံလိုက်ရတော့တာပါပဲ။
လွှတ်တော်ပြင်ပမှာ နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေ အားကောင်းနေတုန်း လွှတ်ေ တ်ာတွင်းမှာလည်း အစိုးရကို အားစမ်းတဲ့နည်းကတော့ ဥပဒေကြမ်းတွေ တင် သွင်းတာပေါ့ ဦးစောဟာ လယ်ယာမြေ ဥပဒေကြမ်းတွေ တင်ခဲ့တယ်။ သူ့ကိုထောက်ခံသူတွေကတော့ ငါးပွင့်ဆိုင် အမတ်တွေပေါ့။ ဦးစောက မျိုး ချစ် ပါတီကို ၁၉၃၇ သြဂုတ် ၁၄ မှာ တည်ထောင်ခဲ့တာ။ ရွေးကောက်ပွဲ လုပ် တုန်းက မျိုးချစ်ပါတီ မရှိသေးဘူး။
ဒီနေရာမှာ ငါးပွင့်ဆိုင်ဆိုတာဘာလဲ ဆိုတာ တစ်ချို့ မသိတဲ့လူလည်း ရှိမှာ မို့ ပြောပါ့မယ်။
(လိုရင်းကို မရောက်နိုင်တော့ဘူးနော်။ သည်းခံပါဗျာ။)
ငါးပွင့်ဆိုင်အဖွဲ့ဆိုတာ အဖွဲ့ငါးဖွဲ့ ပေါင်းထားတဲ့ အဖွဲ့ပါ။ ၁၉၃၆ ခုနှစ် ဧပြီ ၃၀ ကနေ မေ ၂ ရက်ထိ မန္တလေးမှာ ညီညွတ်ရေး အစည်းအဝေး ကျင်းပတဲ့ အခါ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့ တွေဖြစ်တဲ့ ပြည်သူပြည်သားအဖွဲ့၊ အမ်အေမောင်ကြီး ဦးစီးတဲ့ ခွဲခွာရေးအသင်းကြီးကို အမည် ပြောင်းထားတဲ့ မြန်မာပြည် လွတ် လပ်ရေးအဖွဲ့ (Free Burma)၊ ရေဦးဆရာတော် ကြီးမှုးတဲ့ ဗဟို ဂျီစီဘီအေ အဖွဲ့၊ ဦးဘစီ ဦးစီးတဲ့ သပိတ်မှောက် ဂျီစီဘီအေအဖွဲ့၊ ဦးဘဦး ဦးစီးတဲ့ မန္တလေး ၂၁ ဦး အဖွဲ့တွေကိုပေါင်းပြီး ညီညွတ်ရေး မူလဂျီစီဘီအေ အဖွဲ့ချုပ် ဆိုပြီး ဖွဲ့ထားတာပါ။
Five Flowers Party လို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။ အဖွဲ့တွေကလည်း အများ သားနော်။ အလျဉ်းသင့် ရင်တော့ ဒီအကြောင်းတွေ သတ်သတ်ရေးပေး ပါ့ မယ်။
ဒီအဖွဲ့ကြီးရဲ့ အကြီးအမှူးကတော့ ရေဦးဆရာတော် ဦးသြဘာသပါ။
ဥက္ကဋ္ဌကတော့ မက္ခရာမင်းသားနဲ့ ဒေါ်ခင်လေးတို့ရဲ့ သားငယ် ထိပ်တင်ဝ မင်းသားပေါ့။ ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်း ဒီအဖွဲ့ကြီးက အမတ်နေရာ ၄၆ နေ ရာနဲ့ အများဆုံးနိုင်ထားတာပါ။
ခုနကပြောခဲ့တဲ့ လွှတ်တော်တွင်း အားစမ်းတဲ့ လယ်ယာမြေ ဥပဒေတွေထဲက တစ်ခုကတော့ ၁၉၃၇ ခုနှစ်မှာ ဦးစောတင်သွင်းတဲ့ လယ်ယာမြေ ဥပဒေ ကြမ်းပေါ့။ ဒီဥပဒေကြမ်းအရ လယ်ယာမြေအားလုံးကို နိုင်ငံတော်ပိုင် ကြေ ညာပြီး လယ်လုပ်သူများကို လယ်ယာမြေများ ဝေခြမ်းပေးရန် ဖြစ်ပါတယ်။ လယ်လုပ်သူသာ လယ်ပိုင်ရမည်ဆိုတဲ့ စနစ်ပေါ့နော်။ အဲဒီမှာ အပြင်းအထန် ကန့်ကွက်သူကတော့ ဘယ်သူရှိမလဲ ချစ်တီးကိုယ်စားလှယ် ဗယ်လယန် ချစ်တီးယားပေါ့။ ဒေါက်တာဘမော် အစိုးရကလည်း ဒီဥပဒေကြမ်းကို ပယ်ချ ခဲ့ ပါတယ်။
အကြောင်းပြချက်ကတော့ ၁၉၃၅ ခုနှစ် ဥပဒေနဲ့ လွန်စွာ ဆန့်ကျင်နေလို့ပါတဲ့။
ဒါကိုမကျေနပ်တဲ့ ဦးစောက နောက်တစ်ခါ သီးစားခ ထိန်းသိမ်းရေး ဥပဒေ ကြမ်းကို နောက်ထပ် တင်ပြန်ပါတယ်။
ဒီဥပဒေကြမ်းအရ လယ်တစ်ကွက်မှ ထွက်ရှိတဲ့ စပါးရဲ့ လေးပုံတစ်ပုံကိုသာ လယ်ခအဖြစ် ပိုင်ရှင်ကိုပေးရန် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဥပဒေကြမ်းကိုလက်ခံဆွေးနွေး ဖို့လည်း လက်မခံပါဘူး။
မကျေနပ်လို့ ၁၉၃၇ စက်တင်ဘာမှာ လွှတ်တော်ကို ထပ်တင်ပြန်ပါတယ်။ ဒီ တစ်ခါတော့ လယ်ရှင်ကြီးတွေရဲ့ ကိုယ်စားလှယ် အမတ်တွေက အပြင်း အထန် ကန့်ကွက်ကြပါတော့တယ်။
ဘယ်လောက်ထိလဲ ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ အိန္ဒိယကုန်သည်ကြီးများ အသင်းက ဘိလပ် အစိုးရ မြန်မာပြည်ဆိုင်ရာ အတွင်းဝန်ထံကို စာရေးသား ကန့်ကွက်တဲ့ အထိပါပဲ။
အမတ်ဟာဂျီကလည်း ဒီဥပဒေကြမ်း တင်သွင်းတာဟာ ဦးစောအနေနဲ့ ကိုယ် ကျိုးအတွက် စတန့်ထွင်တာဆိုပြီး ပြောဆိုတိုက်ခိုက် တာပေါ့။ ဦးစော က လည်း ဒီဥပဒေကြမ်းကို မရုတ်သိမ်းပေးနိုင်တဲ့အပြင် အိန္ဒိယအမျိုးသား အ သင်း အဖွဲ့မှာ ဟာဂျီလိုလူမျိုး ခေါင်းဆောင် မလုပ်သင့်ကြောင်း၊ ဟာဂျီေ ကြာင့် ဒီတိုင်းပြည်တွင်းမှာ အပြန်အလှန် ရန်ငြှိုးထား မုန်းတီးမှုတွေ ဖြစ် လာနိုင်တယ်ပေါ့။ ဘိလပ်သား အမတ်တွေကိုလည်း လိုတစ်မျိုး မလိုတစ်မျိုး လုပ်တဲ့ သူတွေလို့ ပြောပြီး လွှတ်တော် ထဲမှာ အပြန်အလှန် ဖြဲကြတာပေါ့ဗျာ။
အစိုးရအနေနဲ့လည်း ၁၉၃၈ သီးစားချထားရေး ဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းပေးခဲ့ ပါသေးတယ်။
ဒါကိုလည်း ချစ်တီးတွေနဲ့ နတ်တူကွတ်တိုင် ချစ်တီးယားအသင်းက အပြင်း အထန်ကန့်ကွက်ပြီး ဟိုက်ကုတ် တရားလွှတ်တော်ကို လျှောက်ထားကြရာမှာ တရားလွှတ်တော်က ငွေမျက်နှာ ကြည့်ပြီး မြေရှင်တွေကို အနိုင်ပေးလိုက် တယ်တဲ့ဗျား။
ဒီလောက်ဆိုတော်ပါပြီ။ ခေါင်းစဉ်နဲ့လည်း တော်တော်လွဲသွားပြီလားမသိ။
ပြောချင်တာက ၉၁ ဌာန အုပ်ချုပ်ရေးခေတ်က နိုင်ငံရေးအားပြိုင်မှုတွေမှာ ဘာကို အသုံးချလည်းဆိုတာ နည်းနည်းလောက် သိစေချင်လို့ပါ။ အဓိကက လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေးပြဿနာ ကောက်ရိုးပုံ၊လယ်ယာမြေပြဿနာ ကော က်ရိုးပုံ၊ အလုပ်သမားပြဿနာ ကောက်ရိုးပုံ၊ ကျောင်း သား ပြဿနာကောက် ရိုးပုံတွေပါပဲ။
ဒီပြဿနာတွေကို မီးထိုးပေးတာကတော့ သတင်းစာတွေ ပေါ့ဗျာ။ အဲဒီအချိန်က ဦးစောဟာ သူရိယ သတင်းစာကြီးရဲ့ အယ်ဒီတာချုပ် ဖြစ်သလို အခြား နိုင်ငံရေး အဖွဲ့အစည်းတွေမှာလည်း လက်ကိုင်တုတ် သတင်းစာတွေ အသီးသီး ရှိကြပါတယ်။ ဒီအကြောင်းတွေကိုလည်း နုတ်သပ်သပ် ရေးပါဦးမယ်။ (ခုခေတ်နဲ့ ဘာ ကွာ လဲဟင်၊ ကျုပ်ကတော့ မသိ။)
ကဲ အခုတော့ လိုရင်းကို သွားကြရအောင်။ နေဦးဗျ တစ်ခုတော့ ပြော ချင်သေးတယ်။
အခု ခေတ်စားနေတဲ့ မျိုးစောင့်ဥပဒေ ဆိုတာကိုပါ။ အဲဒါလေးလည်း ထည့်ပြောဦးမှပေါ့နော်။
Labels: ဇင်ဝေသော်, အီးမေးထဲက စာ
in ဇင်ဝေသော်, ဘောလုံး - on 8/30/2013 - No comments
မန်ယူ၊ ချဲလ်ဆီးက အာဆင်နယ်၊ မန်စီးတီးနဲ့ယှဉ်ရင် အုပ်စုချောင်သလိုလို ရှိတယ်။
စာနယ်ဇင်းတွေက အာဆင်နယ် အုပ်စုအကျပ်ဆုံးဆိုပေမဲ့ တကယ်ကျပ်တာ က အုပ်စု GROUP H: ထင်ပါတယ်။ သူတို့လေးသင်းကမှ ဥရောပ အစဉ် အ လာ ရှိသူတွေချည်းပဲ။
1) Manchester United,
2) Shakhtar Donetsk,
3) Bayer Leverkusen,
1) Real Madrid,
4) FC Copenhagen
2) Paris Saint-Germain,
1) Bayern Munich,
2) CSKA Moscow,
3) Manchester City,
4) Viktoria Plzen
3) FC Basel,
4) Steaua Bucharest
3) Borussia Dortmund,
2) Atletico Madrid,
3) Zenit Saint Petersburg,
4) Austria Vienna
2) AC Milan,
in စာဖတ်သူသို့ပြန်စာ, ဇင်ဝေသော် - on 8/29/2013 - No comments
"စင်္ကာံပူရောက် မြန်မာ အဘိဓာန် လေးလဲ သိချင်လိုက်တာ" Hnin Wai Aung
2) Hope for high pay
3) High land price in home (Myanmar)
4) High blood blood pressure (Job stress)
5) ဟူး ......
အခုတော့ ဒါပဲ စဉ်းစားလို့ရတယ် ဗျာ။
ကမ်းလက် လပတ်လည် (NUSBS နှစ်ပတ်လည်)
in ကမ်းလက် လပတ်လည်, ဘာသာပြန် ရသ (ဓမ္မစာပေ) - on 8/28/2013 - No comments
စင်္ကာပူ အမျိုးသားတက္ကသိုလ် (NUS) ဗုဒ္ဓဘာာအဖွဲ့ချုပ်၏ (Buddhist Society) နှစ်ပတ်လည် "Wise Up!" မဂ္ဂဇင်းအတွက် ထိုအဖွဲ့ချုပ်၏ Spiritual Adviser ဖြစ်သည့် ဦးစိတ္တရ ရေးသားသည့် စာလုံးရေ (၃၀၀) ရှိ (ဘုန်းကြီးပဲ ရေးချင်ရာရေးပါစေဟူသော အထူးအခွင့်အရေး ရဟန်၊ ယူထား ဟန် မတူပါ) အမှာစာကို အမှတ်တရအဖြစ် ဘာသာပြန်ပေးထားခြင်း ဖြစ်ပါ သည်။ သူတို့မဂ္ဂဇင်းအတွက်ဖြစ်ပြီး စောင့်စည်းသင့်သည်ဟု ယုံကြည်သဖြင့် အင်္ဂလိပ်လိုတော့ ဖော်ပြမထားတော့ပါ။
Dhamma Sisters and Brothers
ကျွန်ုပ်လူငယ်ဘဝက လက်ဝှေ့ပွဲ တစ်ပွဲကြည့်ဖူးသည်။ လက်ဝှေ့သမား နှစ်ေ ယာက်စလုံးက ပညာလည်းကောင်း သတ္တိလည်းရှိကြသဖြင့် ဘက်ညီပြီး ကြည့်လို့ကောင်းသောပွဲ တစ်ပွဲဖြစ်ခဲ့၏။ ဆိုင်းသံဗုံသံများကလည်း စီညံ ၍နေလေသည်။
ထိုစဉ် နောက်ခုံမှာ ထိုင်နေသူတစ်ယောက်က ဆိုင်းသံ၏ စည်းချက်နဲ့အညီ ကျွန်ုပ်ခေါင်းကို ရိုက်နေတော့သည်။ ဒေါသတကြီးဖြင့် နောက်လှည့်ကြည့်စဉ် သူက သူတပါးကို ရိုက်နေမှန်းပင်မသိရှာသည့် ကလေးငယ်၏ အပြစ် ကင်း စင်သောမျက်နှာလေးကို တွေ့လိုက်ရသည်။ တုန့်ပြန်လိုသော ကျွန်ုပ်၏ ဒေါ သ လည်း သူ့ကိုမြင်ပြီး အေးငြိမ်းသွားခဲ့တော့သည်။ ဤသို့ သာမန်ဖြစ်စဉ်ေ လးများမှာပင် အကြောင်းရင်းမှန်ကို သဘောပေါက်လိုက်ပါက ဒေါသဖြင့်လောင်ကြွမ်းနေရသောအဖြစ်မှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရလေသည်။
နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး ပျော်ရွှင်မှုကို ရှာဖွေနေကြသည်။ လိုအပ်မှု ကို ရသူတို့ ပျော်ရွှင်ကြရသည်ဟု ဆိုကြ၏။ ဗုဒ္ဓဘာသာစိတ်ပညာအရ သမာ ဓိ၊ ပညာကြောင့် ရရှိသော ပျော်ရွှင်မှု၊ စွန့်လွှတ်ပေးလှူရမှုကြောင့် ရရှိသောပျော်ရွှင်မှုတို့အပြင် လောဘကြောင့်လည်း ပျော်ရွှင်မှု ရနိုင်သည်ဟု ဆိုသည်။ တချို့ ပျော်ရွှင်မှုက အပြစ်ကင်းပြီး တချို့ ပျော်ရွှင်မှုက အပြစ်ရှိသည်။ မိမိ၏ ပျော်ရွှင်မှုကို ရှာဖွေရင်း သူတစ်ပါးကို ဒုက္ခရောက်အောင် မသိ မသာ ပြုမူတတ်ကြလေသည်၊ သတိ၊ ပညာ အထူး ထားသင့်ကြ၏။
အကောင်းအဆိုး လောကဓံများနှင့် ကြုံရခိုက် အပျော်လွန်၊ ဝမ်းနည်းလွန် သည့် ခံစားမှုများ ရှိတတ်ကြ၏။ သတိထားသင့်သည်မှာ ဘုရားရှင်သည် ဒေ သနာအားလုံးကို ဒုက္ခသစ္စာဖြင့် မိတ်ဆက်ထားလေသည်။ ထိုကြောင့် သမ္မာ ဒိဋ္ဌိ ဦးဆောင်သည့် မဂ္ဂသစ္စာကို ပွားများဖို့ ကြိုးစားကြသလို ကြုံတွေ့ရမည့် ဒုက္ခသစ္စာကိုလည်း မေ့မထားသင့်။ ဒုက္ခအစုမှ လွတ်မြောက်မှုပေးနိုင်သော အရာသည်လည်း ပညာမှလွဲ၍ ဘာမျှမရှိပေ။
နောက်ဆုံးစကားဆိုချင်ပါ၏။ အခါတပါး၌ ဘုရားအလောင်းတော်သည် ပညာ ရှိဘုရင်တစ်ပါးအား အကြံဉာဏ်ပေးဖူး၏။ ထို ပညာရှိဘုရင်က ဘုရား အလောင်းတော်ကို ဆုအနေဖြင့် တစ်ဂါထာကို အသပြာ တစ်ထောင် ပေးခဲ့ ၏။
ထို အကြံဉာဏ်ကိုပင် လှေထိုးသားအားပေးလိုက်မိရာ လှော်တက်ဖြင့် အရိုက် ခံ ရလေသည်။ သတိ၊ ပညာ မူသင့်၏။
စာကြွင်း။ ။ စင်္ကာပူ အမျိုးသားတက္ကသိုလ် (NUS) ဗုဒ္ဓဘာာအဖွဲ့ချုပ်၏ လွန် ခဲ့သော လေးငါးနှစ်ခန့် က ဆောင်ပုဒ်သည် Wake Up! ဖြစ်သည်။ ထို့နောက် Light Up! ဖြစ်လာပြီး ယခု Wise Up! ဖြစ်လာသည်။ သတိ၊ ပညာကို ရည်ညွှန်းသည်။ နောင်နှစ်များတွင် ဘယ်ဆောင်ပုဒ်ကို သုံးကြမည် နည်းဟု ကျောင်းသားတို့က လျှောက်ထားရာ Shut Up! လည်းမဆိုး ဟု မြန်မာဘုန်းကြီးက ခပ်နောက်နောက် ဩဝါဒပေးထားကြောင်းလည်း သိရပါသည်။ ကံအလွန်ဆိုးလျှင် Shut Up! လည်း ဖြစ်လာနိုင်ဖွယ် ရှိ ပါကြောင်း...။
Shut Up! ကို Noble silence ဟု ဘာသာပြန်လျှင် ရနိုင်သည်ဟု မြန်မာ ဘုန်းကြီးက ဆက်လက်အကြံပေးသည်ဟု သိရပါသည်။
Labels: ကမ်းလက် လပတ်လည်, ဘာသာပြန် ရသ (ဓမ္မစာပေ)
**နေရာအမှန် ပြန်ရောက်သည့် ဘာသာရေး**
in 3D ဘာသာရေး, သီဟနာဒ - on 8/27/2013 - No comments
ဘာသာရေးနှင့် နိုင်ငံရေးကို ကြည့်မည်ဆိုလျှင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအတွက် ဘုရားမပွင့်မီနှင့် ဘုရားရှင်လက်ထက်ကာလကိုပါ အနည်းငယ် စောင်းငဲ့ ကြည့်နိုင်သည်။ ဘုရားမပွင့်မီကာလမှာ နိုင်ငံရေးသည် ဘာသာရေးဩဇာ လွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာ ကျပ်ကျပ်တည်းတည်း ရှိခဲ့သည်။ ခတ္တိယတို့က အာဏာ ရှိသော်လည်း ဗြဟ္မဏတို့ကို လွန်ဆန်ရန် အလွန်ခက်ခဲသည်။
ဘုရားရှင်လက်ထက် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဘုရင်များဖြစ်လာကြသည့် ဗိမ္ဗိသာရ မင်း တို့လက်ထက်မှာ ဗြဟ္မဏတို့လွှမ်းမိုးမှု အတန်ငယ်ရှိခဲ့သော်လည်း ရိုး စင်း သည့် ဗုဒ္ဓဘာသာဓလေ့ထုံးစံများကို ပို၍ လိုက်နာခဲ့ကြသည်။ များပြားလှသည့် ပိဋကတ်တော်အားလုံးကို နှိုင်းစာကြည့်လျှင် ရှင်ဘုရင်တို့ကို တိုက်ရိုက်ဟေကြားသည့် နိုင်ငံရေးတရားက အတော်ရှားပါးသည်ဟု ဆိုနိုင်ပါ သည်။ သုတ်ထဲမှာ ရာဇောဝါဒ သုတ်ကို တစ်လုံးတစ်ခဲလိုက်တွေ့ရသော် လည်း ရာဇောဝါဒ သုတ်ကိုယ်တိုင်ကပင် နိုင်ငံရေးစစ်စစ်ဟု ပြောရန် ခက်နေ ဆဲပင်ဖြစ်သည်။ အကျဉ်းအားဖြင့် ဘာသာရေးနှင့် နိုင်ငံရေး ရောထွေးရှက် တင် မရှိဟု ဆိုရပေမည်။
ဘာသာရေးနှင့် နိုင်ငံရေး ရောထွေးရှက်တင်ရှိလာသည့်ကာလက အသော ကခေတ်ဟု ဆိုရမည်။ သဘောထား မတိုက်ဆိုင်သူများ ယောနိသော မနသိ ကာရဖြင့် ဖတ်ရှုကြရန် မေတ္တာရပ်ခံလိုသည်။ အသောက အကြောင်းကျွန်ုပ် တို့သိထားသမျှက အလွန်နည်းပါးလှသည်၊ တစ်ဖက်အမြင်မျှသာ ဖြစ်သည် ဟု ဆိုခဲ့ဖူးပါသည်။ မှန်သည်ဟုလည်း ယုံကြည်ဆဲဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ သိ ထား၊ ဖတ်ထားရသမျှတွေကလည်း ရှာဖွေရင်း တွေ့တွေ့လာသောအထောက် အထားများ အရ မခိုင်မပိုင် ဖြစ်ဖြစ်လာလေသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းက အသောကမင်းကြီးနှင့် ပတ်သက်ပြီး ပထမဆုံး သာသနာပြုမင်း၊ မစ်ရှင်နရီ စနစ်ကို ပထမဆုံးကျင့်သုံးသောမင်းဟု ဂုဏ်ယူတတ်ကြသည်။ မှန်ပါသည်၊ အငြင်းပွားဖွယ်မရှိပါ။
သို့သော် ထို မစ်ရှင်နရီက နောင်နှစ်ပေါင်း ၂၀၀၀ နီးပါးတွင် ဥရောပတိုက်က ကျင့်သုံးလာသည့် သာသနာပြုခရီးစဉ်များနှင့် တူညီသော အချက်များရှိပါ သည်။ ဘာသာရေးကို ရှေ့ကလာစေပြီး တဖြည်းဖြည်း နိုင်ငံရေး သဘော တ ရားများ ပါလာသည်။ မယုံကြည်လျှင် အသောက ကျောက်စာများကိုကြည့်ပါ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ အငွေ့အသက်များပါဝင်သော်လည်း ဘုရားဟောများကို ရေး ထိုးခြင်း ထက် ဘုရားဟောများနှင့် ဆက်နွယ်နေသည့် သူပိုင် နိုင်ငံရေး အ ယူအဆများ ပိုများနေသည်ကို တွေ့ကြရပါမည်။ ဤသို့ဆိုသဖြင့် အသောက မင်းကြီးကို ဝေဖန်နေသည်ဟု အထင်လွဲစရာရှိ၏။
မဟုတ်ပါ။ လူ့သမိုင်း ခေတ်ဦးမှာ ဘာသာရေးနှင့် နိုင်ငံရေး ရောထွေးရှက် တင် ရှိနေသည် ဆိုသည့် အချက်ကို ဆိုလိုခြင်းသာ ဖြစ်ပါ၏။
ထို့အပြင် ရှေးခေတ်၊ အလယ်ခေတ် ဥရောပသမိုင်းကိုလည်း ကြည့်နိုင်ပါ သည်။ အိန္ဒိယနှင့် ဆင်ဆင်တူသည်။ ခရစ်ယန် ဘာသာရေးခေါင်းဆောင် များက နိုယ်ငံရေးမှာ အကြီးအကျယ် လွမ်းမိုးမှုရှိခဲ့သည်။ ကိုလိုနီခေတ်အထိ သူတို့ဩဇာ ငြောင်းခဲ့သည့်။ သို့သော် တဖြည်းဖြည်းနဲ့ နိုင်ငံရေးအပေါ်မှာ ဘာသာရေးဩဇာ သက်ရောက်မှု လျော့ပါးလာခဲ့သည်။ ယနေ့ ဥရောပနှင့် အမေရိကကို ကြည့်လျှင် ခရစ်ယန်ဩဇာ ရှိနေသေးသည်မှန်သော်လည်း ပုံစံတစ်မျိုးဖြင့်သာ ရှိနေတော့သည်။
ဆိုလိုသည်မှာ ပရိုတက်စတင့် ဘုန်းတော်ကြီးက အစိုရ၏ ဥပဒေနဲ့ပတ် သက် ပြီး အိမ်ဖြူတော်အရောက်သွားပြီး ဩဝါဒပေးလို့မရ၊ ပေးလို့ရသည်ဆိုစေ အိုဘားမားက လိုက်နာချင်မှ လိုက်နာမည်။ သီးသန့် ကွဲထွက်လာသည်။ လူ့ ကိုယ်ကျင့်နှင့် ပတ်သက်၍ကား ဘာသာရေးက ပြောမြဲ ပြောနေမည်သာဖြစ် သည်။
ဥရောပမှာလည်း ယနေ့ ပုတ်ရဟန်းမင်းကြီးသည် အလယ်ခေတ် ဥရောပ ပုတ်ရဟန်းမင်းလောက် နိုင်ငံရေးထဲ ဝင်စွက်ခွင့် မရှိတော့ပါ။ ခေတ်မီသော လူ့အဖွဲ့အစည်းများက အစိုးရများ အရွယ်ရောက်လာသည်။ ဘာသာရေး ကြိုးကိုင်မှုက လွတ်လာသည်။
အာရှမှာလည်း ဂျပန်၊ ကိုရီးယားစသော နိုင်ငံများမှာ ဤ လက္ခဏာများ တွေ့ ရသည်။ ခရစ်ယန်နိုင်ငံ အများစုက ဘာသာရေးနှင့် နိုင်ငံရေး ကွဲပြားလာနေ သည်။
မကွဲသေးသည်က မွတ်စလင်နိုင်ငံအများစုနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ နိုင်ငံအချို့ သာဖြစ်သည်။ ခေတ်သစ်ယုံကြည်မှု လူ့သမိုင်းအရ တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ ဒီလမ်းကို သွားနေသည်ဟု ယူဆရန်ရှိသည်။ ဤကိစ္စက အချိန်ယူရသည် ထင်ပါသည်။ လူထုရော အစိုးရ ဤ၌ အကြုံးဝင်ကြ၏။
အခြားဘာသာများကိုတော့ မဆိုလို၊ ဗုဒ္ဓဘာသာအရကတော့ ဘာသာရေးနှ င့် နိုင်ငံရေး သီးသီးခြားခြာရှိနေခြင်းသည် ဗုဒ္ဓဘာသာ၏ နေရာ အမှန် ကို ပြန်ရောက်တာဖြစ်ပြီး ဘုရားလက်ထက်တော်က အတိုင်း ပြန်ဖြစ်သွား သည်ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။
ရောဟိနီမြစ်ပဋိပက္ခကို နိုင်ငံရေးဟု အချို့ကဆိုချင်ကြသော်လည်း တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အပြန်အလှန် မသတ်ကြဖို့ပေးသော ဩဝါဒမျှ သာ ဖြစ်ကြောင်းသတိမူသင့်၏။
in ဇင်ဝေသော်, ပြုံးစိစိ - on 8/27/2013 - No comments
အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ နာရီပေါင်းများစွာ ကြာတဲ့ မေဂျာ အော်ပရေးရှင်း (ခွဲစိပ်ကုသမှု) ကို ခံယူရတယ်။ သူမ သတိပြန်လည်လာလို့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဂရုစိုက်မိတော့ ပြူ တွင်းပေါက်တွေမှာ လိုက်ကာ အထူကြီးတွေနဲ့ ဖုံးကာထား သလို သူမ မျက်စေ့တွေကိုလည်း အဝတ်နဲ့စည်းထားတာကို တွေ့ရတယ်။
ခွဲစိပ်မှုနဲ့ မျက်စေ့ အဝတ်စည်းတာကလည်း ဘာမှမဆိုင်။ ဘာဖြစ်လို့ ဒီလို စီ စဉ်ထားရတာလဲလို့ အနီးမှာရှိတဲ့ ဆရာဝန်ကို မေးတော့ ဆရာဝန်က
"ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံး ဆိုင်တွေ၊ အိမ်တွေ မီးရှို့ခံနေရတော့ (မီးလောင်နေတော့) တကယ်လို့ သမီးများ မေ့ဆေးအရှိန်ပြယ်၊ သတိပြန်လည်လာပြီး ဒါတွေကို ရုတ်တရက်မြင်လိုက်ရင် ငါတော့ သေပြီး ငရဲပြည် ရောက်နေပြီလို့ ထင်သွားမှာစိုးလို့ ဒီလို စီစဉ်ထားရတာ သမီးရယ်"
ဒေါက်တာက ရှင်းပြရင်း အားပေး သတဲ့။
သွေးပေါင်၊ သတိပဋ္ဌာန် နှင့် အထိတ်တလန့် ဖြစ်စဉ်
in 3D ဘာသာရေး, သီဟနာဒ - on 8/26/2013 - No comments
စနေနေ့က တရားထိုင်အပြီး ယောဂီအချိူ့နှင့် စကားပြောဖြစ်ခဲ့သည်၊ အင် တာဗျူးဟု ခေါ်လျှင်လည်း ရပေမည်။
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပင် ယောဂီနှစ်ယောက်က အိပ်ယာမဝင်မီ နှင့် အိပ်ယာ ထ ထချင်းအချိန်များတွင် တရား ရှူမှတ်ရတာပိုကောင်းသည်ဟု ပြောပြီး တက် တက်နေတတ်သည့် သွေးပေါင်များ ကျသွားပြီး ယခုဆိုလျှင် သွေးေ ပါင်ချိန်လိုက်တိုင်း ပုံမှန် ၇၅ နှင့် ၁၂၀ သာရှိနေကြောင်း ပြောကြသဖြင့် ဝမ်းသာရသည်။
ဒကာမ၏ အမျိုးသားက ဗုဒ္ဓဘာသာ ဟုတ်ဟန်မတူ၊ သို့သော် တရားပုံမှန် ထိုင်ပြီးနောက် သွေးပေါင်က ပါဖက်ဖြစ်သွားသည့် ကိစ္စကိုမူ အထူးအ ဆန်း ဖြစ်နေဟန်တူသည်။ တရားပုံမှန်မထိုင်ခင်ကဆိုလျင် သွေးတက်တတ်သောပြဿနာက သူ့ထက် သူ့ဇနီးက ပိုဆိုးသည်ဟု သူက ဆိုသေးသည်။ အခုတော့ တစ်နေလျင် နာရီ ဝက်ခန့် ပုံမှန်ထိုင်သည်ဟု ဆိုလေသည်။ နိဗ္ဗာန်ကို ဘေးမှာ အသာထားပြီး တရားရှူမှတ်ခြင်းက ပစ္စက္ခကျန်းမာရေးကို တိုးတက်စေသည်ဆိုလျင်လည်း ဝမ်းသာစရာ မဟုတ်ပါလား။
တလောကပင် တရားရှူမှတ်ခြင်းနှင့် ဆက်စပ်သည့် သိပ္ပံဆောင်းပါးတစ်ပုဒ် ဖတ်လိုက်ရသည်။ သူတို့က မဟာသတိပဋ္ဌာန်သုတ်မှာ ဘုရားရှင် မိန့်ထား သည့် နိဗ္ဗာနံ သစ္ဆိကရိယာယ ကို စမ်းသပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ တရားရှူမှတ်ခြင်း က လူ၏ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ဘယ်လိုဆက်စပ်နေသလဲ ဆိုသည့် အ ချက်ဖြစ်သည်။ သို့သော် သူတို့ ထင်ထင်ရှားရှား ရလိုက်သည့် အဖြေက လစ် ဘရေးရှင်းမဟုတ်ဘဲ ကွန်ပက်ရှင်း (Compassion) ခေါ် ကရုဏာဖြစ်နေေ လသည်။
တရားပုံမှန်ထိုင်သူတို့မှာ အတွင်း ဦးနှောက် ဖွဲ့စည်းမှုမှာရော အပြင်ပိုင်း အမူ အကျင့်မှာပါ ကရုဏာ သဘောတရားများ ပိုမိုအားကောင်းလာသည်ဟု ဆို ထားသည်။
အနောက်က သတိပဋ္ဌာန်ကို လေ့လာရာမှာ တမလွန်ဆိုသည်ထက် လက် ရှိနေရေးထိုင်ရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး စသည့် အကျိုးတို့ကို ပို၍ ရှေး ရှု ကြ၏။ ထို့ကြောင့် အကျိုးဆက်က မြင်သာထင်သာရှိ၏။ ထို့ကြောင့်ပင် လူသိပိုများလာခြင်းဖြစ်သည်။
ဖရီးသင့်ကား တစ်ယောက်က နိဗ္ဗာန်ကို မယုံပါ။ သို့သော် လက်ရှိဘဝ အ ကျိုး အတွက် တရားတော့ ထိုင်တတ်ကြသည်။ ၂၀၀၃ ခုက မိမိထံ ပထမ ဆုံးရောက်လာပြီး တရားထိုင်သူ သုံးယောက်တွင် နှစ်ယောက်က ဘာသာ မရှိသူမျာဖြစ်ကြသည်။ ဤကိစ္စ ရှိစေ။
အထက်က အကြောင်းကို ပြန်ဆက်ရလျှင် ယောဂီက သွေးပေါင်တွေ ပုံ မှန်ဖြစ်သွားပြီဆိုခိုက် မြန်မာ ဒကာ၊ ဒကာမများအိမ်သို့ ဆွမ်းစားသွားရာ ဒကာ၊ ဒကာမတို့ ချက်/ ညွှန်းဟင်းများကို (ဘုန်းကြီးကို ဘုန်းပေး လိုေ သာစေတနာဖြင့် ငရုပ်သီး သိပ်မစပ်ပါ ဟု လျှောက်တတ်ကြ၏၊ အမှန်မူ စပ်၏ စသည်) ဘုန်းပေးပြီး သွေးတက်သလိုလို ခံစားရသည့် ကိုယ့်အဖြစ်ကို စဉ်းစားမိရင်း ပြုံးမိသေး၏။
တကယ် ချိန်ကြည့်တော့ သွေးပေါင်က ပုံမှန်ပင်ဖြစ်၏။ တော်သေးသည်၊ သို့ မဟုတ်လျင်.............
in ဇင်ဝေသော်, သတင်း - on 8/26/2013 - No comments
မနှစ်က ထင်တယ်၊ အသက်အရှည်ဆုံးအဖွား မြန်မာပြည်မှာ ရှိတယ်ဆို ပြီး ဖေ့စ်ဘုတ်ပေါ်မှာ ဖတ်ကြ၊ ရှယ်ကြ တော်တော်လုပ်လိုက်ကြသေး တယ် ။ ပြဿနာက ယုံကြည်လောက်တဲ့ မှတ်တန်းမှတ်ရာမှာ မြန်မာက နိုင်ငံ အ လိုက်ကို အားနည်းတယ်။ တကယ်လို့ အဲဒီ အဖွားက ၁၂၆ နှစ် အမှန် ဆို ရင်တော့ ဘောလုံးပွဲကအစ အမြဲတန်း အသက်လိမ်ညာလာတဲ့ အကျင့် ဆိုးကြောင့် ကမ္ဘာက အသိအမှတ်မပြုတာလို့ ဆိုရလိမ့်မယ် ထင်တယ်။ ပြီးတော့ မြင်ရတဲ့ အရာလည်း မဟုတ်ဘူး။ အခု မြင်ရတဲ့ ကိစ္စပေါ်လာတယ်။ ဘယ်သူမှ ငြင်းလို့မရတော့ဘူး။
စင်္ကာပူကို လာပြီး ခွဲစိပ်မှုခံယူရရှာတဲ့ ကိုဝင်းဇော်ဦး အကြောင်းပါ။ သူ့ ဟို မုန်း ဓာတ်ကလည်း ထူးထူးခြားခြား အရပ်ကို မနားတန်း ရှည်စေတယ် တဲ့။ ကျန်းမာရေးကို မထိခိုက်ဘူးဆိုရင်လည်း ဒီ အတိုင်း ထားရရင် မဆိုးဘူး ။ လှောင် ပြောင်လိုစိတ်ရှိသူတွေကတော့ ရှည်လို့ပြောင်၊ ပုလို့ပြောင်ြေ ပာင်လှောင်နေကြမှာပဲ။
သူ့အရပ်က ၇ ပေ ခွဲလောက်တောင် ရှိနေပြီ၊ အကြိတ်ကို ခွဲမထုတ်ရင် အရပ် ရှည်လာဦးမှာဖြစ်ပြီး အသက်ကျတော့ တိုသွားမယ်တဲ့။
ဒါက မနေ့က စထရိတ်တိုင်းမ် ပေးထားတဲ့ ရက်ကော့တွေပါ။
Tallest man ever Robert Wadlow 272cm
Tallest man alive Sultan Kosen 31, Turkey, 251cm
ကိုဝင်းဇော်ဦး ၊ မြန်မာ၊ 36, 233cm
Yao Ming 33, China, 229cm
နာမည်နဲ့မလိုက်တာက ကမ္ဘာ့အရပ် အရှည်ဆုံး အမေရိကန်ပါပဲ။ Wad low ရယ်လို့။
ကမ္ဘာ့အရပ် အရှည်ဆုံးလူသား မပိုင်ရရင် နေပါစေ၊ ကိုဝင်းဇော်ဦးရဲ့ ခွဲစိပ် မှု အောင်မြင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
news from The Straits Times: Myanmar's 'tallest man' seeks medical aid in Singapore
မကြုံဖူးသဖြင့် ထူးသည် ၂ (ကျောင်းတွင်းမှတ်စု)
- on 8/25/2013 - No comments
ယနေ့ အသက် ၁၀၃ နှစ် ရှိပြီဖြစ်သော တရုတ်ဒကာမကြီးတစ်ယောက် အိမ် ကို ဒကာ၊ ဒကာမသုံးယောက်နှင့်အတူ ရောက်ဖြစ်သည်။ ဒေါ် ကွမ် ဟု သိရ သည်။ ပြောသံသာ ကြားဖူးသော်လည်း အသက် ရာကျော်ရှည်သူများနှင့် လူ ချင်း မတွေ့ဖူးပါ။ ကိုးဆယ်ကျော်များနှင့်ကား မကြာမကြာ တွေ့ဖူးသည်။ အသက် ၈၆ နှစ်ရှိ ဒကာမကြီး နယ်လီ တန် ဆိုလျှင်လည်း ကျောင်းကို သူမ ဘာသာ ဘတ်စ်ကားစီးပြီး လာတတ်သည်။ အသက် ၈၀ နှင့် ၉၀ ဆယ် အ တွင်း တက်တက်ကြွကြွရှိသည့် ဒကာ၊ ဒကာမကြီးများ ကျောင်းဝန်းကျင် မှာ တော်တော်တွေ့ရသည်။ စလုံးများ သက်တန်းပိုရှည်လာသည့် သာဓက ဟု ဆိုရမည်။
ယနေ့ သွားသာ သ္ပားခဲ့ရသည် ၁၀၃ နှစ် ရှိပြီဆိုမှတော့ ဘုန်းကြီးမှန်းမသိ၊ ဘာမှန်းမသိသာဖြစ်လိမ့်မည်ဟု ထင်မှတ်ထားသမျှ လုံးဝ လွဲမှားသွားသည်။
သူမအတွက် ကဿပဗောဇ္ဈင်္ဂသုတ်ကို စုပေါင်း ရွတ်ဖတ်သရဇ္ဈာယ်ပေးကြ သည်။ ဤသို့ ခေါင်းဆောင် ရဟန်းတစ်ပါး၊ နောက်လိုက် ဒကာ၊ ဒကာမ နှ စ်ယောက် သုံးယောက်နှင့်အတူ သက်ကြီးရွယ်အိုများထံ သွားရောက်ပြီး ပရိတ်ရွတ်၊ မေတ္တာပို့ပေးခြင်းကို ဤမှာ "ဓမ္မဓူတ" ခရီး ဟုခေါ်သည်။ လူနာ က ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်လျင်တော့ ရဟန်း ပါစရာ မလိုအပ်ပေ ၊ ဆေးကြော င့် ဘေးပင် ဖြစ်တန်ရာ၏။
(ဤ၌ ကဿပဗောဇ္ဈင်္ဂသုတ် ဟူသည် မြန်မာ ပရိတ်ကြီး ၁၁ သုတ် စာအုပ် မှာ ပါသည့် ဆင်ဆာဖြတ်ခံထားရသည့် တိုတိတိ သုတ် မဟုတ်၊ ဘုရား မုခ ပတ်တော်အစစ်၊ ဆင်ဆာဖြတ် မခံရသည့် ပထမ ဂိလာနသုတ်ဟုခေါ်သည့် သုတ် ဖြစ်သည်)
ဘုန်းကြီးကို မတွေ့ မမြင်ရတာ ဆယ်နှစ်ကျော်ပြီဟု သူမက မျက်ရည်ဖြင့် ဆိုလေသည်။ သားသမီးတို့က ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ကြလေသောကြောင့်လား စဉ်းစားစရာ ရှိသည်၊ သူတို့ ကိစ္စမို့ မမေးဖြစ်။
မိမိနှင့်အတူ ပါလာသည့် ဒကာ၊ ဒကာမတို့ မိခင်နှင့် အလွန်ရင်းနှီးပြီး သူတို့ ကို လည်း ကောင်းကောင်း မှတ်မိနေသည်။ အသံကလည်း အတော် "မာ" လေ သည်။
ထို အကြောင်း အပြန် ကားပေါ်မှာ ပြောခိုက် ဒကာက ကားမောင်းရင်း ဒီလ က ၇ လ မြောက် (သရဲကြီးလကို ဆိုလိုသည်) လ ဖြစ်သဖြင့် အတွင်းမှာ "အပ" ဝင်နေသဖြင့် ဤမျှ သန်မာဟန်တူကြောင်း အဆိုပြုသည်။
ထိုစဉ် တနင်္ဂနွေ ဓမ္မကျောင်းဆရာမ၊ သူ့ဇနီးက ဘယ်ကလာ အပ ဝင်နေရ မှာလဲ၊ ဝင်နေရင်တောင် ဒီလို ဘုရား မုခပတ်တော်များ ရွတ်ဖတ်ရာမှာဘယ် လို ပူးကပ်နေနိုင်မှာလဲ ဟု ယုတ္တိရှိရှိ ဆိုလေသည်။
မည်သို့ဖြစ်စေ အသက်ကလည်း ရာကျော်၊ သတိလည်း မလွတ်သည်ကေ တာ့ အံ့ဖွယ်တစ်ခု ဖြစ်သလို သူမထံ မကြာမကြာ သွားရောက်ပြီး ဗောဇ္ဈင်္ဂ သုတ် ရွတ်ဖတ်ပေးဖို့လည်း ဆုံးဖြတ်လိုက်မိသည်။
စာကြွင်း။ ။မြန်မာ ဒကာ၊ ဒကာမအချို့က သူတို့ ဗောဇ္ဈင်္ဂသုတ် က မြန် မာ ဗောဇ္ဈင်္ဂသုတ်နဲ့လည်း မတူဘူး ဆိုတတ်ကြသေး၏။
မတူဆို မြန်မာတို့က ဘုရားဟောကို ဖြုတ်၊ ဖြတ်၊ ကပ် (Cut and paste) ကတ် အင် ပေ့စ် လုပ်ထားသည်ကိုးဟုသာ.......။
အကြောင်း ညီညွတ်မှ ရေးပြီးသား " ပျောက်ဆုံးနေသည့် ဘုရားရှင်၏ ဆေး ဝါးများ" ဆောင်းပါး တင်ပါဦးမည်။
in ဇင်ဝေသော်, ပြုံးစိစိ - on 8/24/2013 - No comments
ဆရာမ။ ။ ညီညီရေ၊ အထက်လူကြီးနဲ့ မောင်း(ခလုပ်) ကျိုးနေတဲ့ သေနတ် ရဲ့ တူညီတဲ့အချက်က ဘာလဲ ပြောပြနိုင်မလား။
ညီညီ ။ ။ ပြောပြနိုင်ပါတယ် ဆရာမ။ "Both don't work but you can't fire them." ပါ။
ဆရာမ။ ။ ဒါဖြင့် အောက်လမ်းဆရာနဲ့ ဂေါက်သီးရိုက် သမားကရောကွယ်။
ညီညီ ။ ။ မြေကြီးကို တောင်ဝှေးနဲ့ရိုက်ရင် ရှေးတုံးက အောက်လမ်းဆရာ လို့ခေါ်ပြီး ဒီနေ့တော့ ဂေါက်သီးရိုက်သမားလို့ခေါ်ပါတယ် ဆရာမ။ မြေကြီး ကို တောင်ဝှေးနဲ့ရိုက်ရင် မြန်မာပြည်မှာတော့ အငြိမ်းစား ဗိုလ်ချုပ်ကြီး လို့ လည်းခေါ်ပါတယ် ဆရာမ။
လူတော်လူကောင်းများရောက်သွားလျှင် ငရဲပြည်လည်း တိုးတက်လာနိုင် သည်
in 3D ဘာသာရေး, သီဟနာဒ - on 8/24/2013 - No comments
(Jul ,25,2012 ရက် ဆောင်းပါးကိုအနည်းငယ် ဖြည့်စွက် ပြန်တင်ထားသည်)
ဂျပန်နိုင်ငံ ဘဏ်သူဋ္ဌေးတစ်ယောက်ဖြစ်သော Ryuho Okawa ဆိုသူက သူသည် ဗုဒ္ဓကို ဝင်စားသူဖြစ်ကြောင်း ကြေငြာခဲ့သည်။ သူသာမက သူ့ ဇနီး ကလည်း အက်ဖရိုဒီတေး (Aphrodite) ကို ဝင်စားသူဟု ဆိုခဲ့ပြန်သည်။
အာရှတိုက်ကား အယုံလွယ်၏။ အထူးသဖြင့် ဂျပန်နှင့် မြန်မာ (သို့) ဘားမီးစ် တို့က လူများ ပို၍အယုံလွယ်၏။ ရှိစေ။ ဤကိစ္စက ရေးလိုသောကိစ္စမဟုတ်။
ဗုဒ္ဓကို လူဝင်စားခဲ့သည်ဟု ကြော်ငြာခဲ့သော ထိုဘဏ်သူဋ္ဌေး အိုကာဝါနှင့် သူ့ဇနီးတို့ အရင်လက ကွာရှင်းခဲ့ကြသည်ဟု သိရပြန်သည်။ သို့ဆိုသော် ထိုအိုကာဝါသည် လူပျိုလူလွတ်ဖြစ်နေပြန်သည်။ ဤကိစ္စကလည်း ရေး လိုသောအကြောင်းမဟုတ်။
အဓိကရေးလိုသောအကြောင်းကား အိုကာဝါ၏ ပြန်လည်ပြောပြခြင်း ဇာတ် လမ်းများသာဖြစ်၏။ သူ့အဆိုအရ-
၁။ ဆရာကြီး ဗီသိုဗင် (Beethoven) သည် ဘုရားအလောင်းတို့ စံပျော်ရာကောင်းကင်ဘုံ၏ ခုနှစ်ခုမြောက်သော ဘုံ၌စံမြန်းနေ၏။
၂။ ကံမကောင်း အကြောင်းမလှဟု ဆိုရပေမည်။ ရီဗော်လူးရှင်း သီအိုရီ၏ ဖ ခင်ကြီး ချား(စ်) ဒါဝင်ခမျာမှာတော့ အလွန်နက်သော ငရဲ (Abysmal Hell) မှာ ကျရောက်ခံစားနေရသည်။
၃။ ဒါဝင်ကမှ တော်သေးသည်ဟု ဆိုရပေမည်။ သူ့ထက် အခြေအနေ ပို၍ ဆိုးဝါးသော ပုဂ္ဂိုလ်ကား ဂရိတ်ဖလော်ဆော်ဖာ ဖရက်ဒရစ်(ခ်) နစ်ရှေး (Frederic Neitzche) ဖြစ်ပေ၏။ သူ့ခမျာကား အောက်ဆုံးငရဲ၌ (Deepest Hell) ချိုးကပ်နေရသည်ဟု ဆိုလေ၏။
(ဂရိတ် (Great) ဖလော်ဆော်ဖာ ဟု ရေးထားသည်ကို သေသေချာချာ မဖတ်ဘဲ နစ်ရှေး က "ဂရိ" လူမျိုးမဟုတ်ဟု ရေးလာသော ကွန်မင့်လည်း ရှိခဲ့ဖူး၏)
မစ္စတာ ဒါဝင်နှင့် မစ္စတာ နစ်ရှေးတို့ ဘာ့ကြောင့်ငရဲဘုံ၌ ခံစားနေကြရသည် ဟူ၍ကား ရှင်းပြထားမှုမရှိပေ။ နောက်တောက်တောက် မစ္စတာ ဂျင်း(မ်) ကတော့ နစ်ရှေးက “ဂေါ့ဒ် အစ်ဇ် ဒက်(ဒ်) (God is dead)” ဟု ဆိုခဲ့သောေ ကြာင့် ဖြစ်ဟန်တူကြောင်း မှတ်ချက်ပေးထားသည်။
လွန်ခဲ့သော အနှစ် (၂၀) ခန့်က ပန်းကန်ပြားပျံ ဘာသာ တော်တော်ရေပန်း စားခဲ့သေး၏။ UFO- ဟုခေါ်သည်။ ထိုဘာသာခေါင်းဆောင်က ဆွစ်ဇာ လန်နိုင်ငံသား(ထင်သည်) ဖြစ်ပြီး သူ့နာမည်ကို မမှတ်မိတော့။ သူ၏အဆိုအရ သူသည် ပန်းကန်ပြားပျံမှ ဆင်းလာသော ဂြိုလ်သားနှစ်ယော က်နှင့် တွေ့ခဲ့ရကြောင်း၊ သူ့ကို ဤကမ္ဘာ၏ တမန်တော်အဖြစ် အခြားဂြိုလ် ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်များက ရွေးချယ်ထားကြကြောင်းဆို၏။ ဤကမ္ဘာမှ လူ သားများ၏ အသိဥာဏ်သည် အခြားဂြိုလ်များက ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်က များစွာနိမ့်ပါးနေကြကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် လူသားများ၏ အသိဥာဏ် မျှေ လာက်ဖြင့် အခြားဂြိုလ်ကမ္ဘာမှာ ရပ်တည်နိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်း ဆိုပြန်၏။
မိုဟာမက်တို့သည်လည်း ထိုဂြိုလ်က စေလွှတ်ခြင်းခံရသော တမန်တော်များ သာဖြစ်ပြီး တာဝန်ပြီးဆုံးသောအခါ ထိုဂြိုလ်က ပြန်လည်ခေါ်ယူထားသည်။ ယခုအခါ သူတို့သုံးဦးသည် ထိုဂြိုလ်ကမ္ဘာ၌ ပျော်ပျော်ပါးပါး ရှိနေကြသည်ဟု ဆိုလေ၏။
လူပုဂ္ဂိုလ်များ တာဝန်မှ အနားယူပြီး အေးအေးဆေးဆေးနေခြင်းနှင့် ဆင်ဆင် တူပေမည်။
ဆိုးတော့ မဆိုးပေ။ သူ့အဆိုအရ ငရဲကျနေသော ဘာသာရေးခေါင်းဆောင် မရှိ။
နောက်ဘာသာရေး အစွန်းရောက် အယူအဆပေါ်လာပြန်သည်။ ထို ယုံ ကြည်မှုအရ ထာဝရဘုရားကို မယုံကြည်သူတိုင်း ငရဲကိုကျရောက်ကြရ၏။ ထို့ကြောင့် ရှေးဦးစွာ ဂေါတမဗုဒ္ဓကိုယ်တိုင် ငရဲရောက်နေသည်ဟု ဆိုကြပြန် ၏။ ဗုဒ္ဓသာမကပါ၊ ထိုဝါဒကို လုံးဝအယုံအကြည်မရှိသော သိပ္ပံဖခင်ကြီး အိုင်း စတိုင်းခမျာမှာလည်း ငရဲရောက်ခဲ့ရပြန်၏။
“ကောင်းကင်ဘုံပင် ဖြစ်လင့်ကစား ဂေါတမဗုဒ္ဓလို၊ အိုင်းစတိုင်းလို၊ ဘာထရန် ရပ်ဆဲလ်လို၊ ဂျော့ခ်ျ ဘားနတ်ရှောလို၊ ချား(စ်) ဒါဝင်လို လူတော် လူကောင်း များ မရှိဘူးဆိုလျှင် အသိပညာများ နိမ့်ပါးကာ အလွန်မနှစ်မြို့ ဖွယ်ကောင်းေ သာ နေရာတစ်ခု ဖြစ်သွားနိုင်သည်။
ထို့အတူ ငရဲပင်ဖြစ်သော်လည်း အထက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များ ရှိနေမည်ဆိုလျှင် အသိ ဉာဏ်များ လင်းလက်ကာ နေချင့်စဖွယ် ဘုံဌာနတစ်ခု ဖြစ်သွားနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ် ဘယ်ဘုံကို သွားချင်ပါသလဲဟုမေးပါက ဂေါတမဗုဒ္ဓတို့၊ အိုင်းစတိုင်း တို့ရှိနေသော ငရဲကို သွားလိုပါသည်”
ဟု သရော်သံစွက်စွက်ဖြင့် ခပ်နာနာနှက်ခဲ့လေသည်။
ထို့ကြောင့် ယနေ့ခေတ်၏ လူသားအရင်းအမြစ် မူဝါဒကိုကြည့်ကာ အထက်ပါ အဆိုတို့ကို ထောက်ဆရင်း ကွန်ကလူးရှင်း ဆွဲလိုက်မိခြင်းဖြစ်ပါ၏။ ဘာ သာရေးပုတ်ခတ်လိုသော စကားတို့ဖြင့် မည်သူငရဲရောက်နေသည်ဟုဆိုစေ၊ ဤမျှတော်သော ပုဂ္ဂိုလ်များ ရောက်ရှိသွားမည်ဆိုလျှင် ငရဲပြည်လည်း တိုး တက်လာမှာမလွဲပေ။ လူတော်လူကောင်းများ နေထိုင်သောနေရာသည် တိုး တက်လာမည်မုချ မဟုတ်ပါလော။
ထိုထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ စကားများမှန်လျှင် စကြာဝဠာတစ်ခုလုံး ပါဝါရှစ်ဖ် (Shift) ဖြစ်တော့မည့်သဘော ရှိနေသည်။ ငရဲပြည်သည် အမှန်တကယ် တိုးတက်လာမည့်နေရာဖြစ်ပြီး အိမ်ယာမြေဈေးများ တဟုန်ထိုး ထိုးတက် လာစရာသာရှိတော့သည်။ ကောင်းကင်ဘုံက မြေကိုရောင်း၍ ငရဲဘုံ၌ ဝယ်ထားသင့်၏။
in ပြန်လည်မျှဝေခြင်း, သီဟနာဒ - on 8/23/2013 - No comments
ပါဠိကောလိပ်ထဲမှ ကျောင်းသူတစ်ယောက်က အီးမေးပို့တာ အလွန်ဝါသနာ ပါသည်။ သူမ ဖတ်မိသမျှထဲမှ ကောင်းနိုးရာရာလေးများကို မိတ်ဆွေများ (ကျောင်းသားများအုပ်စု အီးမေး) ထံ မျှဝေခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ တစ်နေ့လျှင် သူမ အီးမေးက ဆယ်စောင်မျှ ရှိသည်။ ဂျုတ်ပါသည်၊ ဘာသာရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ ယူကျု၊ ဗွီဒီယို အစုံ ပါသည်။ အတန်ကြာသောအခါ ကျောင်းသား တစ်ဝက်ေ လာက်က သူတို့အီးမေးထဲ မပို့ဖို့ အကြောင်းပြန်လာကြတော့သည်။
ထိုသို့ မပြောသေးသမျှ သူမကတော့ ပို့မြဲ ပို့နေဆဲပင်။ အထူးသဖြင့် လူအ များ မကြိုက်သည်က နိုင်ငံရေးဆန်သည့် အီးမေးများဖြစ်သည်။
အမှန်တော့ ကွန်ပြူတာရှေ့ထိုင်ပြီး အွန်လိုင်းပေါ် တက်လိုက်သည်နှင့် တပြိုင်နက် လို၊ မလို၊ ကြိုက်၊ မကြိုက်သော သတင်းအချက်အလက်များ များပြားလွန်းလှသည်။ ကိုယ်ဘာယူမလဲ ဆိုသည်ကသာ ကိုယ့်ရွေးချယ် မှု ဖြစ်သည်။ အင်ဖော်မေးရှင်းများဖြင့် ပြည့်နှက်နေသည့် ကွန်ပြူတာပေါ်၌ သူမ၏ အီးမေးများကြောင့်တော့ ထွေထွေထူးထူး ပိုပြီးလေးလံလာစရာ မရှိ ဟု ယုံကြည်မိသည်။
ဒါဖြင့် ဒီပြဿနာက အွန်လိုင်းပေါ်မှာပဲ ရှိတာလား။ မဟုတ်ပါ။ ဘဝ ဆိုတာ က ပင်လို မလို၊ ကြိုက် မကြိုက်သော အရာများဖြင့် ပြည့်နှက်နေ၏။ ဘဝထဲ မှ ယူသင့်သည်ထင်တာများကို (ဤ၌ တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက် မတူနိုင် သလို တူဖို့လည်း မလိုအပ်လှပါ) ယူပြီး ထွက်သွားကြရမည်။ ထို အမျိုးသမီး ၏ အီးမေးများစွာထဲမှ သဘောကျမိသည့် အီးမေးလေး ပါလာသည်။ သူမလို ပဲ ထပ်ရှယ်လိုက်မိသည်။
အဇ္ဈတ္တရှိ အကောင်း အဆိုး (အကောင်း အဆိုးမြေခွေးနှစ်ကောင်) အားပြိုင် မှုမှာဘယ်သူနိုင်မလဲ ဆိုတော့ "ငါ့မြေး၊ မင်း ကျွေးတဲ့ မြေခွေးနိုင်မယ်" တဲ့။
ဘယ်မြေခွေးကို အစာကျွေးမလဲက အွန်လိုင်း၊ အီးမေးနဲ့ မဆိုင်လှဟု ထင် သည်။
"One is Evil - It is anger, envy, jealousy, sorrow, regret, greed, arrogance, self-pity, guilt,
resentment, inferiority, lies, false pride, superiority, & ego.
empathy, generosity, truth, compassion & faith."
The grandson thought about it foraminute & then asked his grandfather:
**တစ်မူး၊ တစ်မတ်၊ မူး၊ မတ်**
in ဇင်ဝေသော်, နှစ်ပြားတန် အတွေး - on 8/23/2013 - No comments
(နိုင်ငံရေးနဲ့ ဘဏ္ဍာရေးအကြောင်း နှိုက်နှိုက် ချွတ်ချွတ်)
ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး၊ ပိုက်ဆံအကြွေစေ့ ရေတွက်တာနဲ့ အစိုးရ ရာထူးတွေ သတ်မှတ်တာ တူနေပုံလေး စဉ်းစားမိလို့ပါ။ ဆက်စပ်မှု ရှိသလား၊ မရှိဘူး လားလည်း မသိဘူး။
အခုတော့ အကြွေစေ့တွေ ပျောက်ကုန်လို့ တော်တော်ငယ်တဲ့ လူငယ်တွေဆို သိချင်မှတောင် သိတော့မယ်။
ငါးပြား စေ့၊ ဆယ်ပြား စေ့၊ တစ်မတ် စေ့၊ ငါးမူး စေ့၊ ပြီးတော့ ကျပ်စေ့ တဲ့။
မတ်စေ့ပြီးတော့မှ မူးစေ့ လာပေမဲ့ သူက ၁ မူး မဟုတ်ဘဲ ၅ မူးဖြစ်နေတယ်။
၅ မူးက ပြား ၅၀ ဆိုတော့ တစ်မူးက ဆယ်ပြား ပေါ့။
အစိုးရ ရာထူးတွေသတ်မှတ်ရာမှာ ရှေးတုံးကတည်းက မူးကြီး၊ မတ်ရာ သေ နာပတိ ဆိုတာရှိခဲ့တယ်။ ( သေနာပတိ က ပါဠိဖြစ်နေလို့ (ဦး) သီဟနာဒကို အဓိပ္ပါယ်မေးတော့ သေနာ က ပါဠိမဟုတ်တော့၊ မြန်မာစကားဖြစ် သွားပြီ ၊ သေနာ က သေနာ ပဲတဲ့၊ ရှင်းရော။ ပတိ ကတော့ ပါဠိ၊ အဓိပ္ပါယ်က ဘုရင်၊ အစိုးရ၊ အကြီးအမှုး၊ လင်သား တဲ့။ စိတ်မကြည်လို့ ကောင်းကောင်းဖြေပေး တာ မဟုတ်ရင်တော့ ကျနော်လည်း မတတ်နိုင်တော့ဘူး)
ထားပါတော့။ မူး၊ မတ်။ မူးပြီးမှ မတ်လာတယ်။ ဒါပေမဲ့ မတ် ကို အခုခေတ်မှာ အမတ်လို့ (ဘာ လီမန်အမတ်၊ ညာ လီမန်အမတ် စသည်) ခေါ်ပြီး မူးကိုေ တာ့ အမူး လို့ မခေါ်ကြဘူး။ တကယ်က ဘာ လီမန်အမူး၊ ညာ လီမန် အမူး စတာတွေလည်း ရှိနေရမယ်။
ပိုက်ဆံအကြွေစေ့ ရေတွက်ရာမှာ မူး၊ မတ်၊ ကျပ်။
ဒါဆို နှစ်ခါ ခွဲ မူးမှ တစ်မတ်၊ ဆယ်ခါပြန်မူးမှ ကျပ်ပြည့်မယ်။ မတ်ကလည်း လေးမတ်ပေါင်းမှ ကျပ်ပြည့်မယ်။ ဒီလိုလား။ ဘယ်လိုကြီးလဲ မသိဘူး။ သိပ်တော့ မမိုက်ဘူး။ နိုင်ငံရေးနဲ့ ဘဏ္ဍာရေးကိစ္စတွေက ရှုပ်ထွေး လွန်းတယ်။ ဉာဏ်မမီဘူး။
တို့ လူငယ်တွေ မဆိုးပါ
in ဇင်ဝေသော်, သတင်း - on 8/22/2013 - No comments
ခေတ်လူငယ်တွေက ဘယ်လို ဘယ်ညာ စသဖြင့် ပြောတတ်တဲ့ မိဘတွေ ဒီသတင်းမျိုးဖတ်သင့်တယ်။ သူတို့ ပျင်းလို့ လမ်းဘေးမှာ ဂီတာတီး၊ သီချင်း ဆိုတာ၊ ကွန်ပြူတာရှေ့က မထတာ၊ ချတ်ရုမ်းက မပြန်လာတာ ဒါတွေအား လုံးဟာ ဘာမှ မပြောပလောက်ဘူး။
အမေရိကန်လူငယ်နှစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့ ဂျိမ်းစ် အက်ဒဝါ့ဒ် (၁၅) နှစ်နဲ့ ချန်စီ လူနား ၁၆ နှစ်တို့က အလုပ်မရှိ ပျင်းလို့ဆိုပြီး အပြေးလေ့ကျင့်နေတဲ့ အော်ဇီ က ဘေ့စ်ဘောသမား ချဲရစ် လိန်းကို သေနပ်နဲ့ ပစ်လိုက်တာ သေရော။ ဥက္က လာဟိုးမားက ဒွန်ကန်မြို့မှာ။
သူတို့ ရာဇဝတ်မှု ကျူးလွန်ရခြင်းအကြောင်း ရဲအရာရှိ ရှင်းပြတာကို ဖတ် ကြည့်ပါအုံး။
"They were bored and just wanted to see someone die."
ပျင်းလွန်းလို့ တစ်ယောက်ယောက်သေတာမြင်ရရင် ကောင်းမှာဆိုပြီး ဆော် ထည့်လိုက်တာဆိုပဲ။
ဆရာမောင်သာရ ပြောတာကို အမှတ်ရတယ်။ လူငယ်တွေ လမ်းပေါ်မှာ ဆူတာ ဆူပါစေ၊ အဲ့ဒါ လွတ်လပ်ခြင်းရဲ့ သင်္ကေတ တဲ့။ ဂျပန်ခေတ်မှာဆို ဆူဖို့မပြောနဲ့ အသံတောင် မထွက်ဝံ့ဘူး (ဒီ အဓိပ္ပါယ်မျိုး) တဲ့။
သရဲကြီးလ နှင့် နံရံ၏ အခြားတစ်ဖက် (တိရောကုဋ္ဋ) သုတ္တန်
in 3D ဘာသာရေး, သီဟနာဒ - on 8/22/2013 - No comments
(မနေ့က ပြီးခဲသည့် General Transferring of Merits ပွဲအတွက် ဆောင်း ပါးဟောင်းကို အနည်းငယ် ပြင်ဆင်၊ ဖြည့်စွက်ပြီး ပြန်တင်လိုက်ပါသည်။)
သရဲကြီးလ ဟူသည် တရုတ်လူမျိုးများ လူနာ ( လ ကို အခြေခံ တွက်ချက်ေ သာ ) ပြက္ခဒိန်၏ ၇ လမြောက် လ ဖြစ်သည်။ ( ယခု နှစ်အတွက် စက်တင် ဘာ ၂၁ ရက် ဖြစ်သည် ) နံရံ၏ အခြားတစ်ဖက် သုတ္တန် ဟူသည် တိရော ကုဋ္ဋ သုတ်တည်း။ ( တီရ ဟိုမှာဖက်၊ ကုဋ တံတိုင်း၊ နံရံ ) ဘုရင် ဗိမ္ဗိသာရ ၏ ဆွေမျိုး ပြိတ္တာများကို အကြောင်းပြု၍ ဟောခဲ့သော သုတ် ( သို့ ) ဆာေ နသော ပြိတ္တာ သရဲများ ( Hungry ghosts ) ရှိသည်ဟု ထောက်ခံထားသော သုတ်လည်း ဖြစ်သည်။
စာပေ၌ တိုက်ရိုက် မလာသော်လည်း သရဲကြီးလ ရှိနိုင်၏ ဟု ယုံကြည်လိုက ယုံကြည်လို့ရသည်၊ မယုံကြည်က မယုံဘဲလည်း နေလို့ရသည်။ သို့သော် လူ့ ဘဝ ကတည်းက ဤ ( ၇ လမြောက် သရဲကြီးလ ) သညာကို စွဲစွဲ မြဲမြဲ ယူ ထားလျှင် သရဲ ဖြစ်ရာ၌လည်း အချိန် သိပ်မကြာသေးလျှင် ဤသညာက မပျောက်လောက်သေး ပေ။ ထို့ကြောင့် မယုတ် မလွန် ရှိတန်ရာ၏ ဟုသာ ဆိုချင်သည်။ ကိစ္စ မရှိ။ ဆွေးနွေးလိုသည်က လူမျိုးခြား သာသနာပြု ကိစ္စ ဖြစ်သည်။ သဘော မတူလျှင် ခွင့်လွှတ်ကြပါလော့။
လူမျိုးခြား သာသနာပြုဟူသည် မိမိယဉ်ကျေးမှူကို ဇွတ်အတင်း မိတ် ဆက်ြ ခင်း ထက် သူ့ ယဉ်ကျေးမှူထဲသို့ ဘုရား အဆုံးအမ ထိုးထည့် ပေးခြင်းဖြစ် သည်။ ရှင်းရန်လိုလမ့်မည်။ လူမျိုးတိုင်း၌ ယဉ်ကျေးမှူရှိ၏၊ ထို့ကြောင့် သူတို့ က ယဉ်ကျေးမှူကို မလို ဘုရား အဆုံးအမသာ လို၏။ ဤအချက်ကို သဘော ပေါက်လျှင် လူမျိုးခြား သာသနာပြုရာ၌ ပို၍ ခရီးပေါက်မည် ထင် သည်။ ( ကိုယ်တိုင်လည်း ဘာမှတော့ မဟုတ် )
ဤ၌ ပြည်ပ သာသနာပြု နှင့် လူမျိုးခြား သာသနာပြု မတူကြောင်း သတိ ထားသင့်သည်။ ပြည်ပ သာသနာပြု အောက်၌ ပြည်ပရောက် မြန်မာများ ပါဝင်၏။ လူမျိုးခြား သာသနာပြုဟူသည် တိုင်းတပါးသား၊ ယဉ်ကျေးမှုကွဲ လူမျိုးများကို သာသနာနှင့် မိတ်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။
ပုဂံ သမိုင်းကို ကြည်ရာ ရှင် အရဟံကြောင့် ထေရဝါဒ သာသနာ ရောက် သွားသော်လည်း ရှေးရိုးစွဲ နတ်၊ တန္တရ၊ မန္တရ တို့ မပျောက်ကွယ် ခဲ့။ ဘုရင် အနော်ရထာက အတင်း အကျပ် မကိုင်တွယ်သောကြောင့်ဟု သမိုင်း ပညာ ရှင်တို့ ဆိုသည်။ သို့သော် ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ဩဝါဒကများက ရှင်အရဟံ ထံမှ ရသည်၊ ရှင်အရဟံက လမ်းညွှန်လျှင် ထေရဝါဒ သာသနာအပေါ် သည်းချေခိုက်နေသော ဘုရင် အနော်ရထာက ရှင်အရဟံ၏ ဩဝါဒကို မေ သွ ဖီ တန်ရာ။ သို့သော် ( သို့သော်တွေများနေပြီ၊ သို့သော် လိုနေ၍ သုံးဦးအံ့ ) ပညာမြင့်လာလျှင် ကိုးကွယ်မှုလည်း မြင့်လာမည် ဟု ၂၁ ရာစုဆန်ဆန် ဘုရင် အနော်ရထာသုံးသပ်ခဲ့သည်။ ယုံကြည်မှုဟူသည် အင်အားသုံးပြီး ယုံ ကြည်စေ၍လည်း မရတတ်။
ဆိုလိုသည်မှာ ရှေးရိုးစွဲ အသည်းခိုက် ယဉ်ကျေးမှုတို့ကို ဒေသနာနှင့် လုံးလုံး လျားလျား မဆန့်ကျင်လျှင် သာသနာပြုတို့ ကိုယ်တိုင်ကပင် သူတို့ ယဉ်ကျေး မှုကို ဝေဖန် ပုတ်ခတ်နေမည့်အစား ဒေသနာနှင့် ညှိကာ ပို၍ အဓိပ္ပါယ် ရှိေ သာ ယဉ်ကျေးမှုဖြစ်အောင် လမ်းညွှန်တတ်ကြသည်။ တရုတ်တို့ သရဲကြီး ကိစ္စ ဆိုလျှင် အနော်ရထာ မဆိုထားနှင့် အလွန် ရက်စက်သော တရုတ် ကွန်မြူနစ်ပင် လက်မြှောက်ရသည်။ မရပါ။
ထို့ကြောင့် အနော်ရထာမှန်သည်။ လူထု နှလုံးသားထဲက အစိမ်း အကျက် နတ်တို့ကို အနော်ရထာလည်း ဆွဲမထုတ်နိုင်။ သူတို့ အသိဉာဏ်ကသာ ဆွဲထုတ် နိုင်ပေမည်။ အတုယူလိုက ယူလို့ရသည်။
တရုတ်လူမျိုးများ လူနား ပြက္ခဒိန်၏ ၇ လမြောက် လ ဖြစ်သည့် သရဲကြီးလ ကို သီဟိုဠ် ဆရာတော်ကြီး တစ်ပါးက " စုပေါင်း ရေစက်ချပွဲတော်- General Transferring of Merits " ဟု သုံးလိုက်သည်။ ဘာကိုမှ မီးရှို့ရန်မလို၊ ဘုရားဆွမ်းကပ်၊ သံဃာများကို ဆွမ်းကပ် သင်္ကန်းလှူ၊ ကောင်းမှုများ ပြု၊ ထိုထို ပြိတ္တာတို့ကို ရေစက်ချ အမျှဝေပေးကြ။ သံဃာတော်တို့နှင် (ရွတ်ဖတ်နိုင်သော ဒကာ၊ ဒကာမအားလုံးတို့) က တိရောကုဋ္ဋ သုတ်ကို ရွတ်ဘတ် သရဇ္ဈာယ်ကြသည်။
တရုတ်လူမျိုးများလည်း ယဉ်ကျေးမှုကြောင့် ပျက်ရယ်ပြု မခံရ၊ လူသားများ လည်း ဒေသနာနှင့်အညီ ကုသိုလ် ပြုခွင့်ရ၊ စာအုပ်ထဲမှာ လှောင်ပိတ် မိေ နသော တိရောကုဋ္ဋ သုတ်လည်း သံဃာတော်တို့ နှုတ်၊ နှလုံးသားထဲရောက်၊ လူတို့လည်း ပါဠိတော် စစ်စစ် နာကြားခွင့်ရ ( ရဟန်းစီ၊ လူစီသော ဂါထာ မ ဟုတ်၊ ဘုရားသီခဲ့သော ဂါထာ အစစ်များ ဟု ဆိုလိုသည်။ ဘုရားဟော ဂါထာတော်များ အထင်အရှားရှိနေပါသေးလျက် ရှားရှားပါးပါး အချိန်လေး များ အတွင်း လူသီ၊ ရဟန်းသီဂါထာများကို သင်၊ ရွတ်နေကြသည်ကို စိတ် မကောင်းဖြစ်မိသဖြင့် ဤ အမှာကို ထည့်သည်။ )။
အလွန် ပညာပါပြီး အလွန်လည်း ကျေးဇူးများ၏။ တရုတ်မှာ၊ဂျပန်မှာ၊ အမေရိ ကန်မှာ၊ မြန်မာမှာ ရှေးဟောင်း ယဉ်ကျေးမှုများရှိကြ၏။ မတူကြ။သို့သော် ဒေ သနာက တူ၏။
လူမျိုးခြား သာသနာပြုဟူသည် အဆုံးအမ က ရှေ့က သွားမှ ခရီးတွင်သည်။ ယဉ်ကျေးမှုများက ရှေ့ကသွားနေလျှင် ထိုဝန်ကြောင့် ဒေသနာပင် တိုး အား လျော့သွားတော့သည်။ နိုင်ငံခြားသားများက ငါးပါးသီလပဲ ယူမည်။ ဩကာသ ကိုတော့ လိုက်ဆိုနေမည် မဟုတ် ဟူလို။
ဤစာဖြင့် ကျေးဇူရှင် ဆရာတော် မဟာဝီရ အား ဦးညွတ်ပါ၏။ တရုတ်သရဲ၊ မြန်မာသရဲ၊ သူရဲပေါင်းစုံ တိရောကုဋ္ဋ သုတ်ကို နာကြားခွင့်ရပြီး ကျွတ် လွတ်ကြပါစေသတည်း။
ကျွဲအုပ်နဲ့ ဘီယာ ဒဿန
in ဇင်ဝေသော်, ပြုံးစိစိ - on 8/21/2013 - No comments
ကျွဲအုပ်ကြီး တစ်အုပ်လုံး သွားနိုင်တဲ့ အမြန်နှုန်းဟာ အနှေးဆုံး ကျွဲပေါက်စ၊ ကျွဲအိုကြီးတွေ အပေါ်မှာ မူတည်တယ် (အုပ်စု မကွဲအောင် သူတို့ကို စောင့်ခေါ်နေရလို့)
ခြင်္သေ့၊ ကျား စတဲ့ သတ္တဝါကြီးတွေ အလိုက်ခံရရင် အဲဒီ အနှေးဆုံး ကျွဲတွေပဲ အစားခံရတယ်။
ဒါပေမဲ့ ကျွဲအုပ်ကြီး တစ်ခုလုံးရဲ့ အမြန်နှုန်းကို ကြည့်တော့ ဒါဟာ အားသာ ချက်ပဲ။
အနှေးဆုံး ကျွဲတွေကို စောင့်ခေါ်နေစရာ မလိုတော့လို့ မြန်မြန်သွားလို့ ရသွား တယ်။
လူ့ဦးနှောက်ဆိုတာ ဦးနှောက် ဆဲလ် တွေ စုပေါင်းလုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ် တယ်။
ဘီယာကို သောက်သုံးခြင်းအားဖြင့် ဦးနှောက် ဆဲလ် တချို့ကို အယ်လ်ကိုဟောက အန္တရာယ်ပေးတယ်၊ (ဆဲလ်တွေ သေစေတယ်)
ဒါပေမဲ့ အယ်လ်ကိုဟောက သေစေတဲ့ ဆဲလ်တွေဟာ အား အနည်းဆုံး ဦးနှောက်ဆဲလ်တွေသာ ဖြစ်တယ်။
အားနည်းတဲ့ ဆဲလ်တွေကို ဘီယာက သတ်လိုက်တော့ အခြားအားကောင်း တဲ့ ဆဲလ်တွေ မြန်မြန်အလုပ် လုပ်လို့ရသွားတယ်။
ဒါ့ကြောင့် ဘီယာ ပုံမှန်သောက်သူဟာ မသောက်သူထက် ခေါင်းပိုပြေးတယ် ။ ဘရိုက် ပိုဖြစ်တယ်။
ဘီယာသောက်သုံးခြင်းအားဖြင့် သင့် ဦးနှောက် အလုပ်လုပ်နှုန်းကို မြှင့်တင် ပါ။
(ကိုးကား။ ။ ကြားဖူးနားဝ ကျမ်းစာ။)
ဘယ်ဟာက ပိုရယ်စရာကောင်းသလဲ (မောနင်းပို့စ်)
in ဇင်ဝေသော်, ပြုံးစိစိ, မောနင်း ပို့စ် - on 8/21/2013 - No comments
အစိုးရတိုင်းမှာ ရယ်စရာကောင်းတဲ့ လူကြီးတွေ ပါပါလာတတ်တယ်။
စုမတ္တရားက ပညာရေး ဥပဒေအသစ်ကို ဖတ်မိလို့ပါ။
အထက်တန်းကျောင်းသူတွေ ကျောင်းဝင်ခွင့်အတွက် အပျို စစ် မစစ်ပါ စစ်ဆေးရမယ် တဲ့။
အမေရိကန်တွေက တိုဖယ်။ သူတို့က တိုဖယ် မဟုတ်တော့ဘူး။ မပျိုဖယ်။
ဒါပြီးရင် Tommy Cooper ရဲ့ ဟာသကို ဖတ်ကြည့်ကြပါအုံး။ ဘယ်ဟာက ပိုရယ်ရသလဲ လို့။
သေမင်း - ခင်ဗျားကြီးကိုတင်းနေတာကြာပြီ (ဒဂုန်တာရာ အတွက်)
in ကဗျာ, အမှတ်တရ - on 8/20/2013 - No comments
( ကဗျာဆရာ-စောဝေ )
ဆဲဆိုခြင်း သမိုင်းနဲ့ တန်ဖိုး သတ်မှတ်ချက်
in ဇင်ဝေသော်, ပြုံးစိစိ, ဘာသာပြန် - on 8/20/2013 - No comments
စိတ်ဝင်စားစရာ စာအုပ်တစ်အုပ် အောက်စ်ဖို့ တက္ကသိုလ်က ထွက်လာပါ တယ်။ ဆဲဆိုခြင်း သမိုင်းအကျဉ်း တဲ့။
ဆဲဆိုခြင်းဟာ မယဉ်ကျေးဘူး၊ ကိုယ့်ရဲ့ လူမှုရေးအဆင့်ကို ထိခိုက်စေတယ် ဆိုတဲ့ အချက်ကို သမိုင်းအဆက်ဆက်က လူတွေ လက်ခံသလို သမိုင်း အ ဆက်ဆက်မှာလည်း ဆဲဆိုတဲ့ ဝေါဟာရတွေ ရှိနေခဲ့တယ်။ လူတွေဘာကြောင့် ဆဲဆိုကြသလဲဆိုရင်တော့ စိတ်တင်းကျပ်မှုကို ပြေေ လျာ့စေလို့၊ တခါတခါ စိတ်ကျေနပ်မှုကိုတောင် ရစေလို့လို့ ဆိုပါတယ်။
ပါမောက္ခက သူမရဲ့ ဆဲဆိုခြင်း သမိုင်းအကျဉ်းကို နှစ်ပေါင်း နှစ်ထောင်ကျော် က ရောမခေတ် လက်တင်လို ဆဲသံဆိုသတွေနဲ့ စတင်ချီလာခဲ့တယ်။
လူ့ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဝေါဟာရတွေဟာ အလွန် ရိုင်းစိုင်းတဲ့ ဝေါဟာရတွေအဖြစ် ရောမခေတ်မှာ လက်ခံကြပါသတဲ့။ ဒါပေမဲ့ ဒီ ဝေါဟာရတွေဟာ ဒီခေတ်မှာ မရိုင်းဆိုင်းတော့ပါဘူး။ အထူးသဖြင့် ဆေးပညာရပ် သင်္ခန်းစာ၊ ကျန်းမာရေးသင်တန်းတွေမှာ ဆို ဖော်မယ် ဖြစ်နေကြပါပြီ။ ရောမခေတ်မှာဆို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အင်္ဂါတွေရဲ့ အမည်ကို ဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာမှ သုံးစွဲဖို့ မအပ် တဲ့ ဝေါဟာရေ တွပါ။
နောက်ပြီး God နဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ ဝေါဟာရတိုင်းဟာ ဘာသာရေး စော်ကားမှု တစ်ခုလို့ ယူဆကြပါသတဲ့။ ဥပမာ Oh,my God လို စကားမျိုးပါ။ ဒါပေမဲ့ ဒီခေတ်မှာ ဒီဝေါဟာရ ဘယ်လောက်တွင်ကျယ်ပြီး ဘယ်လောက် ယဉ်ကျေး တယ်ဆိုတာ လူတိုင်းသိနိုင်ပါတယ်။
၁၉ ရာစုနဲ့ ၂၁ ရာစု ဝေါဟာရ သတ်မှတ်ချက်ကတော့ အင်တာနက် မပေါ် ခင်အထိ ထူးထူးခြားခြား ကွာဟမှု မရှိခဲ့ပါဘူး။ လူ့ခန္ဓာကိုယ် အစိတ် အ ပိုင်းတွေရဲ့ ပြုမူဆောင်ရွက်ပုံတွေကို ပုံဖော်ပြတဲ့ စကားတွေဟာ ရိုင်ဆိုင်း ဆဲပါ။ "F**k " လို ဝေါဟာရတွေကို ထောက်ပြတယ်။ ဒါပေမဲ့ အင်္ဂလိပ် စကားပြောနိုင်ငံတွေမှာ (အထူးသဖြင့် အမေရိကန်တွေ) "Sh*t" "D**k" "Holly D**k" "P**s" စတဲ့ ဝောဟာရတွေဟာ ပုံမှန် ဝေါဟာရတွေဖြစ်ေ န တာကြာပါပြီ။
အင်တာနက်က တဆင့် ဒီ စကားလုံးတွေ ပြန့်သွားလိုက်တာ တစ်ကမ္ဘာလုံး က ချတ်တင်း ရုမ်းတွေထဲမှာ ဒီ စကားလုံးတွေမြင်လို့ အံ့ဩတကြီး မဖြစ်ကြ ရတော့ဘူး တဲ့။
ဒီခေတ်မှာ လူထုလက်မခံနိုင်တဲ့ အဆိုးဆုံးဝေါဟာတွေက "nigger" "retards" "cripple" "black people" "monkey" စတာတွေ ဖြစ်လာခဲ့ ပါပြီ။ နိုင်ငံရေးသမားတစ်ယောက်က F**k ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို လူထုေ ရှ့သုံးလို့ ဘာမှ မဖြစ်ပေမဲ့ "nigger" "retards" "cripple" "black people" စတဲ့ စကားလုံးတွေကို လူထုရှေ့မှာ သုံးလိုက်ရင်တော့ သူ့ရဲ့ ဘဝနဲ့ အလုပ်ပါ ကမောက်ကမ ဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ ဆွေးနွေးပြထားပါတယ်။
သူပြောမှ ငယ်ငယ်က ရွာက လူကြီးတချို့ ပုံပြောသံကို ကြားယောင်မိ ပါ တယ်။
"ခွေးမသားလေးတွေ၊ နင်တို့က ပြောရင်ယုံမှာတောင် မဟုတ်ဘူး။ ဟိုတုံးက တို့ရွာမှာ ကမျင်းမ မိအေးဆိုတဲ့ ကောင်မ ရှိဖူးတယ်။ သူ့ကို သေနာကောင် ငမူးက မရ ပန်းသေ အရူးအမူးကို ကြိုက်နေတာ။ ပြဿနာက လူလွန်မသား၊ သူကြီးသား ငထွားပဲ "
ကျနော်တို့က ဆဲနေတယ်လို့ကို မခံစားရဘူး။ အားလုံး ပျော်လို့ ရွှင်လို့ပဲ။
Brief History of Swearing
Mellisa Mohr, Oxford University Press, 2013
လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကမ္ဘာ့အမြင် (လီကွမ်းယု)
in ဇင်ဝေသော်, ဘာသာပြန် - on 8/20/2013 - No comments
အရှေ့အလယ်ပိုင်း၊ နွေ ရောက်မလာတဲ့ နွေဦး
မေး။ ။ အရှေ့အလယ်ပိုင်း ဒီမိုကရေစီနဲ့ ပတ်သက်လို့ မစ္စတာလီမှာ အကောင်းမြင်ဝါဒ မရှိဘူး နော်။ တူရကီဆိုရင် ဘယ်လိုပြောမလဲ၊ အစ္စလမ်နဲ့ ဒီမိုကရေစီ နှစ်ခုစလုံး ထွန်းကားနေတာပဲ။
ဖြေ။ ။ အစ္စလမ်နိုင်ငံတွေက နိုင်ငံကို မအုပ်ချုပ်နိုင်ဘူးလို့ ပြောနေတာ မဟုတ်ဘူး။ အော့တိုမန် (Ottoman) အင်ပါယာဆို တကယ်အောင်မြင်ခဲ့တာ ပဲ။ ဒါပေမဲ့ တူရကီက အာရပ်နိုင်ငံတွေထဲ မပါဘူး။ သူတို့က တူရကီတွေ၊ တခြားစီပဲ။ တူရကီတွေက သူတုိ့ဟာ အာရပ်ကမ္ဘာကို အောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ အော့ တိုမန် မျိုးဆက်တွေလို့ သူတို့ကို သူတို့ ယုံကြည်ကြတယ်။ သူတို့ အခြား အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေထက် သာနေတဲ့ အဓိကအချက်က ပညာအများကြီး ပိုတတ်နေလို့။
မေး။ ။ အာရပ်နွေဦး လှုပ်ရှားမှုဟာ အရေးပါတဲ့ ပထဝီနိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားမှု တစ်ခုပဲ။ ဝေဖန်သူတချို့ ပြောနေတာက အီဂျစ်က မူဘာရက်ကို အမေရိကန်တွေ လက်လွတ်ခံလိုက်တာ စောသွားတယ်၊ သူဆို အမေရိကန်တွေ နဲ့ တော်တော် ရင်းရင်းနှီးနှီးရှိတယ်။ ဒီတော့ သူတို့ သုံးသပ်တာက အရေး ရယ် အကြောင်းရယ်ဆို မဟာမိတ် ဖွဲ့ထားလည်း အမေရိကန်တွေကို အားကိုးလို့ မရဘူး တဲ့။
ဖြေ။ ။ မူဘာရက်ကို အမေရိကန်တွေက ဘယ်လိုလုပ် ကယ်တင်လို့ ရမှာ လဲ၊ အမေရိကန်စစ်သားတွေ အီဂျစ်ကို လွှတ်မှာလား။ ဒါက ပြည်တွင်းရေး သက်သက်လေ။ အမေရိကန်တွေ ကြားဝင်လည်း အမေရိကန် အလံတွေ မီးရှို့ခံရတာပဲ ရှိမယ်။ အမေရိကန်တွေနဲ့ပေါင်းလို့၊ သူတို့က ထောက်ခံလို့ အန္တရာယ်မရှိတော့ဘူး တွက်ထားလို့ မရဘူး။ အင်း ထိုင်ဝမ်ကတော့ ချွင်း ချက်ပေါ့။ တရုတ်က ပြန်သိမ်းချင်နေတာ။ အမေရိကန်ရဲ့ သတ္တမ ရေတပ်က ထိုင်ဝမ်ရေလက်ကြားမှာ ကျောက်ချထားတယ်။ ဒါတောင် ထာဝရတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး။
မေး။ ။ အာရပ်နွေဦး ပထဝီနိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံရေးအရ အမေရိကန်တွေဟာ အောင်မြင်သူတွေလား ဒါမှမဟုတ် အရှုံးသမားတွေ လား။
ဖြေ။ ။ ဒီကိစ္စက ဘာမှပြောလို့မရဘူး။ သူတို့ ထောက်ခံထားတဲ့ အစိုးရ ရဲ့ ခြေလက်တွေ အဖြတ်ခံလိုက်ရတော့ သူတို့ဩဇာလည်း ဘယ် ရှိနိုင် ပါတော့မလဲ။ အမေရိကန်ဆီက ဘီလီယံချီတဲ့ ဒေါ်လာတွေ အကူအညီ ယူပြီး နိုင်ငံကို လည်ပတ်မယ့် လူစွမ်းကောင်းခေါင်ဆောင်တစ်ယောက်ပေါ် လာရင် သူတို့ ပြန်ဝင်လာကြဦးမှာပဲ။ အကူအညီဆိုတာ တကယ်တော့ အလွန် အရေးပါတဲ့ ကိစ္စပဲ။
*သင်္ချာတော်ရင် အပျိုကြီး ဖြစ်တတ်တယ်*
in ဇင်ဝေသော်, ပြုံးစိစိ - on 8/19/2013 - No comments
အရင်တပတ် အင်္ဂါနေ့က တရုတ် ဘယ်လင်တိုင်းနေ့ပါ။ Qixi ပွဲတော်လို့ ခေါ် တယ်။ အခုတော့ အိမ်ထောင်ဖက်ရှာကြတဲ့ ပွဲလို့ ခေါ်ရင်ရနေပါပြီ။ ပညာ တတ် အပျိုကြီးတွေ ပိုများတယ် တဲ့။
များပြီပေါ့။ သူတို့ အိမ်ထောင်ဖက်ရွေးတဲ့ ဖော်မြူလာကိုလည်း ကြည့်ပါအုံး။
စတိတ်မင့်။ ။ အမျိုးသားသည် ဘယ်အရာမှာမဆို အမျိုးသမီးထက် တစ် ဆင့်မြင့်နေရမည်။ အရပ်၊ အသက်၊ အရည်အချင်း၊ လစာ စသည်တို့ ပါဝင် သည်။
ဒီ စတိတ်မင့်အတိုင်း ပြဿနာရဲ့ ဆိုလူးရှင်းကို ရှာကြည့်တော့ ဒီလိုရတယ်။
Grade A+ Grade B
Grade B + Grade C
Grade C + Grade D
အရပ်စကားနဲ့ ပြောတော့ ....
(က) အဆင့် A ရှိ အမျိုးသားနဲ့ အဆင့် B ရှိ အမျိုးသမီး
(ခ) အဆင့် B ရှိ အမျိုးသားနဲ့ အဆင့် C ရှိ အမျိုးသမီး
(ဂ) အဆင့် C ရှိ အမျိုးသားနဲ့ အဆင့် D ရှိ အမျိုးသမီး
ဒီတော့ အဆင့် A ရှိ အမျိုးသမီးနဲ့ အဆင့် D ရှိ အမျိုးသားက ဖော်မြူလာထဲ မဝင်တော့ဘူး။ သွားကရော။
ပြီးတော့ မြို့ကြီးတွေက အဆင့် A ရှိ အမျိုးသမီးတွေကလည်း လယ်တော ထဲက အဆင့် D ရှိ အမျိုးသားကို စိတ်မဝင်စားတော့ဘူး။
ဒီတော့ Shengnu နဲ့ Shengnan တွေ ဖြစ်ကုန်ရော။
Shengnu က Leftover women။
Shengnan က Leftover men။
***ရုစဗဲ့ ပြောခဲ့တဲ့ မဟာဗျူဟာ သုံးခု***
in ဇင်ဝေသော်, လှည့်ကြည့်မိတဲ့ ထောင့်ချိုးများ - on 8/19/2013 - No comments
၁။ အညံ့ဆုံး လူတန်းစားကို စည်းရုံးဖို့ ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်တဲ့ နည်းကိုသုံးပါ။
၂။ ဒုတိယတန်းစားကို စည်းရုံးဖို့ မြှောက်ပင့်တဲ့ နည်းကိုသုံးပါ။
၃။ အဆင့်မြင့် လူတန်းစားကို စည်းရုံးဖို့ အကြံဉာဏ်တောင်းပါ (မိတ်ဆွေ ဖွဲ့ပါ) တဲ့။
သူကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့ပေမဲ့ ရုစဗဲ့ကိုယ်တိုင်ကတော့ ပထမ မဟာဗျူဟာကို မ သုံးစွဲခဲ့ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ သူတို့တတွေ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ထဲကနေ ဒုတိယနဲ့ တတိယမဟာဗျူဟာတွေသုံးပြီး ထွက်လာခဲ့ကြတာပါ။
ရာဇဝင်အဆိုး အကောင်းတွေကို အလီလီဖြတ် သူ့သတ် ကိုယ့်သတ် ဇာတ် လမ်းတွေနဲ့ လက်ပွန်းတတီးရှိလှတဲ့ ၂၁ ရာစု လူ့အဖွဲ့အစည်း (အများစု) ဟာ ပထမ မဟာဗျူဟာကို စက်ဆုပ်ကြလှပါပြီ။ တော်ကြပါတော့။
ဒီ ပထမ မဟာဗျူဟာကို ကျင့်သုံးဖို့ တစ်ဖက်သားကို တိရစ္ဆာန်အရာထားပြီး ကိုယ်တိုင်ကလည်း တိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်လောက် မိုက်မဲမှ ရနိုင်ပါတယ်။
ကံဆိုးစွာပဲလို့ ဆိုရပါလိမ့်မယ်။ အဖွဲ့အစည်း တချို့ဟာ ပထမ မဟာဗျူဟာ ကို တောင်းဆိုနေဆဲဖြစ်သလို အာဏာ၊ ပါဝါ၊ လူသတ်လက်နက်ပိုင်ဆိုင်သူ တချို့ကလည်း ဒါတွေကို အသုံးပြုဖို့ လက်ရဲဇက်ရဲ ရှိနေကြဆဲပါပဲ။
ဒုတိယ မဟာဗျူဟာကလည်း ဟုတ်တော့မလိုလိုနဲ့ နားထင်သွေးရောက်ေ စတဲ့ မဟာဗျူဟာမို့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးကို ခြုံကြည့်မယ်ဆိုရင် မစွံ လှသေးပါဘူး။ နိုင်ငံရဲ့ မဆလသက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာ သာကီဝင်တွေ၊ မျိုးချစ်စိတ်တွေ၊ သဟဇာတ၊ အညမည၊ အနု၊ပဋိလောမ သဘောတရား စတဲ့ စကားလုံးထွားထွားကြီးတွေနဲ့ မြှောက်ပင့်လာလိုက်တာ ကမ္ဘာမှ ကိုယ် ဘယ်နေရာမှာရှိမှန်းတောင် မသိနိုင်တော့ဘူး။
"စင်္ကာပူလာသင့် မလာသင့်" ဆောင်းပါးမှာ "ငါတို့က လဲတွေ၊ လားတွေနဲ့ အင်္ဂလိပ်စကား ပြောတတ်တဲ့ စလုံးတွေလောက်တောင် အင်္ဂလိပ်စာ မတော် ဘူးဆိုပါလား၊ လေပါ့ကွာ" လို့ လူငယ်တစ်ယောက်က ကွန်မင့်ရေးတော့ သူ တင်မကဘူး၊ ကျနော်ပါ လေ သွားခဲ့ရဖူးပါတယ်။
စိတ်မကောင်းဘူး။ ကျနော်တို့ကိုယ်တိုင်တွေလည်း ထင် ကြီးတစ်လုံး ကိုင်စောင်ခဲ့ကြတဲ့ မျိုးဆက်တွေပဲလေ။ ထိုင်းလည်း ကိုယ့်လောက် မစွံ၊ မလေး လည်းကိုယ့်လောက် မစွံ၊ စလုံးလည်း ကိုယ့်လောက် မစွံ။ လာအိုတွေ က ပါ ကျော်တက်သွားတော့မှ အောက်ဆုံးက ထိုင်နေရတဲ့ ဘဝအမှန်ကို သိ ခဲ့တော့တာပဲ။
ဒုတိယ မဟာဗျူဟာကို ကျင့်သုံးဖို့ဆိုရင်လည်း တစ်ဖက်သားကို အရူး အနှမ်း သဘောထားမှ ရတတ်ပြန်တယ်။ ကျနော်တို့ နိုင်ငံဟာ မဟာဗျူဟာ တစ် နဲ့ နှစ် ကြားမှာ အနုလုံ၊ ပဋိလုံ လည်ပတ်နေခဲ့ရတယ်။
ကျနော်ကတော့ ရိုးရိုးလေးပဲ ကြည့်မိတယ်။
(အိန္ဒိယနဲ့ တရုတ်ကိုထိန်းဖို့ မြန်မာပြည်ဟာ အမေရိကန်တွေအတွက် အ ချက်အချာကျတယ်)။ ပစိဖိတ်ကို ပိုင်မှ အာရှကို စိုးမိုးနိုင်ပါလိမ့်မယ်၊ ဟုတ်တယ်၊ ပြောသလောက်ကြီးတော့ မဟုတ်ဘူး။
သယံဇာတတွေ ပေါတယ်။ (ဘရူနိုင်းကို မမီဘူး)
(လူတွေက မညံ့ဘူး)။ ဂျပန်တွေ ကိုရီးယားတွေလောက် (အများစုက) တော် လည်းမတော် ကြိုးလည်း မကြိုးစားဘူး။ ပိုက်ဆံနဲ့ အချိန်ရှိရင် ကိုရီးယား ဇာတ်ကားတွေလောက်တော့ မြန်မာ ဒါရိုက်တာတိုင်း ရိုက်နိုင်တယ် ဆိုတဲ့ ဒါရိုက်တာကို အတော်ဆုံး လူရွှင်တော်ဆု ပေးလိုက်ချင်ပါတယ်။
အမှာ။ ကွင်းစ ကွင်းပိတ်ထဲက စာတွေက ကြားဖူး နားဝ စကားတွေပါ။
ကျနော်တို့ လူငယ်တွေကို အမှန်တွေပဲ ပြောသင့်ပြီ။
သယံဇာတနဲ့ ပါးပါးနပ်နပ်လေး မျှားခေါ်ပြီး လူသားအရင်းအမြစ်ကို စိုက်ပျိုး သင့်ပြီ။
အသုံးအစွဲမတတ်ရင် ဘာသာရေးက နိုင်ငံရေးကို ရန်မူတယ်။
နိုင်ငံရေးကလည်း အကိုင်အတွယ်မတတ်ရင် ဘာသာရေးကို မျက်စောင်း တခဲခဲပဲ။
ကျနော်တို့ အရူးပျေက်ချိန် တန်ပါပြီ။ တက်လာမယ့် လူငယ်တွေကိုလည်း အရူးလုပ်ဖို့ မသင့်တော့ဘူး။ ရုစဗဲ့ရဲ့ ဒုတိယ မဟာဗျူဟာကို ကျနော် ငြင်း ဆန်လိုက်မိပါတယ်။
နောက်မှပဲ တတိယ မဟာဗျူဟာကို ဆက်ပါဦးမယ်။ ဒီအကြောင်းကို အခြား ကလောင်နဲ့ ဆောင်းပါးအရှည် ရေးဖူးကြောင်း ဖတ်ဖူးသူများကို အသိပေး ချင်ပါတယ်။ လွတ်လွတ်လပ်လပ်လည်း ပြောရင်ရနေလို့ အခု အတို ချုပ် ပြန်ခေါ်လိုက်တာပါ။
in ဘောလုံး - on 8/18/2013 - No comments
မနေ့ညက အာဆင်နယ် ကြွေပြသွားလိုက်ပုံက တစ်တောလုံးကို ဝေရောပဲ။
အရံခုံပေါ်က ဝိန်းရွန်နီလည်း သူ့စာရင်းမပေါက်တဲ့ ဂိုးလေးဂိုးနဲ့ မယားပါ သား၊ သမီးတွေကို ပေချစ်နေရသလိုနေမှာ။
ကံသီလို့ သူ့ပင်နယ်တီ သန္ဓေပျက်တော့ လီဗာပူးလ်လည်း သုံးမှတ် မဲ ပေါက်သွားတယ်မဟုတ်လား။
ဒါပေမဲ့ ကြွားလောက်တဲ့ ခြေ မဟုတ်တာတော့ အန်ဖီးလ် သက်သေပဲလေ။
ပြန်ပေါင်းထုပ် မော်ရင်ညိုရဲ့ ချယ်ဆီးလ်အတွက် နယူးဘွိုင်း ဟူးလ်စီးတီးဟာ ဘယ်လောက်ပဲ အသည်းမာမာ
အိပ်ကပ်ထဲ တစ်စုံတစ်ရာယူပြီး ဘလူးတို့ တံတားကို ဖြတ်နိုင်မယ် မထင်ဘူး။
မန်ယူရဲ့ သုံးဂိုးအသားတင်ကို နောက်ကောက် ချနိုင် မချနိုင်ပဲ စောင့်ကြည့်ရုံပါ။
ကျနော်သိလိုက်တယ် (WISDOM OF ANDY ROONEY)
in ဇင်ဝေသော်, သင်းကွဲလိပ်ပြာများရဲ့ ရင်ခုန်သံကို ခံစားခြင်း - on 8/18/2013 - No comments
သူ့စာကြောင်းတိုင်းဟာ ကဗျာအပိုဒ်လေးတွေလို လှပါတယ်။ သူ့မူရင်း အင်္ဂလိပ်လိုကို အားပြုဖတ်ကြည့်ပါ။
အင်္ဂလိပ်လို လုံးဝမရသူတွေအတွက်ပဲ မြန်မာလို ပြန်ပေးထားတာပါ။
ဘဝဆိုတာ အိမ်သာစက္ကူလိပ်လိုပါ၊ ကုန်ခါနီးလေ အကုန်မြန်လေ။
ကမ္ဘာမှာ အကောင်းဆုံးစာသင်ခန်းဆိုတာ အဘိုး/အဖွားရဲ့ ခြေအစုံအောက် မှာ ရှိပါတယ်။
အငြိမ်းချမ်းဆုံး ခံစားမှုကို ရင်ခွင်ထဲမှာ သားသား/မီးမီး အိပ်ပျော်နေချိန်မှာ ရရှိတယ်။
မှန်ကန်မှုထက် ကြင်နာမှုက ပိုအရေးကြီးတယ်။
ကလေးတစ်ယောက်က ပေးတဲ့လက်ဆောင်ကို ဘယ်တော့မှ မငြင်းဆန် သင့်ပါ။
တခါတလေ လူတစ်ယောက်အတွက် လိုအပ်မှုဆိုလို့ တွဲလက်တစ်ချောင်းနဲ့ နားလည်မှု နှလုံးသားတစ်ခုတင်ပဲ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်
အမှန်တရားကို မျက်ကွယ်ပြုရုံနဲ့ အမှန်တရားက ပြောင်းလဲမသွားဘူး။
ဝေဒနာကို ကုစားနိုင်တာက မေတ္တာတရားပါ၊ အချိန်မဟုတ်ဘူး။
လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ အောင်မြင်ဖို့အလွယ်ဆုံးနည်းကတော့ ကိုယ့်ဘေးမှာ ကိုယ့်ထက်သာသူတွေ ဝန်းရံနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
အခွင့်အရေးဆိုတာ ဘယ်တော့မှ အလကားမဖြစ်ပါ၊ ကိုယ်လွတ်သွားရင် အခြားတစ်ယောက် ရသွားတယ်။
ကျနော်အကြိုက်ဆုံးက ဒီ နောက်ဆုံးစကားပါ။
လူမျိုးရေး လက္ခဏာများ (ကျောင်းတွင်းမှတ်စု)
in သီဟနာဒ, ကျောင်းတွင်းမှတ်စု - on 8/18/2013 - No comments
စင်္ကာပူ အနောက်ပိုင်း၌ နံနက်စောစောထပြီး လမ်းလျှောက်မည်ဆိုလျှင် ဤသို့တွေ့ရသည်။
တရုတ်အဘိုးကြီးများတွင် ပြေးသူကပြေး၊ လမ်းလျှောက်သူက လျှောက်၊ စက်ဘီး စီးသူက စီးဖြစ်သည်။
မလေးအဘိုးကြီးများကတော့ နံနက်စောစောတွင် သုံးလေးယောက်စုပြီး ကားမှတ်တိုင်းမှာ စကားပြောကြတော့သည်။ နာရီ အတန်ကြာတတ်၏။
ထိုင်းလူမျိုးများက ဘီယာ၊ အရက် အလွန်နှစ်သက်ကြသည်။ ( မြန်မာလူမျိုး လည်း အတူတူပဲဟု တစ်ယောက်ယောက်က ဆိုလျှင် မငြင်းပါ)
ဂိုးလ်ဒင်းမိုင်းလို နေရာမျိုးမှာ ညနေခင်းနှောင်းပိုင်းသွားလျှင် အုပ်စုဖွဲ့ပြီး ဘီ ယာ၊ အရက်သောက်နေသူများ အများအပြားတွေ့ရသည်။
သို့သော် ဘုန်းကြီးတစ်ပါးပါးကို မြင်သည်နှင့် အရက်ခွက်ကို ချပြီး လက်အုပ် ချီကြ၊ ဦးချကြလေသည်။ တချို့ဆိုလျှင် ခေါင်းပင် မထောင်နိုင်တော့။ ခေါင်း မထောင်နိုင်သော်လည်း လက်နှစ်ဖက်ကတော့ အပေါ်တက်လာ တတ်လေ သည်။
ရွှေမြန်မာတို့က မူးလျှင် ဘုန်းကြီးကို ရှောင်လေတော့သည်။
၃။စင်္ကာပူရီယန်းတို့ကတော့ လူစည်စည်ရှိလျှင် တန်းစီကြတော့သည်။ အလ ကားပေးသည်လည်းမဟုတ်၊ မရှိလို့လည်း ဘာမှ မဖြစ်သည့် မက်ဒေါ်နယ်လို အရုပ်များကို ဝယ်ယူရန် မနက်စောစောထ တန်းစီသည့် လူ ထောင်ချီပြီး ရှိလေ၏။
ပရိတ်ရေ၊ ပရိတ်ကြိုးရရန်လည်း တမျှော်တခေါ် တန်းစီကြသည်။
ရွှေမြန်မာတို့ကတော့ ဘုန်းကြီးရှေ့ ရှက်သလိုလို ရွံ့သလိုသလိုသာရှိမည် ဘုန်းကြီးကျောင်း (ဘုန်းကြီးကျောင်းဟု မှတ်ထင်စရရှိသော အဆောက်အဦ များ အပါအဝင်) ထဲဝင်သောအခါ ဖိနပ်ချွတ်ကြလေတော့သည်။ မချွတ်ပါနဲ့ ဆိုလျင်ပင် မရတတ်။ ငရဲရောက်ရင် ဘုန်ကြီးက လိုက်ကယ်နေမှာ မဟုတ် ဟု သူတို့ချင်း ပြောတတ်ကြ၏။ရွှေမြန်မာတို့ကား ဖိနပ်ချွတ်အကျင့် အလွန်စွဲကြ၏။ ဗိမ္ဗိသာရ လက်ချက်ထင်၏။
ဤသည်တို့ကား မကြာမကြာ တွေ့မြင်နေရသည့်် မြင်ကွင်းတို့ဖြစ်လေသည်။
စာမဖတ်သူ ပပျောက်ရေးနဲ့ အာရပ် နွေဦး (မောနင်းပို့စ်)
in ဇင်ဝေသော်, သတင်း - on 8/16/2013 - No comments
အခုရက်တွေမှာ တစ်ယောက်ယောက်က ဟို၊ ဒီ သတင်းကြားပြီးပြီ လား လို့ မေး လာရင် "မသိသေးဘူး၊ ရယ်ရသလား" လို့ပဲ မေးမိတော့တယ်။
*တရုတ်ပြည်နဲ့ စာမဖတ်သူ ပပျောက်ရေး
တရုတ်ပြည်ဟာ ကွန်ဖြူးရှပ်တို့ပြည်၊ စက္ကူကို ပထမဆုံး တည်ထွင်နိုင်တဲ့နိုင် ငံ၊ ရှေးအကျဆုံး အက္ခရာ၊ ပေစာ၊ သစ်ခေါက်စာ၊ နံရံထွင်းစာတွေ တွေ့ရ တဲ့နိုင်ငံ။ အဲဒီ့နိုင်ငံရဲ့ စာဖတ်သူဦးရေက ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက် ကျဆင်းနေလို့ စာမဖတ် မနေရ ဥပဒေ ရေးဆွဲဖို့ အစိုးရက ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ တခြားနိုင်ငံတွေရဲ့ ရထားပေါ်၊ ဘတ်စ်ကားတွေပေါ်မှာ ဖုန်းနဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေ သူတွေ ရှိနေပေမဲ့ စာဖတ်နေသူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ပီကင်းက ကား၊ ရထားတွေပေါ်မှတော့ ဖုန်းနဲ့ မက်ဆေ့ပို့သူ၊ ဂိမ်းကစားသူ၊ ဗွီဒီယိုကြည့်နေ သူတွေပဲ ရှိပါသတဲ့။
အသက် ၁၈ နှစ်နဲ့ ၇၀ကြားမှာ တစ်နှစ်ကို လူတစ်ယောက်ရဲ့ စာဖတ်နှုံးက ၄. ၃၅ ပဲ ရှိပါတယ်။
သူတို့ပေးတဲ့ အချက်အလက်တွေအရ ဆမ်ဆောင်းမ်တို့နိုင်ငံ တောင်ကိုရီး ယားက စာဖတ်နှုံး တစ် ပြေးနေပါတယ်။
အမေရိက က ၇ ရာခိုင်နှုံး
ဂျပန် က ၈.၄ ရာခိုင်နှုံး
တောင်ကုရီးယားက ၁၁ ရာခိုင်နှုံး ။
အွန်လိုင်းပေါ်မှာတော့ ဒီသတင်းက ပျက်လုံးဖြစ်နေပါတယ်။
စာ ပုံမှန်မဖတ်ရင် ထောင်ထဲသွားရတော့မှာလား တဲ့။
**နွေမရောက်လာတဲ့ အာရပ် နွေဦး
မွတ်စလင်ဘာသာဝင် အများစုနိုင်ငံတွေနဲ့ ဒီမိုကရေစီဟာ သဟဇာတ မကျ လှဘူးဆိုတာ အီဂျစ်က ကောင်းကောင်းကြီး ပညာပေးနေပါပြီ။ လီကွမ်းယုကတော့ အာရပ်ကမ္ဘာရဲ့ ဒီမိုကရေစီ အလားအလာကို "Spring without summer" လို့ သူ့စာအုပ်အသစ်မှာ ပြောထားလေရဲ့။ သူတို့ယဉ်ကျေးမှု၊ အကျင့်စရိုက်တွေကြောင့် အမေရိကန်တွေ ဘယ်လောက် ကြိုးစား ကြိုးစား ဒီမိုကရေစီထွန်းကားဖို့မလွယ် တဲ့။
ဒီနေ့ သတင်းဆောင်းပါးကတော့ "Arab Spring throws up more thorns than buds" တဲ့။ အာရပ် နွေဦးက အဖူးအငုံထက် ဆူးတွေ ပိုထွက်လာ စေ တယ် လို့ ဆိုရမယ်ထင်ပါတယ်။
ဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဥက္ကလာဟိုးမားတက္ကသိုလ်က အရှေ့အလယ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သုတေသနပညာရှင် Mr Joshua Landis ပြောတာက တိုတိုနဲ့ တော်တော် ထိပါတယ်။
သောက်စရာ ရေက မရှိ၊ ပြဿနာဖြစ်ပြီပေါ့" တဲ့။
ကလေးတွေ နင်းကန်မွေး၊ စနစ်တကျ ထိန်းကြောင်းမပေးနိုင်။ ပညာရေး ကလည်း ကျောင်းကောင်းတွေ ရှိတယ်ဆိုရင်တောင် ကလေး အယောက် ၂၀ အတွက် ဘယ်လိုလုပ် တတ်နိုင်မှာလဲ။ ဒီကြားထဲ အကြမ်းဖက် သင် တန်းကျောင်းတွေက ရေနံပေါပေါနဲ့ လည်ပတ်နေတာ။ သောက်စရာ ရေက မလောက်မငှ၊ ရေနံကရတဲ့ငွေတွေကလည်း တော်ဝင်မိသားစုတွေအတွက်နဲ့ ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်တွေ အတွက်ပဲများ။ အဲသလိုနဲ့ လူရမ်းကားတွေ ဖွားလာတာပဲ။
ဆောရီးပဲ၊ ဒုတိယသတင်းက မရယ်ရဘူး။
in ဇင်ဝေသော်, နှစ်ပြားတန် အတွေး - on 8/15/2013 - No comments
ဖေ့စ်ဘုတ်ပေါ်က စာ (၈၀) ရာခိုင်နှုံးလည်း မရှိနိုင်ဘူး။
in ဇင်ဝေသော်, ပြုံးစိစိ, သတင်း - on 8/15/2013 - No comments
နယူးဇီလန်က အမျိုးသမီးတစ်ယောက် အိပ်ပျော်နေရင်း ကားမောင်းသွားတာ ကီလိုမီတာ သုံးရာတောင်ပြည့်တယ်လို့ နယူးဇီလန် ဟာရယ်က ဖော်ပြထား တယ် လို့ဆိုပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ ရက်ကော့လို့ ဆိုရမလိုပါ။ ကားမောင်းရုံတင်မကဘဲ ဖုန်းမက်ဆေ့ဂ်ျတွေပါ မိတ်ဆွေတွေဆီ ပို့နေလို့ မိတ်ဆွေတွေက သိပြီး ရဲကိုအကြောင်းကြားကြတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သူမကို ခြေ ရာ ခံလိုက်နိုင်တာပါ။ သန်းခေါင်အချိန်မှာ သူမရဲ့ Hamiltom မှာရှိတဲ့ အိမ်ကနေ ကားမောင်းထွက်သွားလိုက်တာ Mount Maunganui မှာရှိတဲ့ သူမရဲ့ နေအိမ်ဟောင်းကို မနက် ၄ နာရီ ၅၅ မှာ ရောက်သွားတယ်။ လမ်းမှာ ဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘာဆိုဘာမှ မမှတ်မိဘူးလို့ သိရ ပါတယ်။
အိပ်မပျော်ဘဲ မောင်းနေတဲ့ ဟောလုံးဒေးသွား စလုံးတွေ နယူးဇီလန်မှာ မကြာမကြာ အက်ဆီးဒင့်ဖြစ်ချိန်မှာ (ရန်ကုန် မန္တလေး လမ်းမကြီးကို အားနာ လို့ ချန်ထားခဲ့တယ်) သူမက အိပ်ပျော်နေရင်း ကားမောင်းတာ ဘာမှ မဖြစ် ဘူးဆိုတော့ ချီးကြူးစရာပါပဲ။
ခရီးသွားခြင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ အာဖရိက လေကြောင်းရဲ့ နောက်တောက်ေ တာက် ကြေငြာပုံကို ပြောပြချင်ပါတယ်။
" Ladies and gentle men။ ကျနော်တို့ လေကြောင်းရဲ့ ဝန်ဆောင်မှုကို သဘောကျပါသလား၊ သဘောမကျရင် အရေးပေါ် ထွက်ပေါက် ခြောက်ေ ပါက် (six emergency exits) ရှိပါတယ်"
"လေယာဉ်ပေါ်ကအဆင်းမှာ ဘာပစ္စည်းမှ မေ့မကျန်ခဲ့အောင် သတိထားပါ၊ ကျန်နေခဲ့ရင် ပြန်မရပါဘူး၊ လေယာဉ်ဝန်ထမ်းတွေအားလုံး အညီအမျှ ခွဲဝေ ယူကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးတွေနဲ့ ဇနီး/ခင်ပွန်းတွေကို ချန်မထားခဲ့ကြပါနဲ့" တဲ့။
ဒါပြီးတော့ မြောက်ကိုရီယား အဲယားလိုင်းကို သွားမယ်။
ကော်ရယို အဲယားလိုင်း (Air Koryo) ဟာ ပြုံယမ်း လေဆိပ်ကနေ မထွက် ခွာမီ နှစ်နာရီလောက် နှောင့်နှေးနေခဲ့တယ်။
လေယာဉ်တက်တော့မှ ခရီးသည်က လေယာဉ်ဝန်ထမ်းကိုခေါ်ပြီး နှောင့်နှေး ရခြင်းအကြောင်းကို မေးကြည့်တယ်။
"ဘာကြောင့် လေယာဉ်ထွက်ဖို့ နှစ်နာရီလောက် နှောင့်နှေးနေခဲ့ရတာလဲ"
"လေယာဉ်မှုးက လေယာဉ်မတက်ခင် စက်သံ မမှန်ဘူးဆိုတာ သတိထား မိ တော့ အရေးပေါ် အစားထိုးနေရလို့ပါ"
"အခု လေယာဉ်အင်ဂျင် အစားထိုးပြီးပြီပေါ့"
"လေယာဉ်မှုးကို အစားထိုးလိုက်တယ်လေ။ ဘာလို့ အင်ဂျင်ကို အစား ထိုးနေမလဲ၊ စက်သံ မမှန်ဘူးထင်တာက လေယာဉ်မှုးပဲ ဥစ္စာ"
သင်းကွဲလိပ်ပြာများရဲ့ ရင်ခုန်သံကို ခံစားခြင်း ( ၇ )
- on 8/15/2013 - No comments
Andy Rooney (၁၉၁၉ ၂၀၁၁)
မရေးဖြစ်တာ ကြာပြီဖြစ်တဲ့ သင်းကွဲလိပ်ပြာများရဲ့ ရင်ခုန်သံကို ပြန်စလိုက် ပါတယ်။ ဒီနေ့ တီဗွီကြေငြာသူ၊ စာရေးဆရာ၊ သတင်းစာဆရာ အမေရိကန် Andy Rooney ကို ရွေးလိုက်ပါတယ်။
သူ့ရဲ့"I've learned...." ဆိုရိုစကားတွေလည်း ကမ္ဘာကျော်ပါတယ်။ အခုတော့..
သူပြောမှ Vegetarian က ရှင်းသွားတယ်။
Vegetarian ဆိုတာ အဖြစ်မရှိတဲ့ မုဆိုးကိုခေါ်ဝေါ်တဲ့ အန္ဒိယန်း စကား အဟောင်း တဲ့။ အခု အသားမစားတာ ဖြစ်သွားပြီ။
လူ့သဘာဝကို သူဖွင့်ပြသွားတာလည်း တော်တော်ကောင်းပါတယ်။
အချက်အလက်တွေနဲ့ ညီရဲ့လား အချက်အလက်တွေနဲ့ ညီရဲ့လား လို့ မကြာ မကြာ မေးတတ်ကြပေမဲ့ တကယ့်အမှန်အကန် အချက်အလက်ကိုတောင် ကိုယ်လက်ခံထားတဲ့ ယုံကြည်မှုနဲ့ ကိုက်ညီမှ အမှန်လို့ လက်ခံကြတာမျိုး မ ဟုတ်လား။ တကယ်တော့ လူက အချက်အလက်ထက် ကိုယ့် အဇ္ဈတ္တ ကို ရှေးရှကြတာ များနေတာပါ။
ဒါကတော့ ဆင်ချင်မိစရာ မှတ်ချက်ပါ။ ကွန်ပျူတာက အချိန်ကုန် သက် သာပေမဲ့ စက္ကူတော့ တော်တော်ကုန် ဆိုပဲ။
အပြုံးစစ် ကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ရာမှာလည်း သူက တစ်မျိုးဆန်းနေတယ်။
ဘယ်သူမှ မရှိဘဲ တစ်ယောက်ထဲ ပြုံးမိရင် တကယ် ပြုံးချင်လို့ တဲ့။
နောက်ဆုံးစကားကို ပို သဘောကျတယ်။
ဒီမှာ It's paradoxical ကို "ရှေ့နောက်မညီဘူး" လို့ ယူဆနိုင်ပါတယ်။ မူရင်းက ပိုလှနေလို့ ဘာသာမပြန်တော့ပါဘူး။
politician, leader, statesman
in Politics, ဇင်ဝေသော် - on 8/14/2013 - No comments
politician နဲ့ statesman ရဲ့ ခြားနားချက်က ဘာလဲ ဆိုတဲ့မေးခွန်းအပေါ် လီကွမ်းယု ဖြေခဲ့ပုံပါ။ ကောင်းပါတယ်။ သူ့ဖက် နည်းနည်းယက်တယ်လို့ ယူဆသူတွေကိုလည်း အပြစ်ဆိုလို့တော့ ရမယ် မထင်ဘူး။
သူက politician နဲ့ statesman ကြားမှာ leader ကိုတောင် အခုအခံ ထား သွားသေးတယ်။ ဖတ်ကြည့်ပါ။
၁။ politician က သူ့ကိုယ်သူ လူသိများအောင်လုပ်ပြီး ရာထူးရအောင် ယူ တယ်။ အဲဒီ ရာထူးနဲ့ ဘဝင်ခိုက်နေတယ်။
၂။ leader က မစ်ရှင် ရှိတယ်။ လုပ်သင့်တာတွေ လုပ်လို့ရအောင် အာဏာ ရအောင်ယူတယ်။
၃။ statesman ကတော့ အာဏာရအောင်ယူ၊ လုပ်သင့်တာ လုပ်ပေးရုံတင် မကဘဲ သူ့ကိုဆက်ခံမယ့် လူတော်ကို ရအောင်ရှာပြီး အာဏာလွှဲပေးတယ်။
Well, varying betweenapolitician andastatesman. A politician just wants to publicise himself and gets into office, and he enjoys the pride to be there. A leader hasamission. You seek power because you want to do certain things. A statesman is one who has not only sought power and done those things but is able to hand over toagood successor. That is my understanding.
သူ့ အဆိုအရ statesman က leader ထက် တဆင့်မြင့်တယ်။
ဦးသိန်းစိန်၊ ဒေါ်စု၊ ဦးရွှေမန်း။ တစ်လား၊ နှစ်လား၊ သုံးလား။
One Man's View of The World. (LKY)
Chap 11, p 318, 319
**အသေ နှင့် အနေ**
in 3D ဘာသာရေး, သီဟနာဒ - on 8/12/2013 - No comments
လောဘစိတ်နဲ့ သေခဲ့လျှင် ပြိတ္တာဘုံသို့ဝင်
ဒေါသကြ်ီးလျှင် ပါယ်ငရဲ ဖြစ်ရအမှန်ပဲ၊
ဆိုးသွမ်းလေဟန် စိတ်သုံးမျိုး စွန့်ခွာ ပယ်လို့ ချိုး။ ။
(မာဂဓီ သာစည်၏ ဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးမှု သင်္ခန်းစာ မှ၊ ပြန်ရွတ်ကြည့် ရင်း ရေးထားခြင်း ဖြစ်သဖြင့် အမှားတွေ့က သူတော်စဉ်တို့ ထောက်ပြ ကြပါလေ)
လောဘစိတ်နဲ့ နေခဲ့လျှင် အဆိပ်လာဘ် တရွှင်ရွှင်
ဒေါသကြ်ီးလျှင် ရှူးရှဲရှဲ သတ်မယ် ဖြတ်မယ် တကဲကဲ
မောဟစိတ်နဲ့နေတဲ့သူ ပျင်းရိ အူ တူတူ
လူစင်မမီစေ စိတ်သုံးမျိုး စွန့်ခွာ ပယ်လို့ ချိုး။ ။
(ဆရာတော်ကို အားကျ ကြည်ညိုစွာဖြင့်)
in စာဖတ်သူသို့ပြန်စာ, ဇင်ဝေသော် - on 8/12/2013 - No comments
မတတ်နိုင်တော့ဘူး။ တစ်ယောက်မက တောင်းဆိုလာကြတော့ တင်လိုက် တာပေါ့။
လီကွမ်းယု ဆွဲထားတဲ့ မြန်မာပြည်ရဲ့ ကောက်ချက် (၈) ချက်
နောက်ဆုံး နံပါတ် (၈)
The Burmese living abroad are another group that could encourage the country to open up faster. They are the best people from Myanmar who had previously gone to exile. Their children would no longer feel any obligation to the country, but those who left Myanmar in their youth or adults would have retained an emotional connection. With changing political situation, if they can be persuaded to return to start enterprises, it would certainly beaboost to the country.
It was notavolt-face rooted in deep soul-searching or genuine epiphany. Neither was itadesperate act of self-preserving by an authoritarian regime that believed it was on the verge of collapse. A much more prosaic explanation is in order. The generals could see that the country was inacul-de-sac. There were no options left.
လားရှိုးသိန်းအောင်တို့ သွက်ချက်တော့ (ဦးကိုမောင် (ပြုံးစိစိ)၊ ဇင်ဝေသော်)
in ဇင်ဝေသော်, ပြုံးစိစိ, ဦးကိုမောင် - on 8/12/2013 - No comments
လားရှိုးသိန်းအောင်တို့ သွက်ချက်တော့ အမေရိကန် လူမည်းတွေရော မြန် မာပြည်တွင်းက အနုပညာရှင်တွေပါ နောက်ကောက်ကျ ကုန်ရော။
ဗိုလ်ချုပ်ထဲက ဗိုလ်ချုပ် တဲ့။ သီချင်းလုပ် ဆိုပစ်လိုက်တယ်။
အမေရိကန် လူမည်းတွေလည်း အိုဘားမားကို ဂုဏ်ပြုသီချင်း စပ်ဆိုသင့်တာ
"လူမည်းထဲက တို့ လူမည်း ..ည်း .....ည်း"
"ပျော်စရာကြီးကွယ့် ဒို့ ကိုကွယ်
သူမှပျော်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူ့ သီချင်းနားထောင်ရတာကလည်း ပျော်စရာ ကြီးပါ။
သမ္မတကြီးက ဖိတ်ခေါ်တယ်" တဲ့။ ဟဲ ဟဲ။
ဘာသာရေး အငွေ့အသက်လည်း မကင်းဘူး။
"ရှေးဘဝ ဘဝရဲ့ ရေစက်၊ အခုတစ်ခေါက် ထပ်တွေ့ရမှာပဲ
ဗိုလ်ချုပ်ထဲက တို့ ဗိုလ်ချုပ်...ပ်...ပ်" တဲ့။
ဟိုက်၊ ဒီကိစ္စ ဟိုကောင်လေး ဆက်ရေးပါစေ။
အမှာစကားလည်းပါးသေးတယ် (လူငယ်တွေအတွက်ပဲ နော်၊ ဆောရီးပဲ။ လူကြီးတွေအတွက် မပါဘူး)
မူးယစ်ဆေးဝါး မသုံးကြပါ နဲ့ (ဟဲ့)"။
ချစ်လို့ပြောတယ်မှတ်ကြပါ။ မူးယစ်ဆေးဝါး မသုံးကြပါ နဲ့ (ဟဲ့)။
လူကြီးတွေအတွက် သူ မပြောတော့ ကိုယ်ပြောရတာပေါ့
"ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်ရင် ခစ် လူကြီးများ
အင်း ဦးသိန်းစိန်ကို လူထု တကယ်လက်ခံထားတာက သမ္မတတစ်ယောက် အနေနဲ့ပါ။ ဗိုလ်ချုပ်အနေနဲ့ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒါတွေက ပြင်လို့မရတဲ့ လူထုရဲ့ လက်ခံထားမှုပဲ။
ဗိုလ်ချုပ်လို့ ဆိုလိုက်ရင် (နံမည် မပါရင်တောင်) နိုင်ငံသား လူအများစုက တခြားဗိုလ်ချုပ်တွေကို ကျော်ပြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို ပြေးမြင်ကြတယ်။
ဘာသာရေးမှာလည်း တိပိဋကဓရ ဆရာတော်ကြီးလို့ ဆိုလိုက်ရင် (ဘွဲ့တော်မပါရင်တောင်) တခြား ဆရာတော်ကြီးတွေကို ကျော်ပြီး လူအများ စုကတော့ မင်းကွန်းဆရာတော်ကြီးကို ပြေးမြင်ကြတယ်။
စာပေအသိုင်းအဝိုင်းမှာလည်း အဲသလိုပဲ။ အမေလို့ ပြောရင်လူထု ဒေါ်အမာ ပဲလေ။
ဒေါ်စုကတောင်မှ အခု ရောနေပြီ၊ ဒေါ်စု၊ အန်တီစု၊ အမေစု၊ ဟို အဖွားကြီး၊ စုံလို့ပဲ။
ဦးသိန်းစိန် ဖြစ်နိုင်တာက (သူ စွမ်းရင်) "သမ္မတထဲက တို့သမ္မတ" ပဲ ဖြစ် ဖို့များတယ်။
"ဗိုလ်ချုပ်ထဲက တို့ ဗိုလ်ချုပ်" ကတော့
(အမေရိက က) ဦးသိန်းအောင် ရယ်။
Labels: ဇင်ဝေသော်, ပြုံးစိစိ, ဦးကိုမောင်
BMW (တနင်္ဂနွေ အပျင်းပြေ)
in ပြုံးစိစိ, ဦးကိုမောင် - on 8/11/2013 - No comments
BMW ကို ဂျာမန်လုပ် ကားတံဆိပ်ဆိုတာသိရုံနဲ့ မရတော့ဘူး။ ဟောင်ေ ကာင်မှာဆိုရင် BMW က Blame My Wife (ကျနော့် မိန်းမကိုသာ အပြစ် တင်) အဓိပ္ပါယ်ရှိတယ် တဲ့။
သူတို့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သံသယရှိလို့ မေးလာရင် ဇနီးကို လက်ညှိုးထိုးတတ်ကြလို့ ခေါ်တာမျိုးပါ။
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် မနေ့က Landslide (win) ဘာသာပြန်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး စဉ်းစားမိတယ်။ မြေပြိုကမ်းပြို (အနိုင်ရရှိ) ဆိုလား။
Landslide ကို အလေးပေးလွန်းရာများ ရောက်နေသလားလို့ပါ၊ အပြတ် အသတ် အနိုင်ရသည်၊ အကြီးအကျယ် အနိုင်ရသည် စတာမျိုးဆိုရင် မြန်မာ့ မျက်စိ၊ နားနဲ့ ချောနေတာပဲ။ မြေပြိုကမ်းပြို (အနိုင်ရရှိ) ဆိုတော့ တစ်မျိုးပဲ။
ဒါဆို Shrink (population) ကို ဘယ်လို ပြန်ကြမလဲ။ လူဦးရေ လျော့ကျတယ်ဆိုတဲ့စကားတော့ ရှိတာပေါ့။
ဒါပေမဲ့ တစ်ယောက်ယောက်ကများ Shrink ကိုကြည့်ပြီး လူဦးရေ တွန့်မှု၊ လူဦးရေ ရှုံ့တွမှုဖြစ်တယ်ဆိုရင် စာဖတ်သူ မျက်စိတွေ၊ နားတွေတော့ ဒုက္ခ။ ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာ ပြောလို့ရတာမဟုတ်ဘူး။
အောက်မှာရပ်နေတော့ နားလည်တယ် (understand) ။
အပြင်မှာ ရပ်နေတော့ တစ်မူထူးခြားတယ် ဖြစ်ကရော (outstanding)။
အီးမေးထဲက ရင်ဖွင့်သံ ပြည်က ကိုသရဝဏ်ကြီး ရေးထားတာ။ ကြိုက်လို့။ နည်းနည်း ရှည်တယ်။ ဟဲဟဲ။
in ပြန်လည်မျှဝေခြင်း - on 8/10/2013 - No comments
တစ်ခါတလေကျ စာရေးရသည်မှာ ဝဋ်နာကံနာခံစားရသူတစ်ယောက် လိုဖြစ်နေသည်။ ငွေကြေး စာမူခမှာ မက်မောလောက်ဖွယ် မရှိပါပဲ ဝါသနာ အရ အချိန်ကုန် လူပင်ပန်းခံ၍ ရေးသားရာ၌ လူမုန်းခံရတာ နှင့် တန်ရဲ့ လား ဟု စဉ်းစားမိသည်။ အာဖဂန်နစ္စတန်တွင် ဗုဒ္ဓသာသနာ ကွယ်ပျောက် သွားခြင်းအကြောင်း ဆိုသော ဆောင်းပါးကို ရေးမိတော့ ဘာသာခြားတွေက မုန်းကြသည်။ မှန်တာကို ဝေဖန်ထောက်ပြတော့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိုးကွယ်သူ ပါတီ ဝင်အချို့က ပုတ်ခတ်ဝေဖန်ကြသည်။ အထူးသဖြင့် ထူးကြီး မူးကြီး ဆွေးနွေး ခန်းဟူသောဆောင်းပါး စောင့်ကြည့်ဂျာနယ်မှာ ပါလာတော့ NLD ပါတီအချို့ က ကျွန်တော့ကို အပြစ်တင် ကြသည်။ ဖေစ့်ဘွခ် မှာရော၊ လူချင်းတွေ့ ကြတော့ရော ဝေဖန်ကြသည်မှာ ကျွက်ကျွက်ညံနေသည်။ ကျွန်တော့ကို NLD ဆန့်ကျင်ရေးတွေ ရေးသည်ဟု စွပ်စွဲကြသည်။ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီဝင်ဖြစ်မည်ဟု တစ်ယောက်က သမုတ်သည်။ စစ်တပ်နှင့် ဆက်နွယ်ရမည်ဟု မျက်ကန်းတစ္ဆေ မကြောက်ပြောသူက ပြောသည် ။ထောက်လှမ်းရေးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်မည်ဟု ထင်မိထင်ရာကို ပြောသူက ပြော သည်။
A.B.C.D တောင်တတ်ရဲ့ လား ဟု ရန်တွေ့သူလည်းပါသည်။ ခက်သည်မှာ ကျွန်တော့ဆောင်းပါး၏ ဆိုလိုရင်းကို တကယ်သေသေချာချာ မဖတ်ဘဲ ရမ်းဝေဖန်နေကြခြင်းဖြစ်သည်။ ဖေစ့်ဘုတ်မကောင်းကွက်မှာ လူ တစ်ေ ယာက်က မဟုတ်ကဟုတ်က ခေါင်းစဉ်တစ်ခုတပ် ကာ Post တစ်ခု တင် လိုက်သည်နှင့် လူတို့သည် ထိုခေါင်းစဉ် မှန်သည် မှားသည်ကို မဆန်း စစ်တော့ဘဲ ထိုကိစ္စကို အမှန်ကြီးအလား ရေးကြပြောကြ ဝေဖန် ကြခြင်းပေ တည်း။ ဘယ်ကိစ္စမဆို ကိုယ်ပိုင်ဥာဏ်ဖြင့် ဟုတ်မ ဟုတ် တော် မတော် ဝေ ဖန်ကြခြင်းပေတည်း။
ဘယ်ကိစ္စမဆို ကိုယ် ပိုင်ဥာဏ်ဖြင့် ဟုတ်မဟုတ်တော်မတော် ဝေဖန် ပိုင်းခြားခိုင်းသော ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်၏ ကာလာမသုတ္တံနှင့်တော့ အချို့သူများ မှာ ဖြောင့်ဖြောင့်ကြီး ဆန့်ကျင်နေလေသည်။ ပြောလက်စနှင့် ဆုံးခန်း တိုင်အောင် ပြောပါမည်။ ရေးလက်စနှင့် ရေးပါမည်။ သဘောထားကြီးကြီး ထား၍ ဖတ်တော်မူကြပါကုန်။
ကျွန်တော့်ဘဝတွင် ပထမဆုံးအကြိမ် ရွေးကောက်ပွဲ မဲပေးခွင့်ရခဲ့ဖူးသော ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် NLD ပါတီကို မဲပေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် နှစ်ပေါင်း များစွာ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ဇာတ်မျောနေပြီး ၂၀၁၀ တွင် ရွေးကောက်ပွဲ ထပ်လုပ် ရာ NLD ပါဝင်မလာသဖြင့် မဲတစ်ပြား အလဟသ မဖြစ်စေလိုသောကြောင့် NLD ပါတီအား မဲပေးခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၂ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင်မူ ကျွန်တော် နေထိုင်သော မြို့နယ်မှာ ရွေးကောက်ပွဲမရှိသဖြင့် မဲမပေးခဲ့ရ ပါ။ ရွေးကောက်ပွဲ ရှိခဲ့ပါမူ NLD ကိုပဲ မဲပေး ပါမည်။ ၂၀၁၅ တွင် ရွေးကောက် ပွဲလုပ်ခဲ့လျှင်လည်း NLD ကိုပဲ မဲပေးပါမည်။
ဘာကြောင့် NLD ကို မဲပေး သလဲဟု မေးလာလျှင်မူ လောလောဆယ်တွင် NLD ပါတီထက်ကောင်းသော နိုင်ငံရေးပါတီမရှိဟု (ကျွန်တော်တစ်ယောက် တည်း အယူအဆဖြစ်ပါသည်) ရိုးသားစွာ ယုံကြည်သောကြောင့် မဲပေးဖို့ ဆုံးဖြတ် ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ဆိုလျှင် မေးစရာရှိလာသည်မှာ ကျွန်ေ တ်ာသည် NLD ပါတီဝင်လားဟု မေးလာခဲ့လျှင် မဟုတ်ပါ။ ကျွန်တော့်တစ် သက်တွင် ဘယ်နိုင်ငံရေးပါတီကိုမှ မဝင်ဖူးပါဟု ဖြေရပါလိမ့်မည်။
ဒါဆိုလျှင် NLD ပါတီက ဆောင်ရွက်နေသောလုပ်ငန်းများအားလုံးကို မျက်စိ မှိတ်ထောက်ခံပါသလား၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဘာလုပ်လုပ် ဘာပြောပြော မျက်စိမှိတ်၍ ထောက်ခံပါသလားဟု မေးလျှင် မထောက် ခံနိုင်ပါ၊ သဘောမတူ သော အချက်အလက်များကိုမူ သဘောမ တူေ ကြာင်း ပြောမည်သာ ဖြစ်သည်ဟု အဖြေထွက် ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် အာဏာရှင်စနစ်အောက်သို့ နှစ်ပေါင်းများစွာ ရောက်ခဲ့ခြင်း၏ အကြောင်းများ စွာထဲမှ အဓိကအကြောင်းအချက် တစ်ခုမှာ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ဆည်းကပ်ကိုးကွယ်မှု များလွန်းသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့သည် လူနှင့် မူကိုခွဲ၍ မမြင်နို င်ကြ။ လူကိုခင်သည်နှင့် မူကို ပြင်ကြတော့သည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ခင်၍ တရားမင် ကြတော့သည်။
ဂျပန်ခေတ်တွင်လည်း ဒေါက်တာဘမော်ကို အဓိပတိ အာဏာရှင်ကြီးဟူ၍ တင်မြောက်လိုက်ကြသည်။ မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်ပါတီခေတ်ကလည်း ဦးနေဝင်းဆိုလျှင် ဘုရင်တစ်ဆူပမာ ချီးပ ခဲ့ကြသူတွေ အနားမှာ ဝိုင်းဝိုင်း လည်နေ သည်။ ကပ်ဖားရပ်ဖားတွေ ခြေချင်းလိမ်နေသည်။ ဦးနုခေတ်တွင်လည်း ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုလာလျှင် နင်းလျှောက်သွားရန် ဆံပင်ကို လမ်းခင်းပေးသော အမျိုးသမီးတွေပင်ရှိခဲ့သည်။
စစ်အာဏာရှင်လက်ထက်တွင်လည်း ဟစ်တလာကို နာဇီပါတီဝင်များ က ကြောက်ရသလို ခေါင်းဆောင်ကြီးတစ်ဦးကို နောက်လိုက် များက ဦးထိပ် တင်ခဲ့ကြရသည်။ ခေါင်းဆောင် များကို ကြည်ညိုခြင်း၊ လေးစားခြင်း၊ ချစ် ခင်ခြင်း၊ ထောက်ခံခြင်းသည် ကောင်းပါ၏။ သို့သော် ထိုလူ ဘာလုပ်လုပ်၊ လုပ်သမျှအားလုံးကောင်းပါသည်ခင်ဗျားဟု မျက်စိမှိတ်ထောက်ခံနေခြင်း သည် ဥာဏ်ပညာ မပါသော အပေါ်ယံထောက်ခံခြင်းမျိုး ဖြစ်ပေ သည်။ မြင်း ထိန်း ငတာက သူ၏ ဥတုဘောဇနကျမ်းကို ပစ်ခတ်ထောက်ခံနေတာ ကို ယောမင်းကြီး ဦးဖိုးလှိုင်က လက်မခံခဲ့ပါ။ ပုဆိုးတစ်ထည်ပေးပြီး နောက်ကို ငါ့ကျမ်းအကြောင်း ဘာမှမပြောနဲ့ဟု စကား ပိတ်ပြောခဲ့ရသည်ကို သတိမူသင့်လှပေသည်။
ယနေ့ခေတ်တွင် မြန်မာပြည်နိုင်ငံရေးတွင် အမိမဲ့သား ရေနည်းငါး ဆိုသကဲ့ သို့ ဖြစ်နေပေသည်။ ယခင် နဝတ၊ နအဖ ခေတ် တစ်လျှောက်လုံးက ရှိခဲ့ေ သာ အစိုးရနှင့် အတိုက်အခံဟူသော အင်အားစုတွင် အတိုက်အခံဟူသော (opposition) ဟူသော အင်အားစုမှာ မရှိသလောက်ဖြစ်သွားပြီး နိုင်ငံရေး အင်အား ချိန်ခွင်လျှာပျက်သွားပေပြီ၊ NLD သည် ကြားဖြတ်ရွေးကောက် ပွဲ တွင် အပြတ်အသတ်အနိုင်ရပြီး လွှတ်တော်ထဲသို့ ရောက်သွား သည့်အချိန်မှ စ၍ အာစေးထည့်လိုက်သည့်သဖွယ် နိုင်ငံ့အရေးအရာများတွင် နှုတ်ပိတ်၍ သွားလေပြီ။
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများသည်လည်း နိုင်ငံရေးထက် လူမှုရေး၊ သာရေး နာရေးနယ်ပယ်များသို့ ပို၍ တိမ်းညွှတ်သားလေပြီ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအဝင် တချို့ NLD အမတ်များက ကောင်းမွန်သော မိန့်ခွန်းများ၊ အဆို များ တင်သွင်းသည်ကို ကြားရပါသည်။ (ဥပမာ- ပြည်ထောင်စုအဆင့် အစိုးရ အဖွဲ့ဝင် ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ထုတ်ဖေါ်ကြေငြာရေး အဆို၊ ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်ကို ပြန်လည်ဆင့်မြှင့်တင်ရေးအဆို၊ ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကို အဆင့်မြှင့်တင်မည့်အဆို စသဖြင့်။) ဤသို့ကောင်းမွန်သော အဆိုပြုချက်များ ရှိခဲ့သော်လည်း ပါတီကြီးတစ်ခုလုံးအနေနှင့်မူကား ပြည်သူရှေ့က မားမား မတ်မတ်ရပ်တည် ရာတွင် ယခင်စစ်အစိုးရလက်ထက်ကလို ပြည်သူနှင့် တ သား တည်း အင်တိုက် အားတိုက်မရှိတော့သလို ခံစားရသည်။ အထူးသဖြင့် ရခိုင်အရေးအခင်း၊ ကျောက်နီမော် အရေးအခင်း၊ ကချင်ပြည်တွင်းစစ်၊ စာ နယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့် ကန့်သတ်ထိန်းချုပ်ရန် ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီးဌာနက လွှတ်တော်တွင် ဥပဒေကြမ်းတင်သွင်းခြင်း၊ လယ်သမားများ မတရားမြေယာ သိမ်းခံရခြင်းများအား ပါတီအနေဖြင့် ထိရောက်သော တုံ့ပြန်မှုများ လုပ်ခဲ့ တာ မတွေ့ရပေ။ ကချင်စစ်ပွဲကို တစ်နိုင်ငံလုံးက အုန်းအုန်းကျွတ်ကျွတ် ဆန့် ကျင်ရာ၌ NLD ပါတီသည် ပါဝင်မလာပေ။ ရခိုင်အရေးကို ပထမဆုံး သုံးသပ်ရာ၌ လူနည်းစု၏ အခွင့်အရေးများကို လူများစုက လေးစားရမည် ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က စတင်ပြောကြားခဲ့ရာ မူဝါဒအရ နိုင်ငံ တကာ တွင် လူကြား၍ ကောင်းသော် လည်း မြေပြင်အနေအထားနှင့် မူ ပြောင်းပြ န်ဖြစ်နေခဲ့ သည်။ ဘူးသီးတောင်နှင့် မောင်တောဒေသများတွင် လူများစုမှာ ဧည့်သည် ဘင်္ဂါလီများဖြစ်ပြီး လူနည်းစုမှာ အိမ်ရှင် ရခိုင်နှင့် မြန်မာ တိုင်းရင်း သားများဖြစ်သည်။ ကျူးကျော်ရမ်းကားသော ဧည့်သည်အများစုကြောင့် အိမ် ရှင် လူနည်းစုမှာ ဒုက္ခပင်လယ်ဝေနေ ဆဲဝယ် ဤမှတ်ချက်ကြောင့် မြန်မာနိုင် ငံ သားအများစုမှာ စိတ်ထိခိုက်ခဲ့ကြပါသည်။
ဒုတိယအနေဖြင့် ရခိုင်ဒေသတွင် အချို့ ဘာသာခြားများသည် မယား အများ အပြားယူကာ ကလေးများ အကန့်အသတ်မရှိ ပေါက်ဖွားကြသောကြောင့် လူဦးရေထိန်းချုပ်ရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် တစ်အိမ်ထောင် ကလေးနှစ်ယော က် ဒေ သန္တရအမိန့်ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းအပေါ် လူ့အခွင့်အရေးနှင့်မညီ၍ ကန့်ကွက်ကြောင်း သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုတွင် ပြောခဲ့ပြန်သည်။ ထိုစဉ်က ကျွန်တော်သည် ဤစောင့်ကြည့်ဂျာနယ်မှပင် အမျိုးသားရေးနှင့် လူ့အခွင့်အရေးအမည်ဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်းပါးရေး ခဲ့ဖူးပါသည် ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ကမ္ဘာ့အဆင့်ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သည်နှင့် အညီ နိုင်ငံတကာက လက်ခံထားသော လူ့အခွင့်အရေး စံနှုန်းရှုထောင့်မှ ဤဝေဖန်ချက်ကို ပြောခြင်းဖြစ်သည်။ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌအနေဖြင့် ပြည်ပသို့ ခရီးစဉ်များ ထွက်ခွာသော အခါ မူဆလင်များ၊ ဘင်္ဂါလီများ၊ ရိုဟင်ဂျာဟု သူတို့ကိုယ်သူတို့ အမည်ပေးထားသော ဘင်္ဂါလီများက မကြာခဏ ဆန္ဒပြ ကန့်ကွက်တောင်းဆို ဖိအားပေးသဖြင့် လူ့အခွင့်အရေး စာအုပ်ပေါ် တွင် ခြေ စုံရပ်၍ ဤစကားကို ပြောခဲ့ခြင်းဖြစ်ဟန်တူပါသည်။ သို့သော် ဤကမ္ဘာကြီး၌ လူ့အခွင့်အရေးနှင့် တန်းတူ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးက အလေးထားသော အရာတစ်ခုမှာ အမျိုးသားအကျိုးစီးပွား (National Interest) ဖြစ်ပေသည်။
တစ်ခါတရံ နှုတ်မှ ဖွင့်ဟ မပြောကြသော်လည်း အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကို လူ့အခွင့်အရေးထက် ပို၍ အလေးထားကြသည်ကို လည်း ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ အသီး သီး၏ အစိုးရများ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များတွင် မကြာခဏ တွေ့ရလေသည်။ ကိုယ့်နိုင်ငံအတွက် အကျိုး ရှိမည်ဆိုလျှင် လူ့အခွင့်အရေး စံချိန်စံနှုန်းများ ကို ကျော်လွန်ဆုံးဖြတ် ခဲ့တာတွေလဲ သာဓက အလီလီ ရှိခဲ့ပြီးသားဖြစ် ပါ သည်။
ဥပမာအားဖြင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် အကြမ်းဖက်တိုက်ဖျက်ရေး အ တွက် လိုအပ်လျှင် နိုင်ငံသား တို့၏ တယ်လီဖုန်းကို ကြားဖြတ်နားထောင်နိုင် ခွင့်၊ တရုတ်ပြည်တွင်ကျင့်သုံးခဲ့သော တစ်အိမ်ထောင် ကလေးတစ်ယောက် မူဝါဒ၊ ဂွာတာနာမို အကျင်းစခန်းတွင် မူဆလင်အစွန်းရောက် အကြမ်းဖက် သမား ဟု မသင်္ကာသူများကို တရားမစွဲဘဲ နှစ်ရှည်လများ အမေရိကန် အစိုး ရမှ ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားခြင်း၊
စင်္ကာပူနိုင်ငံတွင် အများပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းများကို မှုတ်ဆေးဘူးဖြင့် မှုတ်ခဲ့သူ ဆယ်ကျော်သက် မိုက်ကယ်ဖိန်းကို စင်္ကာပူအစိုးရမှ မှတ်လောက်အောင် ကြိမ်ဒဏ်ပေးခဲ့ခြင်း စသည်တို့သည် လူ့အခွင့်အရေး ရှုထောင့်သက်သက် မှကြည့်လျှင် မှန်ကန်သော လုပ်ရပ်များမဟုတ်ပါ။ သို့သော် နိုင်ငံတိုင်း၌ လူ့ အခွင့်အရေးနှင့် တမ်းတူအရေးကြီးသော အချက်မှာ ကိုယ့်နိုင်ငံ၏ အမျိုးသား အကျိုးစီးပွားဖြစ်သည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ ထောက်လှမ်းရေးလျှို့ဝှက်ချက်များကို ဖွင့်ချ လိုက်သူ အက်ဒ်ဝပ်စနိုးဒန်းကို လက်ခံ၍ နိုင်ငံရေး ခိုလှုံခွင့်ပေးခဲ့သူ မည် သည့်နိုင်ငံကို မဆို အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု က ကုန်သွယ်ရေး အထူး အ ခွင့် အရေးများ ရုပ်သိမ်းမည်ဟု ခြိမ်းခြောက်နေခြင်းသည် သူတို့နိုင်ငံ(အမေရိ ကန်နိုင်ငံ) ၏အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားအတွက် အသည်းအသန် လုပ်ဆောင်ေ နခြင်း ဖြစ်သည်။ (ယခုအခါ ရုရှားနိုင်ငံက သူတို့အမျိုးသား အကျိုးစီးပွား အ တွက် စနိုးဒန်းကို ခိုလှုံခွင့် ပြုလိုက်လေပြီ) ။ ဒါကို အိုဘားမားရယ် ဒါကသူ့ရဲ့ လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့် လူ့အခွင့်အရေးပဲ။ အရေးမယူ ပါနဲ့ဟု လူ့ အခွင့် အရေးခေါင်းများက သွားပြောလည်း ရမည်မဟုတ်ပါ။ အိုဘားမား သူ့နိုင်ငံ အမျိုးသား အကျိုးစီးပွားအတွက် ပျက်ပျက်သားသားရပ်တည်ခဲ့သလို ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံ အရေး တွင်လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား National Interest ပေါ်တွင် ခြေစုံရပ်၍ ပြတ်ပြတ်သားသား ပြောစေချင်ပါ သည်။
လူ့အခွင့်အရေးသည် ကောင်းမှန်းကျွန်တော်တို့ သိပါသည်။ သို့သော် အမျိုး သား၊ သာသနာနှင့် ယှဉ်လျှင် လူ့အခွင့်အရေးသည် ဒုတိယနေရာမှာ ရှိစေ ချင်ပါသည်။ ပျူခေတ်မှစကာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် တည်တံ့ ထွန်းကားလာခဲ့သော ဗုဒ္ဓသာသနာသည် ကျွန်တော်တို့ခေတ်ရောက်မှ လူမျိုးနှင့် သာသနာပျောက်ကွယ်ဖို့ လမ်းစပေါ်လာသည်ဆိုလျှင် ရင်နာစရာကောင်းပါသည်။ ရာဇဝင်ရိုင်းပါလိမ့်မည်။ ဘုန်းကြီးဆွမ်းခံကြွ ရာတွင် သေနတ်နှင့်လိုက်၍ ရဲက စောင့်ရှောက်ရသော ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းလို အဖြစ်မျိုး လည်း မြန မာနိုင်ငံကို မဖြစ်စေလိုပါ။ (ယခုပင် ဆရာတော်များ တရားပွဲမှာ ရဲအစောင့် အရှောက် နှင့် လုပ်နေ ရလေပြီ) အစိုးရမှာ တာဝန်ရှိသကဲ့သို့ အဓိက အ တိုက် အခံ ပါတီကြီးများမှာလည်း အမျိုးသားရေး တာဝန်ရှိပါသည်။
ထိုကိစ္စများသည် ပါတီအားလုံးနှင့် ဆိုင်သဖြင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ ချုပ်ကိုပဲ ရွေး၍ ပြောနေခြင်းမှာ တရားမျှတမှုမရှိပါဟု အချို့ကလည်း ပြော ကြသေးသည်။ အခြားပါတီများအပေါ် ကျွန်တော်နှင့်တကွ ပြည်သူ လူထု သည် မျှော်လင့်ချက်ကြီးကြီးမားမား မထားခဲ့ကြသဖြင့် ဘာမှ ဝေဖန်အကြံပြု စရာမရှိပါ။ NLD ပါတီသည် အာဏာရပါတီတစ်ရပ်ဖြစ်လာရန် အလွန်နီး စပ်နေသော အနေအထားတွင်ရှိရာ ကိုယ်သံယော ဇဉ်ရှိသောပါတီ လမ်းချော် သွားမှာစိုး၍ စေတနာဖြင့် ရေးနေ ပြောနေရခြင်းဖြစ်သည်။
ဥပမာအားဖြင့် အရပ်ကတာတေလန်နေအောင် ဆိုးသူတစ်ယောက်ကို ဘယ် သူကမှ အမောခံကာ တရားချမနေချင် တော့သော် လည်း လူကောင်း တစ်ေ ယာက် သတိလက်လွတ်ကာ အမှတ်တမဲ့လမ်းမှားသွားမည်ကို စိုးရိမ်သဖြင့် သတိပေးထောက်ပြ နေရခြင်း ပင်ဖြစ်သည်။ ဘယ်သူ ကောင်းသည် ဘယ် သူ ဆိုး သည် ဆိုသည်ကိုမူ လူတိုင်းလူတိုင်း ပါတီတိုင်းသည် ကိုယ့်သမိုင်း ကိုယ် ရေးခဲ့ကြပြီးဖြစ် သည် ပြည်သူလူထုသည် သမိုင်းတစ်လျောက် အဖြူ အမဲကို သဲကွဲခဲ့ကြပြီးဖြစ်သည်။ မြန်မာလူမျိုးသည် ဟင် ဆိုလျှင် မည်သူမျှ လှည့်မကြည့်ချင်ကြတော့ပေ။ NLD သည် ၂၀၁၂ တွင် အတော်ပြောင်းလဲ သွား၏ ။ နှစ်ပေါင်းများစွာ ပါတီအတွက် ထောင်ကျ တန်းကျ ဘဝအပျက်ခံ ၍ ပေးဆပ်ခဲ့ကြသူများ မထင်ပေါ်ပဲ ခါတော်မီဝင်ရောက်လာသော Celebrity များ ရှေ့တန်းရောက်လာတာ တအံ့တသြ တွေ့ရ၏။ (ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေး သုခမိန် များ ၏ အဆိုအရဆိုလျှင် နိုင်ငံရေးတွင် မယုံကြည်ရဆုံး ဘက်အပြောင်း ဆုံး မှာ ရုပ်ရှင်၊ ဂီတ၊ မော်ဒယ် စသော Celebrity များဖြစ်သည်ဟူ၏)
စစ်အစိုးရလက်ထက်တွင် ဒီမိုကရေစီမကောင်းကြောင်း၊ နိုင်ငံရေးသမား များ မှာ တိုင်းပြည်တွင် အဖျက်သမားများသာဖြစ်ကြောင်း မကြာခဏ ပေါ်လစီ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများတွင် စိတ်ပါလက်ပါ သရုပ်ဆောင်ခဲ့သော မင်းသားမင်း သမီးအချို့မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် သွားတွေ့ပြီး ဒီမိုကရေစီ အရေးေ တာ် ပုံကြီးတွင် သူတို့ဘယ်လိုထောက်ခံခဲ့ကြောင်း လက်သီးလက်မောင်း တန်းကြ သည်ကို အညတရ ထောင်ထွက်နိုင်ငံရေး သမားတွေ လည်း ငေး ကြည့်နေရလေပြီး အချို့ကလည်း ကိုယ့်အမေ အရင်းပြောသော စကားကို ပင် ကျွန်မက နားမထောင်၊ အမေစုပြောသောစကား ကိုမှ မြေဝယ်မကျ နားထောင်ပါသည်ဟု ဟစ်ကြွေးလာကြလေရာ မျက်ကန်းတစ္တေ မကြောက် ပြောသူက ပြော၍ ယုံကြည်သူက ယုံကြည်ကြသော်လည်း ကျွန်တော်ကတော့ဖြင့် ကိုယ့်မိခင်စကားကိုမှ နားမထောင် သူသည် အနန္တော အနန္တ ငါးပါးကို ဂရုစိုက်သူ မဟုတ်၊ ခင်ပွန်းကြီးဆယ်ပါးကို ပြစ်မှား သဖြင့်ထောက် လည်း မထောက်ခံ၊ အယုံအကြည် လည်း မရှိပေ၊
လူကြားကောင်းအောင် ပြောသော စကားများသာ ဖြစ်သည်။ ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည် အနားတွင်လည်း အကြံကောင်း၊ ဥာဏ်ကောင်းပေးနိုင်သော လူများ အနား မကပ်နိုင်ပဲ၊ ခရိုနီများ၊ ကပ်ဖားယပ်ဖားများ၊ ခါတော်မီ နိုင်ငံရေး သမားများ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ကိုးကွယ်သူများ၊ စိန်နားကပ်အရောင်နှင့် ပါးပြောင်ချင် သူများ၊ အခွင့်အရေးသမားများ၊ Celebrity များသာ ဝိုင်းဝိုင်း လည်နေသည်။
ကိုယ်တိုင်ကအရည်အချင်းရှိသည် ဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေ ၂၀၁၅ တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အရှိန် NLD အရှိန်ဖြင့် ဝင်တိုးလိုက် လျှင် အ မတ်အချောင်ဖြစ်နိုင်သည်ဟု မျှော်လင့်ချက်ဖြင့် ဝင်ကပ်သူ များလည်း မရှားပေ။ တိုင်းပြည်ကို တကယ်ချစ်၍ ထောက်ခံသူ များ ပင် မျက်စိ လည်နိုင်စေသော အခင်း အကျင်းများ ဖြစ်သည်။ ဤသို့သော အခြေအနေ တွင် မျက်စိရှင်သူများက ကိုယ်မြင်သမျှသိသမျှကို စေတနာဖြင့် သတိပေးထောက်ပြသောအခါ ပြောဆိုဝေဖန်သူကို အပြစ်မလုပ်အပ်ပေ။ ငါတို့ အကျိုး ကိုလိုလား လို့ ပြောတာပါလား ဟုသာ ခံယူအပ်၏။ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးသမိုင်း၌ အင်အားအကြီးမားဆုံးပါတီကြီးတစ်ခု ဖြစ်သော ဗမာပြည် ကွန်မြူနစ် ပါတီ သည် သူ့ပါတီကို ဝေဖန်ထောက်ပြလာသူတိုင်းကို တောတွင်းသို့ မရမက ဖိတ်ခေါ်၍ ဖြုတ်ထုတ်သတ် လမ်းစဉ်ဖြင့် သားကအဖေကိုသတ်၊ တပည့်က ဆရာကိုသတ်ဖြင့် ဘီလူးဆိုင်းတီး ၍ ထွက်လိုက်ရာ တစ်ခါမှ အာဏာ မရ လိုက်ဘဲ အကွဲကွဲအပြားပြားဖြစ်ကာ မလှမပဇာတ်သိမ်း သွားလေ သည်။
မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်ပါတီခေတ်တွင်လည်း ဝေဖန်ရေးကို တစ်စိုး တစ်စလုပ်မိသည်နှင့် ပါတီ၏ ရန်သူသတ်မှတ်ပြီး ဒုက္ခမျိုးစုံပေးခဲ့ကြရာ မဆလ ပါတီ ဘယ်လိုနိဂုံးချုပ် သွားသည်ကိုလည်း ပြောပြစရာပင် လိုမည် မဟုတ်ချေ။ ပါတီတစ်ခု၊ ပါတီခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ကို အမြဲတမ်း ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်နေခြင်းသည် ထိုပါတီကို ချစ်ရာမရောက်၊ နှစ် ရာရောက်နေပေသည်။ NLD ပါတီ၌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ကိုးကွယ် ကြခြင်းမှာ လိုသည်ထက်ပိုနေသည်ဟု ကျွန်တော်ထင် သည်။ မော်စီတုန်းကို ဘုရားတစ်ဆူ ဂူတစ်လုံး ကိုးကွယ်ခဲ့ကြသော တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီမှ လူ ငယ်လေးများကိုသာ သတိရမိလေ သည်။
ဒီလှိုင်းစာစောင်ကို ထုတ်ဝေရာ၌ပင် ဂျာနယ်မျက်နှာဖုံး၌ တစ်ခါလာ လဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပုံဖြစ်နေ သည်။ မျိုးဆက်သစ် ပါတီဝင်များ၏ ပုံကို မျက်နှာဖုံးတင်တာ တစ်ခါမှ မတွေ့ဖူးပေ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို တကယ်ချစ်ကြပါမူကား မဟုတ်လျှင် မဟုတ်၊ မမှန်လျှင် မမှန်ဟု ပြောရဲကြဖို့ လိုပေမည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်၌ကလည်း လက်ညှိုးထောင်ခေါင်း ညိတ်သမား သက်သက်များကို အလိုရှိမည် မဟုတ်ပေ။ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရတနာတစ်ပါးဖြစ်သည်ကို ကျွန်တော် မငြင်းလို၊ တိုင်းပြည်အတွက် တစ်ဘဝလုံး ပေးဆပ်အနစ်နာခံခဲ့ သည်များကိုလည်း ချီး ကျူးလေးစားပါသည်။ ကမ္ဘာကလေးစား ရသော ရှားရှားပါးပါး ပညာတတ်ေ ခါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်သည်ကိုလည်း သဘော ပေါက်သည်။ အနာဂတ်မြန်မာ့နိုင်ငံရေးတွင်လည်း ပညာတတ်အရပ်သား အစိုးရအုပ် ချုပ် မှသာ တိုင်းပြည် ကောင်းစား မည်ကိုလည်း အကြင်းမဲ့ ယုံကြည်သည်။
သို့သော် ကျွန်တော်ပြောလိုသည်မှာ လူတစ်ယောက်ကို မျက်စိမှိတ်ထောက် ခံနေမှ ချစ်ရာကျသည်မဟုတ်၊ ယထာဘူတ ကျကျအမှန်အတိုင်း ကြည့်မြင် တတ်သော အဆင့်သို့ ကိုယ့်ဘာသာမြှင့်ကြရမည်ဖြစ်သည်။ ယခုမြင်ရ သည် ကား NLD ပါတီ အပြန်အလှန်ထိန်းညှိမှုစနစ် ( Check and Balance ) ပျက် သုဉ်း နေသည်။ အုပ်ချုပ်ရေး တရားစီရင်ရေး၊ ဥပဒေပြုရေး မဏ္ဍိုင်ကြီး သုံး ရပ်မှသာ Check and Balance လိုသည်မဟုတ်။ ပါတီကြီးတစ်ခု၏ အာဏာ ပိုင် အဖွဲ့အစည်းတွင်လည်း တစ်ဦးတည်းသဘောဖြင့် ပုံအပ် ထားခြင်းမျိုး မရှိ ဘဲ အပြန်အလှန် ထိန်းညှိစေရန် Check and Balance ရှိစေချင်သည့် သဘော ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ ရှိလာစေရန် ပါတီသည်ပို၍ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိဖို့၊ ကိုယ့်ပါတီကိုယ် ဝေဖန်ရေးကို ရဲရဲလုပ်ကြဖို့၊ လူငယ်တွေကို ပို၍ လုပ်ပိုင်ခွင့်ေ ပးဖို့၊ ဗဟိုကော်မတီတွင် သတ်သတ်မှတ်မှတ် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ ရှိဖို့၊ လူမှန်နေ ရာ မှန် ရွေးချယ်ကြစေဖို့၊ လူတစ်ယောက်ကို မူတည်၍ ပါတီကို မောင်းနှင်ေ နခြင်းမျိုး ထက် ရေရှည်အစီအမံများနှင့် ပါတီမူဝါဒများကို အခြေခံကာ လူထု ကို ဦးဆောင်ကာ စည်းရုံးလှုပ်ရှားကြဖို့ ဆိုလိုရင်းဖြစ်သည်။
NLD ဖွဲ့စည်းပုံသည် တိဘက်လွတ်လပ်ရေး လှုပ်ရှားမှုကို ခေါင်းဆောင်သော ဆရာတော် ဒလိုင်းလားမားတို့ အဝေးရောက်တိဘက် အစိုးရနှင့် ခပ်ဆင်ဆင် တူသည်။ တိဘက်ပြည် လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုကို ဒလိုင်းလားမား ဆရာေ တာ် တစ်ပါးတည်းကိုသာ အားထားပြီး လုပ်နေကြရာ ဆရာတော် အိုမင်း မ စွမ်း ရှိလာသောအခါ သူ့နေရာဆက်ဆံပြီး ထိထိရောက်ရောက် အလုပ်လုပ် မည့် သူမရှိဘဲ နိုင်ငံရေးအရ ဆက်ခံမည့်သူမရှိ၍ တော်လှန်ရေး အညွန့် ကျိုးရတော့သည်။ ၂၀၁၅ တွင် NLD ပါတီနိုင်သည်ကို ကျွန်တော်မြင်လိုပါ သည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သမ္မတ ဖြစ်သည်ကို ကျွန်တော် မြင်လိုပါ သည်။ လူ့အခွင့်အရေးနှင့် ဆတူ၊ အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကို ဦးစားပေး စဉ်း စားကာ ကျွန်တော် မြင်လိုပါသည်။
ထိုနည်းတူပင် ငါ့လူကိုမထိနဲ့ဟု မျက်စိမှိတ်၍ အရာရာကို ထောက် ခံနေ ကြ သော၊ အစိုးရဘက်၊ အတိုက်အခံဘက်မှ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိုးကွယ်မှုများ ပပျောက်သွားကာ လူထက်မူကို ဦးစားပေးအုပ်ချုပ်ကြသည်ကို ကျွန်တော်မြင်လိုပါသည်။ တိုင်းပြည်ကလည်း ထိုသို့ပင် မျှော်လင့်နေကြ ပါသည်။
၁၃-၈-၂၀၁၃ ရက်ထုတ် စောင့်ကြည့် ဂျာနယ်မှ ကူးယူဖော်ပြသည်
မူရင်း ပျောက်နေတဲ့ အင်္ဂလိပ်ဟာသ တချို့ (Tommy Cooper one liners. )
- on 8/10/2013 - No comments
ကား အက်ဆီးဒင့် အကြီးအကျယ် ကြုံခဲ့ရတဲ့ လူတစ်ယောက် ဆေးရုံးရောက်လာပြီး သတိပြန် လည်လာတော့ အလန့်တကြားနဲ့ သူကပြောတယ်
"ဒေါက်တာ ကျနော့်ခြေထောက်တွေမှာ ဘာ ခံစားမှုမှ မရှိတော့ဘူး"
"ဟုတ်တယ်၊ မရှိနိုင်တော့ဘူး။ ကျနော် ခင်ဗျားလက်နှစ်ဖက်လုံးကို ဖြတ် ပစ်လိုက်ရတယ်"
'I know you can't, I've cut your arms off'.
ဒီနေ့ မနက်စောစောမှာ လူနှစ်ယောက်ပဲ စီးလုိ့ရတဲ့ Cessna လေယာဉ် သင်္ချိုင်းထဲ ပျက်ကျမှုဟာ အိုင်ယာလန်မှာတော့ အဆိုးရွားဆုံး အဖြစ်အပျက် တစ်ခုပါပဲ။ လက်ရှိအချိန်အထိ လူသေအလောင်းပေါင်း ၂၈၂၆ လောင်း အိုင်ရစ်ရှ် ရှာဖွေရေးနဲ့ ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေက တွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီ ညပိုင်းမှာ ဆက်လက်တူးဖော်နေဆဲဆိုတော့ လူအသေအပျောက် အရေ အတွက် အများကြီး တက်လာစရာရှိတယ်လို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်။
Si Thu Kyaw Come round ကို သတိပြန်ရလာသည် ဆိုပိုလှမယ်
ကမ်းလက် ဟုတ်တယ်၊ အဲဒါ ပိုလှတယ်။ သတိပြန်လည်လာပြီး ....အလန့်တကြားနဲ့
Si Thu Kyaw သူ့ အနက်ကလည်းအဲဒါပဲဆိုတော့လေ
ကမ်းလက် ဝန်ခံရမှာပါ၊ ဖေ့စ်ဘုတ်ဆိုတော့ "ကီး" ကို ယူပြီး ချက်ချင်း ရိုက်၊ တင်တာလေ။ တစ်ခုရှိတာက အင်္ဂလိပ်ပါပေးထားတော့ တာဝန်ပေါ့တဲ့ အသိပါပါတယ်။ ဒုတိယဂျုတ်မှာလည်း လုံးစေ့ပတ်စေ့ ပြန်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျေးဇူးပါ ကိုစည်သူကျော်
ကဲ ဗျာ၊ ဖြစ်ရချည့်
Zaw Win ဘာသာပြန်မှားနေတော့ ပထမ ဟာသက မရယ်ရဘူး။ ဒေါက်တာ၊ ဒေါက်တာ ကျနော့်ခြေထောက်ကို စမ်းကြည့်တာ မတွေ့တော့ဘူး။ လို့ဖြစ်ရမှာ....
Ko Thant သူကတော့ အမှားသက်သက် ပဲ ဟုတ် တယ် ကျနော် လဲ အစ ဖတ် ပြီး ဟာသ လို့ လဲ ပြောတယ် ပေါ့ ...
သူ့မှာ လက်နှစ်ဖက်ပါ အဖြတ်ခံထားရပါတယ်ဆို ဘာနဲ့ သွား စမ်းကြည့်မှာ လဲ။ ကြည့်လည်း လုပ်ကြပါအုံး။
ဒီဟာသရဲ့ အနှစ်က လူနာခမျာ လက်ပါ မရှိတော့တာကို မသိရှာသေး ဘူး ဖြစ်တယ်။
ကျနော် ပြောပါကော၊ မူရင်း ပျောက်နေတဲ့ အင်္ဂလိပ်ဟာသ တချို့ လို့။
in စာဖတ်သူသို့ပြန်စာ, ဇင်ဝေသော် - on 8/10/2013 - 1 comment
"နောက်ဆုံး နံပါတ် ၈ ကို စာမျက်နှာ scan (သို့) original စာသား၊ စာမျက်နှာ နံပါတ်လေး ပါ တင်ပေးလို့ ရမလား ခင်ဗျာ...။ စာတမ်း တခုထဲ ထည့်သုံးချင်လို့ပါ။ ကျေးဇူးပါ"
ပြန်လို့ အဆင်ပြေမယ့် အီးမေးလိပ်စာနဲ့ဆိုရင် အီးမေး ပြန်ပေးပါမယ်။ ရှစ်ချက်က ကျနော် ခြုံဆွဲတဲ့ ကောက်ချက်ပါ။
အင်္ဂလိပ်လို သိပ်မရသေးသူတွေ မျက်စိနောက်မှာ စိုးလို့ မတတ်နိုင်မှပဲ အင်္ဂလိပ် လိုတင်ချင်လို့ပါ။
နောက်ပြီး ထွက်စ စာအုပ်မုိ့ original စာသားတွေ အင်္ဂလိပ်လို တင်ဖို့ မသိုး
ပစ္စုပ္ပန်၊ အတိတ်၊ အနာဂတ်တွေကလည်း စာဖတ်သူတွေအတွက် မြန်မြန်နဲ့ ရှင်းရှင်းဖြစ်အောင် ကျနော်ပဲ ခွဲပေးလိုက်တာပါ။
နှုတ်ခမ်းမွှေးချစ်သူ (မောနင်း ပိုစ်၊ ဟာ ဟ)
in ဇင်ဝေသော်, ပြုံးစိစိ, ရပ်သတင်း ရွာသတင်း - on 8/10/2013 - No comments
နှုတ်ခမ်းမွှေးကြောင့် ပြန်ပေးအဆွဲ ခံခဲ့ရပြီး ဂူထဲမှာ တစ်လ လှောင်ပိတ်ခံ ထားရပြီးပြီ။
မဖြတ်ရင် ခေါင်းအဖြတ်ခံရမယ်လို့ တာလီဘန် လက်အောက်ခံ အဖွဲ့က ခြိမ်းခြောက်ပြီးပြီ။
မိသားစုကို စွန့်မယ်၊ ပါကစ္စတန်ကို စွန့်မယ်၊ နှုတ်ခမ်းမွှေးကိုတော့ မစွန့်နိုင်တဲ့။
သူက ပါကစ္စတန်နိုင်ငံသား စီးပွားရေးသမား Malik Amir Mohammad Khan Afridi တဲ့။
သူ့ နှုတ်ခမ်းမွှေးက ၇၆ စင်တီမီတာရှည်တယ်၊ ကျွဲချိုနဲ့ ဆင်ဆင်တူတယ်။ အဲ့ဒီ နှုတ်ခမ်းမွှေးကြောင့် သူ့ကို လူတွေက အလေးထားကြတယ်လို့ ယုံကြည်တယ်။ သူက စတားပဲ။
ဒါကို ကြည့်မရတဲ့ တာလီဘန် လက်အောက်ခံ အဖွဲ့က ပြန်ပေးဆွဲပြီး မဖြတ် ရင် ခေါင်းဖြတ်မယ်ကြုံးဝါးလို့ ဖြတ်ခဲ့ရတယ်။ အခု ထပ်ရှည်နေတော့ သတ် မယ် ဖြတ်မယ် ဖုန်းတွေ ဝင်ဝင်လာတယ်။
သူ့မှာ ကလေးဆယ်ယောက်ရှိတယ်။ သူတို့ကလည်း ဒီနှုတ်ခမ်းမွှေးကို ကြည့်မရလို့ ဖြတ်ဖို့ပြောကြတယ်။
"မိသားစုကို စွန့်မယ်၊ ပါကစ္စတန်ကို စွန့်မယ်၊ နှုတ်ခမ်းမွှေးကိုတော့ မစွန့်" တဲ့။
ပေးထားတာကတော့ အံ့ဖွယ်နှစ်ဆယ့်နှစ် (၂၂ ) ခုပါ။ ရှည်လို့ အကြိုက် ဆုံး နှစ်ခုပဲ ရွေးလိုက်တယ်။
၁။ မပြောင်းလဲတဲ့ သဘောတရား
ဘောလုံးပွဲတွေမှာ ဒီနေ့သုံးနေတဲ့ ခရာ (ဝီစီ) ဟာ ၁၈၈၄ ခုနှစ်ကတည်းက ဘာမင်ဂန်မြို့သား ဂျိုးဇက် ဟုဒ်ဆင် တည်ထွင်တဲ့ ခရာ (ဝီစီ) ပါတဲ့။ အပြောင်းအလဲများစွာနဲ့ ဘောလုံးလောကမှာ ခရာ (ဝီစီ) ကတော့ အရင် အတိုင်းပါပဲ။ ပြောင်းဖို့ကောင်းပြီ။ ကြားရကြာတော့ ငြီးငွေ့တယ်။ ဘာနဲ့ ပြောင်းရင် ကောင်မလဲ။ လုပ်ကြပါအုံး။ စစ်အစိုးရထက် သက်တန်း ရှည်နေပြီ။
၂။ အင်္ဂလိပ်မန်နေဂျာ ချန်ပီယံ မရှိ
ဒါက အင်္ဂလိပ်တွေ ဘယ်လောက်တော်သလဲဆိုတာရဲ့ သက်သေပဲ။ ပရီမီးယားလိဂ်ဖလား ရဖူးတဲ့ အင်္ဂလိပ်လူမျိုး မန်နေဂျာ မရှိသေး။ မယုံရင် ကြည့်။
အဲလက်စ် ဖာဂူဆန် (မန်ယူ) နဲ့ ကင်နီ ဒပ်ဂလစ်ရှ် (လစ်ဗာပူးလ်)၊ စကော့တ်လူမျိုး။
ကာလို့ အန်ဆယ်လော့တီ (ချယ်လ်ဆီး) နဲ့ ရောဘာတို မန်ချိနီ (မန် စီးတီး)၊ အီတလီလူမျိုး။
အာဆင် ဝင်းဂါး၊(အာဆင်နယ်) ပြင်သစ်။
စပယ်ရှယ် ဝမ်း မော်ရင်ငြို (ညို)၊ (ချယ်လ်ဆီး) ပေါ်တူဂီ။
ကဲ... ဘယ်မလဲ အင်္ဂလိပ်လူမျိုး???
Labels: ဇင်ဝေသော်, ပြုံးစိစိ, ရပ်သတင်း ရွာသတင်း
လူတော်လူကောင်းများရောက်သွားလျှင် ငရဲပြည်လည်း တိုးတ...
သရဲကြီးလ နှင့် နံရံ၏ အခြားတစ်ဖက် (တိရောကုဋ္ဋ) သုတ္တန်...
သေမင်း - ခင်ဗျားကြီးကိုတင်းနေတာကြာပြီ (ဒဂုန်တာရာ အ...
စာမဖတ်သူ ပပျောက်ရေးနဲ့ အာရပ် နွေဦး (မောနင်းပို့စ်...
သင်းကွဲလိပ်ပြာများရဲ့ ရင်ခုန်သံကို ခံစားခြင်း ( ၇ ...
လားရှိုးသိန်းအောင်တို့ သွက်ချက်တော့ (ဦးကိုမောင် (ြ...
အီးမေးထဲက ရင်ဖွင့်သံ ပြည်က ကိုသရဝဏ်ကြီး ရေးထားတာ။ ...
မူရင်း ပျောက်နေတဲ့ အင်္ဂလိပ်ဟာသ တချို့ (Tommy Cooper...
ရှိခြင်းနှင့် အသုံးပြုခြင်း (ကျောင်းတွင်းမှတ်စု)
လီကွမ်းယု ဆွဲထားတဲ့ မြန်မာပြည်ရဲ့ ကောက်ချက် (၈) ချ...
အရှေ့တောင်အာရှမှာလည်း သေနတ်တွေအများကြီး၊ ဒါပေမဲ့
ဆန်းသစ်ခြင်း (Innovation) ဆိုတာ
အီးမေးထဲက ဥက္ကံ အကြောင်း
Buddhist vihara in Jakarta
ဗလာဒီမာ ပူတင်က မိုက်သားပဲ
ကိုယ်ကျင့်တရားရေးရာနဲ့ ဥပဒေအားဖြင့် သာတူညီမျှ ရှိမ...
လီကွမ်းယုရဲ့ "One Man's View of The World"
တနင်္ဂနွေ အပျင်းပြေ (ပဟေဠိ)
"စော်ကားကြပြန်ပြီ တစ်ခါ" (Insult again!)
လိပ်တစ်ကောင်ရဲ့ အားသာချက် ၆ ချက်
သစ္စာနယ်အဝင် ခရီးကြမ်း (သုံး) - ဥယျာဉ်မှားနေတဲ့ သစ်...